ခရီးသည်၏ လွင့်မျောခြင်း: March 2009
တလအတွင်း သတင်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက် ( သို့ ) ဖြစ်ပုံစုံလင် ဤတလတွင် ( မတ်လ )
၂၀၁၀ သို့ အချိန်ရထားကြီး ဆိုက်လာတော့မယ်။ နအဖသည် အောင်ခြင်းများစွာနှင့် အတွင်းအပြင်ကို အပြီးအသတ် ရှင်းလင်းရန် မနက်အာရုံဦး၏ တုံးမောင်းခေါက်သံလို ကြားရနေပါပြီ…
ငါတို့ မိန်းနေမလား ငါတို့ ရှိန်းနေမလား ငါတို့ စိမ်းနေမလား …
ငါတို့ ဘေးမလာခင် ပြေးမတွေ့သော်လည်း…
ဝေနေမလား ယောင်နေမလား ဟောင်နေမလား ….
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဒဏ်ကို အဆိုးဆုံးခံစားရသည့် သူများကတော့ လက်နက်ကိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသား သူပုန်အဖွဲ့များ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပြည်ပ မြန်မာ့အတိုက်အခံအဖွဲ့ အတော်များများကတော့ မြို့ပေါ်မှာ အများအားဖြင့် လှုပ်ရှားနေရသဖြင့် တော်ယုံနှင့် ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဒဏ်မခံစားနိုင်လောက်ပါဟု ထင်မိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာတွင် သက်တမ်း ရှည်ကြာဆုံး သူပုန်အဖွဲ့ ဖြစ်သော KNU ကရင်သူပုန်အဖွဲ့ဟာ စစ်အစိုးရ၏ ထိုးနှက်ချက်များစွာ ခံစားနေရသည်ကို တွေ့ရှိသည်။ နောက်ဆုံး ပွဲသိမ်း ရိုက်ချက်ကတော့ စစ်အစိုးရဟာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ကရင်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဖိအား ပေးလိုက်တာပဲ၊ ဒါလည်း လောင်စာ ဒီပလိုမေစီလို့ ဆိုရမလား၊ ဈေးပေါပေါနှင့် လိုချင်တော့ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ်မှာ ကရင် သူပုန်တွေဟာ ထိုးကြွေးခံလိုက်ရသည့် နှယ်ရုပ်လေးသဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ အခင်းအကျင်းအရ နယ်စပ် သူပုန်များဟာ ယခု အခြေအနေမှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအတွက် အကျိုး မရှိသလောက်ကို ဖြစ်နေတဲ့ အနေအထားပါ။
အရင်တုန်းကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ကွန်မြူနစ်တွေ အင်အားကြီးမား မလာနိုင်အောင်အတွက် အမျိုးသားရေးနွယ်သည့် နယ်စပ် သူပုန်တွေကို ခြံစည်းရိုးခပ်ပြီး ထိုင်းကွန်မြူနစ်ကို နှိပ်ကွပ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး စီတိုး စာချုပ်အရ ထိုင်းနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး ကစားခဲ့သည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ဗိုလ်ချုပ်မြဟာ ဌာနချုပ် မာနယ်ပုလောကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသည့်အချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံရေး မူဝါဒနှင့် ကရင်သူပုန်တို့ဟာ နီးကပ်စွာ ရှိခဲ့တယ်။ သည်ခေတ်တုန်းကတော့ အမျိုးသားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် သူပုန်တွေ အတွက်တော့ ဘုန်းမီးနေလ တောက်ပအချိန်တခုပေါ့။
အမျိုးသားရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေသော မြန်မာ့ တိုင်းရင်းသား သူပုန်တွေနှင့် ထိုအချိန်များက တရုတ်ကွန်မြူနစ် အားကိုးဖြင့် အင်အား တောင့်တင်းနေတဲ့ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီတို့ဟာ ဘယ်လို့မှ အစေးမကပ်ခဲ့ပါ၊ ဒါလည်း ထိုင်းနိုင်ငံက ချမှတ်ပေးခဲ့သော ကွန်မြူနစ် ဆန့်ကျင်ရေး အတွေးအခေါ်များသည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အတွင်း စိပ်ဝင် လက်ခံ ကျင့်သုံးခဲ့လို့ ဖြစ်တယ်။ ဘုံရန်သူအား တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုအသွင် ဖေါ်ဆောင်ရန်အတွက် အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးပမ်း ဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း စစ်ရေး မဟာမိတ်လောက်သာ သဘောတူညီချက်မျှ ရရှိခဲ့သည်။
အကျိုးရလဒ်ကတော့ မြန်မာ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးဟာ ဟိုတုန်းက အခြေအနေများက အင်အား ချို့တဲ့နေရပြီး လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ဖြင့် အပြီးသတ် အောင်ပွဲဆင်မည့် အရေးတော်ပုံဟာ ရေ မျက်နှာပြင်အပေါ်မှာ အရုပ်ရေးခဲ့သလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အကယ်လို့များ အရင်တုန်းက အင်အား အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ကရင် သူပုန်အဖွဲ့ဟာ စစ်မှန်တဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်ခဲ့ရင် တော်လှန်ရေးဟာ တမျိုးတဖုံ ရှိနေမှာတော့ သေချာပါတယ်။ ဤအခင်းအကျင်းအတွက် အဓိက ဇာတ်ဆောင်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံပါပဲ။
မန်းဘဇံ လက်ထက်တုန်းကတော့ ကရင်သူပုန်များဟာ ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် အနီးကပ်စွာ တည်ရှိခဲ့တယ်။ မန်းဘဇံ အုပ်စုကို အမျိုးသားရေး ကရင်အုပ်စုက ကရင် ( အနီ ) လို့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲခဲ့တယ်။ သို့ဗေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မြ အာဏာ ရရှိလာခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကရင်နှင့် ကွန်မြူနစ်တွေဟာ မူဝါဒအရ အကြီးအကျယ် သဘောထား ကွဲလွဲခဲ့ရပြီး ကရင့် အချို့ တပ်မဟာဒေသများ၊ အထူးသဖြင့် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ လှုပ်ရှားဒေသနှင့် နီးစပ်သည့် ကရင် တပ်မဟာ တချို့သာ စစ်ရေး အရ သဘောတူညီချက်မျှ ပြုလုပ် ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ စစ်ရေး အကျိုးတူ ( ရန်သူလှုပ်ရှားမှု သတင်းပေး ) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မျှသာ ဖြစ်ပြီး စစ်မှန်သည့် မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု အသွင်ဆောင်သည့် ပုံစံတခုကို ချမှတ် မဆောင်ရွက်ခဲ့ပေ။
ကွန်မြူနစ် ရန်စွယ်လည်း ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် မရှိသလောက် ဖြစ်နေပြီ...
ပြသာနာက ရေရည် လောင်စာအတွက် ဈေးပေါတယ်တဲ့ သဘောဝဓါတ်ငွေ့ ကို ထိုင်းက လိုချင်တာ အမှန်ဖြစ်တယ်။ ပထ၀ီ အနေအထားအရ တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးဒေသနှင့် မုတ္တမကွေ့အတွင်းရှိ ဓါတ်ငွေ့ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ စစ်အစိုးရအတွက်လည်း ရောင်းဖို့နိုင်ငံက အနီးဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံပဲ ရှိတာလေ။ ဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ မွေးစားထားတဲ့ ကရင်သူပုန်ကို အမွေပြတ်စွန့်လွတ်ခြင်း ကြေညာခံပါမှာ သေချာတယ်။ သည်တော့ စစ်အစိုးရ ဆန္ဒအရ ထိုင်းကတော့ ကရင်တွေကို လက်နက်ချခိုင်းပြီး နအဖ၏ နိုင်ငံရေး တွက်ပေါက်ဖြစ်သော ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်အောင် အတင်းအကြပ် တိုက်တွန်းခံရမည်။
သို့သော် ကရင်သူပုန် အနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဖိအားကို ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုလျှင် ကရင့်တော်လှန်ရေးဟာ ချိနှဲယုံမှတပါး ကျဆုံးနိုင်မည် မဟုတ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကရင်လူမျိုးအတွက် ငတ်ပြတ်မှုဟာ ရိုးရာလို ဖြစ်နေတယ်။ အနည်းဆုံး ဆန်နှင့် ဆား ရှိရင်၊ လူသူပေါက်ရောက်နည်းတဲ့ တောတောင်တွေ ရှိရင်၊ သူတို့ တော်လှန်ရေးဟာ ဆက်လက် ရှင်သန်နေဦးမှာပါ။ နောက်ဆုံးဗျာ တောတွေကို မီးတိုက်ပြီး ရှင်းလင်းရင်တောင်မှ အလေ့တကျ ပြန်ပေါက်လာတဲ့ ဖလန်တောင်ဝှေးပင် ရှိရင် သူတို့အတွက် ဗီတာမင် ဖြစ်တယ်။
ပြီးနောက် အကြောင်းမျိုးစုံဖြင့် ကရင့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို တွေဝေသွားသည် ဖြစ်ဖြစ်၊ စိတ်ကုန်သွားသည် ဖြစ်ဖြစ် မိခင်အဖွဲ့အစည်းအား စွန့်ခွာခဲ့သော မျိုးချစ်သော ကရင်လူမျိုး အတော်များများဟာ ဒုက္ခသည် အဆင့်အတန်းဖြင့် နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တွေကို ရောက်နေတယ်လေ၊ ခြွင်းချက်အဖြင့် ပြည်ပရောက် ကရင်အုပ်စုများ၏ အကူအညီဟာလည်း KUN အတွက် အားဆေးတခွက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် နအဖဟာ နယ်စပ်တကြောမှာ ရှိတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားအောင် အစီအစဉ်ရှိရှိ ဆောင်ရွက်မှာ သေခြာသည်။
ဤ စခန်းတွေဟာ ကရင့်တော်လှန်ရေးအတွက် ကြားခံဒေသ ဖြစ်နေသည်ဟု စစ်အစိုးရက ယုံယုံကြည်ကြည် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် နအဖ၏ ပထမ ခြေလှမ်းအရ ကရင် လက်နက်ချ တပ်မှူးကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ထိန်မောင် ( ခေါ် ) ဗိုလ်ဌေးမောင်ကို ကရင်ဒုက္ခသည် မရှိပါဆိုပြီး အစီအရင်ခံစာ ရေးခိုင်းပြီး ကုလ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ ကင်တားနားထံ တင်ခိုင်းလိုက်တာလေ။ နောက်ပြီး ကင်တားနာ မြန်မာပြည်ကို လာတုန်းက ကရင်ပြည်နယ်ကို လိုက်လံ ပြသခဲ့တာဟာလည်း နယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများအား တိုက်ဖျက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်ဟု ထင်၏။
ယခုနှစ် အာစီယံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီး ထိုင်းနှင့် မြန်မာဟာ ပိုပြီး နီးကပ်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ ထူးခြားဆုံးကတော့ ကေအင်ယူ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း အခြေချ နေထိုင်ခွင့်၊ လှုပ်ရှားခွင့် ပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဤသည်မှာလည်း ဆိုးထဲက အကောင်းတခုလို မြင်တယ်။ နို့မို့ရင် ခေါင်းဆောင်တွေဟာ မြို့ပေါ်တော်လှန်ရေးမှာ စီးဝင်ပြီး မူးယစ်သွားမည့်ဒဏ်၊ အထက်အအောက် ကွာဟမှုများမှ လွတ်ကင်းသွားလိမ့််မည်။ ဆိုလိုသည်က အောက်ခြေတပ်သားများနှင့် တသားတည်း တောတောင်တွေထဲမှာ တော်လှန်ရေးတခု ဆင်နွဲရမည့် အနေအထားတခုသို့ ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်သည်။
ကေအင်ယူမှာ အထက်အောက် ကွာဟမှုဟာ ဒဏ်ရာရရှိပြီးနောက် ထင်ကျန်ရစ်တဲ့ အမာရွတ်တခုလို ဖြစ်နေတာ ဒီကေဘီအေ ခွဲထွက်ခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်အား အထင်ကရ ကြည့်မြင်နိုင်သည်၊ ခရစ်ကို ယုံကြည်တဲ့ လူမှသာလျှင် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်ခွင့်ရပြီး တော်လှန်ရေး အဆီအနှစ်တွေ ခံစားရတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ပိုးကရင် အများစုဟာ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိမဖြစ်ပဲ တောတောင်တွေမှာ ချို့တဲ့စွာ ရှင်သန်နေခဲ့တဲ့သည့်က တကြောင်း၊ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိဖြစ်ချင်လျှင် ခရစ်ယာန် ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းမှသာလျှင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် ရှိသည့်က တဖုံ၊ ဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မြဟာ အလွန်စွာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လူတယောက်ဖြစ် ကရင် တမျိုးသားလုံးက မြင်နေပြီး အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့၏ တလိပ်ခဲခဲ ခံစားမှုများကို တင်ပြနိုင်စွမ်းမရှိသဖြင့် လိုက်လျော မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်က တကြောင်း၊ တပ်ဖွဲ့စည်းမှုအရ အထက်အောက် ကွာဟပြီး အလယ်အလတ်ခေါင်းများဟာ အထက်ဆိုတဲ့ လူကြီးကိုသာကြည့်ပြီး အောက်ခြေ ရဲဘော်များ၏ ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုထားသည့် အကြောင်းများကြောင့် ကရင်တော်လှန်ရေး သမိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံး ခွဲထွက်မှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။
ဆိုတော့ တော်လှန်ရေး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုခဲ့သော နာမည်ရ စာရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ မောင်သာရ၏
“ ဆူးစူးဝင်၍ အပ်နှင့်ထွင်သည် အသင်ဘာပြောချင်သနည်း။ ” စကားလုံးအရပေါ့၊ ရင်ဘတ်အတွင်း စိုက်နှက်ခဲ့ရသော ဆူးများ စူးဝင်ရပြီ ဆိုလျှင် မည်သူမဆို ဤဆူးကို ဖြစ်တဲ့နည်းဖြင့် ဆွဲနှုတ်ရတယ်၊ ဇာဂနာဖြင့် ဆွဲနှုတ်သည်ဖြစ်စေ၊ အပ်ဖြင့် ထွင်သည် ဖြစ်စေ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကို မကြည့်နိုင်တော့ပဲ လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ ဆူးဒဏ်ကို အလျင်စလိုနှင့် ဖြစ်သလို ရှင်းခဲ့ရသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများသည့် တော်လှန်ရေး သမိုင်းကြောင်းကလည်း ဓါတ်ပြားဟောင်းတချပ်ပေါ်က အပ်ကြောင်းရာတွေလိုပါပဲ။
ထိုကဲ့သို့ အဖြစ်အပျက်များလည်း ကရင့် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးမှ မဟုတ်ပဲ၊ ပြည်တွင်းစစ်အတွင်း စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးတွင် အသွင်သဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မြနှင့် အထက်ပိုင်း ခရစ်ဘာသာဝင် ခေါင်းဆောင်များ၏ မူဝါဒသည် ဗုဒ္ဒဘာသာကို ယုံကြည့်ခဲ့သော ပိုးကရင် အများစုအတွက် ဘာသာရေး ဆူးတချောင်းအဖြစ် စူးနစ် ၀င်ရောက်လာသည်။ နှစ်ရှည်လများ အမျိုးသားရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် တိုက်ပွဲဝင်လာသော အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့များ၏ ဆူးကို ထုတ်နှုတ်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိဆုံး ဖြေရှင်းမှုဟာ လက်နက်ကိုင်ပြီး တန်ပြန် ပုန်ကန်မှုသာလျှင် ဗုဒ္ဒဘာသာ ပိုးကရင်များ၏ ထွက်ပေါက်တခု မြင်ခဲ့တယ်။ အကယ်၍ အထက်အောက် အပြန်အလှန် ကြိုတင် ညှိနှိုင်းခဲ့လျှင် သို့တည်းမဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်မြ၏ ပဒေသရာဇ်ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ထားသည့် အခွင့်အာဏာကို ကြိုတင် လျှောချနိုင်ခဲ့လျှင် အခုလို ပြောင်းလဲလာမှာ မဟုတ်။
ကြုံတုန်းပေါ့ … မောင်သာရ၏ တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ “ ဆူးစူးဝင်၍ အပ်နှင့်ထွင်သည် အသင်ဘာပြောချင်သနည်း။ ” စကားလုံးက မြန်မာပြည်ကနေ လွတ်မြောက်နယ်မြေကို ရောက်စမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ သူ့ရဲ့ ဒဿန ဖြစ်တယ်၊ ကိုအောင်ဝေး၏ “ ရန်ငှါ မပြတ်လို့ သံဃာ အသတ်ခံရတယ် ” စကားလုံးလိုပေါ့။ သေချာတာက မြန်မာပြည်ဟာ သူ့အတွက် အကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပြည်ပကို ထွက်ခွာလာတယ်။ အတိုက်အခံတချို့က သူ့အပေါ် အမြင်မရှင်းခဲ့ဘူး။ အမြင်မရှင်းခဲ့သည်ဆိုရာတွင်လည်း သူထွက်လာသည့်အချိန်၊ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ သူ့အကျိုးအတွက်ပဲလို့ လူတွေက မြင်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဝေဖန်ဒဏ် အနည်းအများကို သူ ကောင်းကောင်း ခံစားရခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆူးစူးဝင်တော့ အပ်နှင့် ထွင်သည့် စကားစုကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဟုတ်လဲဟုတ်တာပဲ နိုင်ငံရေးတွေ လာမပြောနဲ့ ငါ့ဘ၀ လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် ငါ့ခြေထောက်မှာ ဆူးစူးနေသည်ကို ငါ့ အပ်နှင့် ငါထွင်သည်ဆိုတဲ့ သူ့အကျိုးဖြင့် ဆိုင်သော စကားလုံးတခု သူ့ ရင်ဘတ်အတွင်းမှ ထွက်ကြလာတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုလိုတာက သူ့တကိုယ်ရည် တော်လှန်ရေး စကားစု တခုဟု ထင်ပါတယ်။
အားလုံးပါပဲ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနှင့် ယှဉ်လာရင် အဓိက ရည်မှန်းချက်တွေ မှေးမှိန်သွားရတယ်လေ။ ဒါလည်း ကချင်သူပုန်တွေကို ပြောနေသလို ဖြစ်နေတယ်။ ကချင်တော်လှန်ရေး ရပ်တည်မှုဟာ အကြမ်းအားဖြင့် ကြည့်ရမယ်ဆိုလျှင် သူတို့အတွက် ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းက တရုတ်နိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ တရုတ်ဟာ သူ့ အကျိုးအတွက် နအဖကို ရင်ချင်းအပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကချင်သူပုန်အတွက် ဘေးကျပ်နံကြပ် ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ဖိအားကတော့ နအဖ၏ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးအောက်မှာ လည်စင်း ခံရလိုက်သည်။
ဒီလိုနဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ဆယ်စုနှစ်များ ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးနောက် ကချင်တပ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် သဘောထားကွဲလွဲမှုအများ ပေါ်ထွက်လာပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီတော့ သူတို့၏ ထွက်ပေါက်ကို အသည်းအသန် ရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နအဖ၏ ဒုတိယ စကားလုံးဖြစ်တဲ့ လမ်းပြမြေပုံ အောက်ကို လိုလိုလားလား လျှိုဝင်သွားရတဲ့ အဖြစ်….
“ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ရုပ်သေးအရပ်သား အစိုးရတက်လာသည့်အချိန်တွင် လက်နက်ချရေး ပြောလာပါက လက်နက်ချရန်အသင့်ရှိကြောင်း …..”
ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နအဖနှင့် မလျှော့မတင်း လုပ်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ ငြိမ်းအဖွဲ့အတွက် သို့လော သို့လော သဘောထားတွေေ၀၀ါးစွာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ ကိုယ်က လမ်းကြောင်း စ ဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားသည်လို့ ထင်၏။ နိုင်ငံရေးဂွင်ထွင်ပြီး အကျိုးများများ ရအောင် လုပ်တာပဲ မြင်မိလိုက်တယ်။ ရင်လောက်မှန်းမှ ဒူးလောက် ကျန်သည့် စကားလိုပေါ့။
ဥပမာအားဖြင့် ရှမ်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့များဟာ နအဖနှင့် အစောဆုံး “ ငြိမ်း” လိုက်တော့ အခွင့်အရေး အတော်များများဟာ တခြားအဖွဲ့များထက် သာ၍ အကျိုးစီးပွားများ ရရှိခံလိုက်တယ်လေ။ ဒါကို ကြည့်ပြီး ကချင်တွေလည်း နအဖ၏ နောက်ဆုံး စကားစု ဖြစ်သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီး ရှေးရှု့နေသည့် လမ်းပြမြေပုံကို ပထမဆုံး အနေဖြင့် လျောဈေးချပေးတာ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်။ အနည်းဆုံးတော့ တင်းပြည့် မရရင်တောင်မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိသော ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေးများ ရမလားဆိုတဲ့ အတွေးများဖြင့်ပေါ့။ အင်း ဒါလည်း သူ့လူမျိုးအတွက် ချစ်လွန်းလို့ လုပ်လိုက်တယ်လို့ အကောင်းဖက်က မြင်ရသလိုဖြစ်နေပြီ။
သူတို့မှာလည်း ပစ်ဖို့ ကျည်ဆံကုန်နေပြီလေ။ တရုတ်ဖက်က ပိတ်ထားတာ၊ နောက်ပြီး ဓါတ်ငွေ့ကို တရုတ်သို့ ပိုက်လိုင်းဖေါက်ပြီး ရောင်းချရမယ်ဆိုတော့ ပိုက်လိုင်း လမ်းကြောင်းဖြစ်သော ကချင်တို့၏ နယ်မြေအတွင်း လှုပ်ရှားနေတဲ့ အဖွဲ့အားလုံးဟာ တရုတ်ဖိအားဖြင့် စစ်အစိုးရကို မချစ်သောလဲ အောင့်ကာနမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ ဆိုတော့ တရုတ်ဆန္ဒအရ လက်နက်စွန့်ရမှာ သေချာတယ်။
ဒေသဆိုင်ရာ အနေအထားအရ တရုတ်အကျိုးစီးပွား အကြီးအကျယ် မထိခိုက်သော ၀ ဒေသအတွင်း လှုပ်ရှားနေသည့် ( ငြိမ်း ) ၀ သူပုန်တွေဟာ နအဖ အစိုးရနှင့် စစ်အေးတိုက်ပွဲ ပုံစံဖြင့် နိုင်ငံရေး ကစားခွင့် ရရှိနေတယ်။ ၀ အဖွဲ့ဟာ သူတို့၏ အခြေခံဒေသများ တိုးချဲ့ပြီး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသများကို တိုးတက် တောင်းဆိုနေသည်ကို တွေ့ရှိ့ရသည်။
နောက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ၀ တပ်ဖွဲ့ကို လက်နက်ချသည့်အထိ ဖိအာ မပေးနိုင်လိမ့်မည် မထင်၊ ၀ ဒေသသည် တရုတ်၏ အကျိုးစီးပွားဖြစ်သော ဓါတ်ငွေ့  ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းသည့် နေရာများနှင့် ဝေးစွာ တည်ရှိနေတယ်။ နောက်တခုက ၀ ဒေသ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း မပျံနှံနိုင်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် တရုတ် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ၀ အဖွဲ့၏ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များနှင့် နီးကပ်စွာ ရှိနေမှ သေချာသည်။
ဒါကြောင့် တရုတ်အနေဖြင့် ၀ သူပုန်အဖွဲ့ကို ပုံစံတခုဖြင့်တော့ ကူညီ ထောက်ပံမှုတွေ ပေးရမည့် အနေအထား ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တခုက တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ စစ်ရေးဗျူဟာအရ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၀ တပ်ဖွဲ့ကို ၀ှက်ဖဲ တချပ်လို အသုံးပြုနိုင်တယ်။ ၀ တပ်ဖွဲ့သည်လည်း တရုတ်ကို နီးကပ်ပေါင်းသင်းပြီး ဒေသအတွင်း၌ သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ဒေသများ တိုးတက် တောင်းဆိုခြင်းဖြင့် စစ်အစိုးရကို အကျပ်ကိုင်မှာ သေချာတယ်။
နောက်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါး ပြသာနာဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအတွက် အတော်ဆိုးဝါးစွာ ခံစားနေရတယ်။ မြန်မာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ရှိနေပါက မူးယစ်ဆေးဝါးများသည် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း ဈေးကွက်ဟာ အထူးရှင်သန် နေတယ်လို့ ထိုင်းအစိုးရက ယုံကြည်နေတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း သုံးစွဲနေသည့် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံမှ မော်ဖီးယားများ၊ မြန်မာပြည်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသည့် လူမျိုးစုတပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်လက် တိုက်ခိုက်နေသည့် လူမျိုးစု သူပုန်အဖွဲ့များမှ လာသည်ဟု ၎င်းတို့က ယူဆနေသည်။ ဒါကြောင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအဖွဲ့ကို ဖြစ်တဲ့နည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်မှာပဲ။ သူပုန်တွေဖက်က မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် မရပ်တည်ဘူးဟု ဖြေရှင်းချက်ထုတ်သော်လည်း ထိုင်းအနေဖြင့် သူ့အကျိုးကို ကြည့်ပြီး အင်အားချိနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ဖိအားပေးနည်းလမ်းဟာ သူတို့ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီနည်းလမ်းလည်း နအဖ၏ ဖိအားတခုလို့ မြင်တယ်။
နောက်ဆုံးတော့ အမေကျာ်ပြီး ဒွေးတော်လွမ်းပဲ ဆိုဆို၊ အဖေကျော်ပြီး ဘကြီးတော် တမ်းတပဲ ပြောပြော ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားကိုပဲ မျှော်မှန်းတမ်းတ မလိုလို ဖြစ်ရတဲ့အဖြစ် ဆိုက်ရောက်လာလေတော့သည်။
“ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အတိုက်အခံများအပေါ် တင်းကျပ်ထားမှုများ လျှော့ပေးလျှင် လာမည့်လ အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန် ဥရောပကောင်စီက မဲပေးနိုင်သည်…”
“ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ မြန်မာ စစ်အစိုးရအပေါ်ထားရှိခဲ့သည့် ပေါ်လစီ မပြောင်းမခြင်း အတိုက်အခံများနှင့် စစ်အစိုးရဟာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အမေရိကန်က ဖိအားပေးမည် ”
ဆိုသော သတင်းများဟာ ရသေ့စိတ်ဖြေသလို အားရလောက်ပါတယ်။ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲဖြင့် အပြီးသတ် အောင်ပွဲဆင်မည့် မြန်မာ့အတိုက်အခံ တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုင်းရင်းသား သူပုန်အဖွဲ့များ၏ မတူကွဲပြားသော အနေအထားတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာကို အားကိုးရမည့် အနေအထား ဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်။
သည်လို ထင်မြင်လိုက်သည်ကလည်း စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသည် လမ်းပြမြေပုံအား ဘောင်တခုချပြီး တဖက်သတ် ဆွေးနွေးနေတာက ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေး ပြသာနာ ဖြေရှင်းနိုင်မည် မဟုတ်သည့်အတွက် မြင်တယ်။
နိုင်ငံတကာ၏ တောင်းဆိုနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတိုက်အခံများကို လွတ်ပေးပြီး နိုင်ငံပြသာနာများကို ဖြေရှင်းမှသာ တိုင်းပြည် ရေရှည် ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း လွင့်မျောရင်းဖြင့် ဤတလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သတင်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်အား ထိုမျှသာဖြင့် ရပ်နားပါရစေ…
Posted by လူလ at Tuesday, March 31, 20093comments:
သတင်း မှတ်စု ( ၁၃ )
မတ်လ ၂၃ ရက်
ရက်သတ္တပတ် ၁၃ ၊ ၂၀၀၉
UDP ပါတီနှင့် မပတ်သက်ဟု ဦးသုဝေ ငြင်းဆို
ကနေဒါနိုင်ငံရှိ (ကျုံယွမ်) ဦးကျော်မြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) သည် ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း ခေတ်ပြိုင်နှင့် သီးသန့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးသုဝေက ငြင်းဆိုလိုက်သည်။
သို့သော် ဦးသုဝေသည် အဆိုပါပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကြောင်း ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) ၏ ၀ဂ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် http://udpmyanmar.blogspot.com/ တွင် ဦးသုဝေ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်တကွ ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါ ၀ဂ်ဆိုက်တွင် UDP ပါတီမှ ဦးကျော်မြင့်၏ ရာထူးကို Ex Vice Chairman ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ဦးကျော်မြင့်၏ UDP ပါတီနှင့် မပတ်သက်ကြောင်း ဦးသုဝေကငြင်းဆိုသော်လည်း UDP ပါတီက ထုတ်ပြန်ထားသော မူဝါဒသဘောထားနှင့် UDP ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းစာတမ်းများကို ဦးသုဝေကိုယ်တိုင် ရန်ကုန်တွင် ဖြန့်ဝေမှုများ ပြုခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်ရှိ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။
ထို့ပြင် ရန်ကုန်မြို့မှ ရှေ့နေဦးရဲထွန်းမှတဆင့် ဦးကျော်မြင့်နှင့် အဆက်အသွယ်ရခဲ့ကြောင်း၊ ပါတီဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စ များ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းကိုမူ ဦးသုဝေက ၀န်ခံပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်ရှေ့နေ ဦးရဲထွန်းနှင့် ကနေဒါနိုင်ငံရောက် ဦးကျော်မြင့်တို့ မည်သို့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ကြောင်းကိုမူ ဦးသုဝေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောဆိုမသွားပေ။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆိုပါပါတီ ထောင်သည့်အချိန်၌ ဦးကျော်မြင့်က ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်ဟု ဦးသုဝေက ပြောသည်။
လောလောဆယ်တွင်မူ ပါတီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဦးရဲထွန်းနှင့် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသာ လှုပ်ရှားနေပြီး ပါတီဖွဲ့ဖြစ်ပါက ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု သမီး ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းသမီး ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဘဆွေသမီး ဒေါ်နေရီဘဆွေတို့ ပါဝင်မည်ဟုလည်း ဦးသုဝေက အတိအလင်း ပြောဆိုသွားသည်။
ဦးသုဝေသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်မပေးရမည့် နာမည်ပျက်စာရင်း အသွင်းခံထားရ သော်လည်း ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (UDP) နှင့် ပတ်သက်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ပြီးမကြာခင် စစ်အစိုးရက ဦးသုဝေအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ မကြာခင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဆေးကုသွားမည်ဟု ဦးသုဝေက ပြောသည်။
ယင်းခရီးစဉ်ကို ဦးရဲထွန်းထံ အသိပေးသွားမည်ဖြစ်ရာ ဦးရဲထွန်း၏ ဆက်သွယ်မှုကြောင့် ဦးကျော်မြင့်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံကောင်း တွေ့ဆုံနိုင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ခေါ်ယူတွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဦးသုဝေက ပြောသည်။
ဦးသုဝေ၏ ဇနီးမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်နေသည့်အတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ ခေတ်ပြိုင်က မေးမြန်းရာ ရွေးကောက်ခံတဦး မဖြစ်နိုင်သော်လည်း နိုင်ငံအကျိုးအတွက် ဆက်လုပ်သွားမည်ဟု ဦးသုဝေက ပြောသည်။
မြင်းခြံမြို့ ကလေးငယ်အချို့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့ တိုးချဲ့ရပ်ကွက်တခုမှ ကလေးငယ် ၈ ဦး ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်သဖြင့် ဆေးရုံတက်နေရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ် နှောင်းပိုင်းမှ စတင်ကာ တိုးချဲ့ကွက်သစ် ခေါ် အမှတ် ၁၈ ရပ်ကွက်မှ ကလေး ၁၅ ဦးခန့် ဝမ်းလျှောရာ ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပြီး၊ ယခုအခါ ၈ ဦးခန့် ဆက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ဆေးရုံဝန်ထမ်းက ပြောသည်။ ယခုလို ဖြစ်ရခြင်းသည် အိမ်ခြေ ၁၅ဝ-၂ဝဝ ခန့်မှ အရပ်သားများ သောက်သုံးနေသည့် ရေကန်အတွင်း ဝင်းသန့် ငပိစက်မှ မသန့်စင်သည့် ရေများ စီးဝင်နေရာမှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ဒေသခံနှစ်ဦးက ဆိုသည်။
ငပိစက်မှ စွန့်ပစ်သည့် အညစ်အကြေးများမှာ စက်ရုံတောင်ဘက် ဗလပိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိ ရေကန်တွင်းသို့ စီးဝင်နေသည်ဟု သူတို့က ပြောသည်။
ဆေးရုံတက် ကုသရာ ကိုယ့်စရိတ်နှင့်ကိုယ် ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၂ သောင်းမှ ၃ သောင်းအထိ ကုန်ကျသည်။
ကလေးငယ်များ ဆေးရုံတက်ရပြီးနောက် မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာနက ရေတွင်းများ၌ ပိုသတ်ဆေးများ ဖြန်းပေးခဲ့ရာ အနံ့ဆိုးသဖြင့် သောက်သုံးရန် ခက်ခဲနေသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
စက်မှု ၁ ၀န်ကြီးဌာနမှ ကြံ့ဖွတ် အမတ်လောင်း ၃ ဦး လျာထား
၀န်ကြီးဌာနပေါင်းစုံမှ ပင်စင်ယူကာနီး အကြီးတန်းအရာရှိများကို ကြံ့ဖွံ့အမတ်လောင်းအဖြစ် လျာထားရာ စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၃) ဦးပါဝင်သည်ဟု စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးရုံး အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးသိန်းမောင်အား ရခိုင် (ကြံ့ဖွံ့) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ထွေထိန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးမောက်အား မလှိုင် (ကြံ့ဖွံ့) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် စက္ကူဓာတုလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးညွန့်အောင်အား မိုးညှင်း(ကြံ့ဖွံ့) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လျာထားကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၃) ဦးလုံး စစ်ဘက်အရာရှိများသာဖြစ်ပြီး ပင်စင်သွားတော့မည့်သူများ ဖြစ်သည်။
( ခေတ်ပြိုင်သတင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် )
ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား လေဖြတ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်ထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတဦး ယခင်လက လေဖြတ်သွားကြောင်း ယင်းထောင်နှင့် နီးစပ်သူများထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အသက် ၂ဝ နှစ်အရွယ် ကိုမောင်မောင်သက်သည် ခြေနှင့်လက်များ လှုပ်ရှား၍ မရဘဲ ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထောင်တွင်းရှိ အကျဉ်းခန်းများမှာ အစဉ်ပင် စိုစွတ်အေးစက်နေသဖြင့် ယင်းသို့ လေဖြတ်ရခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထောင်နှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဆိုသည်။
လေဖြတ်သွားသူ အပါအဝင် အခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဖြစ်သော ကိုမိုးနိုင်စိုး၊ ကိုချစ်မောင်မောင်၊ ကိုသန်းလွင်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့၌ သူတို့၏ အကျဉ်းခန်းများ အတွင်းမှနေ၍ တဦးနှင့်တဦး စကားလှမ်းပြောသဖြင့် ထောင်ဝါဒါ ဦးစိန်ထွန်း၏ ရိုက်နှက်မှုကို ခံခဲ့ကြရသေးသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) - အေအေပီပီ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်ကမူ သူတို့သည် တောင်ကုတ်မြို့နယ်မှ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ)၊ ၂၉၅ တို့ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ခွဲစီ ကျခံနေရသူများဖြစ်ကြောင်း မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သို့သော် သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားနေသည်ဟုသာ သိထားပြီး အသေးစိတ် မသိရသေးကြောင်း သူက ဆိုသည်။
၀င်းသူဇာ ဆိုင်များကို ရတနာမန်းက အေးဂျင့် ယူ
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ၀င်းသူဇာ အရောင်းဆိုင်များ အရှုံးပေါ်လွန်းသည့်အတွက် ပြင်ပ အရောင်းအေးဂျင့် များကို လွှဲပြောင်းရာ ရတနာမန်းကုမ္ပဏီက အရောင်းအေးဂျင့်တာဝန်ယူလိုက်သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းက ၀င်းသူဇာဆိုင်များ၏ နေ့စဉ်ရောင်းရငွေကို သိန်းမည်မျှရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားရာ သတ်မှတ်ငွေမရသည့် ဆိုင်တာဝန်ခံများ အိတ်စိုက်သွင်းရခြင်း၊ အရောင်းစာရင်းလိမ်ပြရခြင်းတို့ကြောင့် ဆိုင်တာဝန်ခံအချို့ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေသည်ထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်များ ငွေကြေးမသမာမှုများ မဖြစ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရယက ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များက ဝိုင်းစောင့်ရှောက်ရမည်ဆိုပြီး စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်ခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ဟု ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ဝင်းသူဇာအရောင်းဆိုင်များကို တပြည်လုံး မြို့ကြီးအတော်များများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန ထွက်ကုန်စည်များ ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်၊ စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်၊ အုပ်ချုပ် ရေးရည်မှန်းချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း မကြာခဏ ပြောလေ့ ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ် ဖိရူမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂ ရက်ကြာခရီးစဉ်ကို ယမန်နေ့က စတင်လိုက်သည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း မကြာခဏဆိုသလို ထိုင်းကမ်းခြေ ဒေသများသို့ ရောက်လာသော တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများအရေး ဆွေးနွေးသွားမည်ဟု စနေနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တရားဝင် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မစ္စတာ ကဆစ် (Kasit Piromya) သည် ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းနှင့်တွေ့ဆုံ၍၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကိုလည်း တွေ့မည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ဆိုထားသည်။
မစ္စတာ ကဆစ်သည် ၁၄ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း - အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း၏ ဖိတ်ကြားခဲ့ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ကဆစ်သည် သူ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ‘တရားမဝင် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ကိစ္စနှင့် လူမှောင်ခိုမှု ဆန့်ကျင် တားဆီးရေး ကိစ္စများ’ အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမည်။
ခေတ်ပြိုင် ပုံနှိပ်ဂျာနယ် ခေတ္တ ရပ်နားမည်၊ အွန်လိုင်း ဆက်ရှိနေမည်
လစဉ်ထုတ်ဝေသည့် ခေတ်ပြိုင်ပုံနှိပ်သတင်းဂျာနယ်ကို ၂၀၀၉ ခု မေလမှစ၍ ခေတ္တရပ်နားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခေတ်ပြိုင်ပရိသတ်များအား ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။
၁၉၉၃ ခု ဇန်န၀ါရီ (၁) ရက်မှစ၍ ယခု ၂၀၀၉ ခု ဧပြီလအထိ (၁၆) နှစ်နှင့် (၃) လတိုင် အခက်အခဲ အမျိုးမျိုးကြားမှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ခေတ်ပြိုင်ပုံနှိပ်သတင်းဂျာနယ်ကို ခေတ္တရပ်နားရသည့်အတွက် စာဖတ်ပရိသတ်များအား အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်သွားမည့် အခြေခံမူဖြင့် ထုတ်ဝေသွားမည်ဟု ခေတ်ပြိုင်ဦးစီးတည်ထောင်သူ ဦးတင်မောင်ဝင်းက ခံယူခဲ့ပါသည်။ ထိုအခြေခံမူများအရ ပြည်သူဘက်မှ ခိုင်မာစွာရပ်တည်၍ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရေးသားခဲ့ရာတွင် ခေတ်ပြိုင်သတင်းဂျာနယ်သည် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ဆန္ဒနှင့်ခံစားချက်များကို ရှေ့တန်းတင်ဖော်ပြသော “ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးသတင်းဂျာနယ်” အဖြစ် စာဖတ်ပရိသတ်များ၏ ယုံကြည်မှုကို ခံယူရရှိခဲ့ပါသည်။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ နှင့် တိုင်းပြည်ကိုစိုးမိုးထားသော စစ်အုပ်စုတို့ ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှသာ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုကရေစီခေတ် ပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မည်ဟု ခေတ်ပြိုင်က ယုံကြည်သည်။ ဒီမိုကရေစီမဏ္ဍိုင်ပီသစွာဖြင့် အမှန်တရားကို စွမ်အားရှိသရွေ့ ခေတ်ပြိုင်က ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်ပြိုင်အွန်လိုင်းကိုမူ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက် ထုတ်ဝေသွားမည်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ် သိမ်းပိုက်လယ်ယာတွင် ပိုင်ရှင်များ ပြန်လုပ်ခွင့်ရ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မကွေးတိုင်း အောင်လံမြို့နယ်ရှိ မြန်မာ့ဦးပိုင်စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း ပိုင်ဆိုင်သည့် ရုံးဆိပ် သကြားစက် အာဏာပိုင်များက ဒေသခံ တောင်သူများထံမှ သိမ်းယူခဲ့သော လယ်ယာအချို့ကို ပိုင်ရှင်များ ပြန်လုပ်ခွင့် ပေးလိုက်သည်။
အဓမ္မသိမ်းယူခဲ့သည့် လယ်ယာမြေမှာ ဧက တသောင်းကျော် ရှိသော်လည်း လတ်တလော၌ ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် (အိုင်အယ်အို) အမှုအမှတ် ၆၆ တွင် အကျုံးဝင်သော လယ်ယာဧက ၂,ဝဝဝ ကျော်သာ ပြန်လည်လုပ်ပိုင်ခွင့် ရနေခြင်းဖြစ်သည်။
အိုင်အယ်အိုမှ Steve Marchall နှင့် နအဖ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ယုလွင်အောင် တို့ အောင်လံသို့ လာရောက်၍ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အမှုအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်နေသူ အောင်လံမြို့မှ ဦးအေးမြင့်က ပြောသည်။
အဆိုပါ အမှုများအတွက် အိုင်အယ်လ်အိုသို့ တိုင်ကြားရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသူ အောင်လံမှ ကိုဇော်ဌေးကို စစ်အစိုးရက ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပြီး သရက်ထောင်သို့ ပို့ထားသည်။ ကိုဇော်ဌေးအတွက် မကွေးတိုင်းတရားရုံးတွင် အယူခံတင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သူ၏ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူကိုလည်း မကွေးတိုင်းတရားရုံးက ယခုလ အတွင်း ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ်ချမှတ်လိုက်ပြီး သရက်ထောင်သို့ ပို့လိုက်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ တရားမဝင် နယ်စပ်ကျော် မြန်မာများ အဖမ်းခံရမှု ပိုများလာ
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ နယ်စပ်တလျှောက်မှ တရားမဝင် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်လာသည့် မြန်မာများကို ဖမ်းဆီးမှုမှာ ယခုတလော ပိုများလာကြောင်း နယ်စပ် သတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၇ ရက်အတွင်း နေရာ ၃ နေရာတွင် အဖမ်းအဆီး ၄ ကြိမ် ရှိခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုဖြင့် တရားရုံးတင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤအကြောင်းကို ဘန်တရိုဘန် ရဲစခန်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အတွင်း ဘင်္ဂလား-မြန်မာ ရေပိုင်နက် ပြဿနာ ဖြစ်ခဲ့သည့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်း နောက်ပိုင်းမှ စတင်၍ တရားမဝင် ဝင်လာသည့် မြန်မာများကို ဖမ်းဆီးရန် ဘန်တရိုဘန်ခရိုင်မှ ညွန်ကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
နတ်ချောင်းမြို့ ရဲစခန်းမှ တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းတဦးကလည်း “ကျနော်တို့ နယ်မြေထဲမှာ အရင်ကဆို တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဖမ်းတာ နည်းတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လက တလအတွင်း မြန်မာ ၃ ယောက်ကို တရားမဝင် လက်နက် ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းခဲ့တယ်။ တရားမဝင် နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်မှုကတော့ မရှိခဲ့ဘူး” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အတွင်း မြန်မာဘက်က ခြံစည်းရိုးကာရန်အတွက် စစ်အင်အား တိုးချဲ့လာချိန်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့် တပ်အနေဖြင့် နယ်စပ် အနီးတဝိုက်ကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်နေချိန်တွင် တရားမဝင် ဝင်လာသည့် မြန်မာများကို ဖမ်းဆီးမှု ပိုများလာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နတ်ကျောက်စရီမှ အမည်မဖော်လိုသည့် ထောက်လှမ်းရေးတဦးက ပြောသည်။
နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အခြေစိုက် ရခိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အချို့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများကို မကြာသေးခင်က ပြန်ပေးဆွဲမှု လုပ်ခဲ့သည့် အချက်မှာလည်း အဖမ်းအဆီး များစေရသည့် အကြောင်းရင်းတရပ် ဖြစ်ကြောင်း တန်းဆိပ်ဒေသမှ ရွာလူကြီးတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မတ်လ ၂၄ ရက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖမ်းဆီးထားခြင်းသည် စစ်အစိုးရ ကိုယ့်ဥပဒေကိုယ် ချိုးဖောက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က ကိုယ့်ဥပဒေကို ကိုယ်ချိုးဖောက်ရာကျသကဲ့သို့ နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလည်း ချိုးဖောက်ရာကျကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
တရားလက်လွတ် ဖမ်းဆီးမှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဥပဒေရေးရာ သုံးသပ်ချက်တွင် ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတနိုင်ငံအား ကိုယ့်ဥပဒေကို ကိုယ်ချိုးဖောက်ကြောင်း ဝေဖန် သည်မှာ ပြောရိုးပြောစဉ်မဟုတ်ဟု ဆန်းစစ်သူများက ပြောသည်။
ယင်းသို့ ကုလသမဂ္ဂက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရုတ်တရက် လွတ်မည်ဟု မထင်သော်လည်း နအဖအား ကာကွယ်ပေးနေသည့် တရုတ်၊ ရုရှ စသည့် နိုင်ငံများအပေါ် ဖ်ိအားပေးနိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂအပေါ် အရေးပါသည့် ဂယက်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးနေသူ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမှ ရှေ့နေ ဂျရတ် ဂျင်ဆာက ပြောသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်အမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှေ့နေဦးကြည်ဝင်းကမူ ယခုလ (၁၃) ရက်တွင် အယူခံကိုကြားနာပေးပါရန် ၀န်ကြီးချုပ်ထံ မေတ္တာရပ်ခံစာကို ပေးပို့ထားသည်ဟု ပြောသည်။
အယူခံကို ၉-၁၀-၂၀၀၈ ခုနှစ်ကတည်းက တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သော်လည်း နအဖစစ်အစိုးရဘက်က ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံစာများ ပေးပို့ခဲ့သည်မှာ လေးကြိမ်ထက်မနည်းရှိပြီ ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောသည်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ်သက်တမ်း ထပ်တိုးတုန်းက အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ပေးမှုအရ ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ သူ့အဖွဲ့ဝင်တွေချထားတဲ့ အမိန့်ကို ကျနော်တို့က ပြန်အယူခံတာဗျ။ အဲဒါကို သူက သူ့အောက်ကို ပြန်ရှင်းခိုင်းနေလို့ မဖြစ်ဘူးလေ။
တရားသူကြီးချုပ်ဆိုတာကလည်း ပုဒ်မ (၂၁) ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ဖျက်သိမ်းလိုက်ကတည်းက တရားရုံးချုပ်ရဲ့ကဏ္ဍမပါတော့ဘူးဗျ။ တရားသူကြီးချုပ် ၀င်ရောက်ကိုင်တွယ်ရမယ့် အမှုမျိုးလည်း မဟုတ်တော့ဘူးဗျ။ အဲတော့ အဲလိုပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောဆိုမှုတွေကိုက လွဲနေတယ်ဗျ” ဟု ဦးကြည်ဝင်းက ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
ပါတီခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံခွင့်ရရေး အန်အယ်ဒီက စစ်အစိုးရကို တောင်းဆို
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အန်အယ်ဒီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် ပါတီခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရရန် ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီက မြန်မာစစ်အစိုးရထံ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံရေးအရ အရေးကြီးချိန်ဖြစ်သဖြင့် ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန်အတွက် ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ - နအဖ ဥက္ကဋ္ဌထံ လိပ်မူကာ စာရေးသား တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ယနေ့ ပြောဆိုသည်။ အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ တုံ့ပြန်မှု တစုံတရာ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ကေအင်ယူ လက်နက်ချရေး ထိုင်းကို စစ်အစိုးရ ဖိအားပေး
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို စံထားသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအန်ယူ) အပါအ၀င် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအခြေအနေမျိုးရောက်အောင် တွန်းပို့မည့် နိုင်ငံမဟုတ် ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ကေအန်ယူက ပြောသည်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကိစ္စတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များပါဝင်ရန် ထိုင်းအစိုးရအား မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က အကူအညီတောင်းသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကေအန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုဒေးဗစ်သကဘောက ယခုကဲ့သို့ ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာဆစ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ကေအန်ယူအား နားချပေးရန် ဦးဉာဏ်ဝင်းက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကာဆစ် မြန်မာနိုင်ငံသွားခြင်းသည် ထိုင်းတွင်သောင်တင်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များအရေးကို စစ်အစိုးရက မည်သို့ကူညီမည်ဆိုသည့်ကိစ္စ ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအတွက် မြန်မာဘက်က မည်သို့ ထိုင်းအား ကူညီမည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးသော်လည်း ကေအန်ယူကို လက်နက်ချရေးကိစ္စအတွက် ထိုင်းအစိုးရက ဆွေးနွေးပေးရန် စစ်အစိုးရဘက်က တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကေအန်ယူက မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို မည်သည့်အတွက် လက်မခံနိုင်ကြောင်း မိမိကိုယ်တိုင် ကေအန်ယူပြောသည်ကို ကြားလိုသည်ဟုပါ ကာဆစ်က ပြောသည်။ ထိုင်းအာဏာပိုင်များသည် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ခေါင်းဆောင်များကို ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်ခွင့်မပြုဘဲ မိမိတို့တပ်စခန်းများတွင်သာ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၉) ရက် နေ့စွဲဖြင့် အသိပေးအကြောင်း ကြားစာ ပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကေအန်ယူ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌက လက်ရှိအခြေအနေတွင် မိမိတို့အား ထိုင်းနယ်မြေထဲ လာရောက်ရန် ခွင့်မပြုသော်လည်း ဆေးဝါးကုသခွင့်၊ ခိုလူံခွင့်နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများကို နိုင်ငံတကာစံအရ ထိုင်းနိုင်ငံက နားလည်ပေးမှုများရှိကြောင်း၊ ယခုကိစ္စတွင် ထိုင်းအမြင်နှင့် ကေအန်ယူအမြင် တူညီမူ မရှိနိုင်သော်လည်း ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်လောက်သည့် အခြေအ နေများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
မြန်မာ လက်နက်မှောင်ခို ၃ ဦးကို အိန္ဒိယ နယ်စပ်တွင် ဖမ်းမိ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မြန်မာလူမျိုး ၃ ဦးကို ဒုံးပစ်လောင်ချာ ၅ လက်နှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပြည်နယ် တခုဖြစ်သော မီဇိုရမ်တွင် ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့က ဖမ်းမိခဲ့သည်ဟု မီဇို ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောသည်။
လက်နက်များနှင့်အတူ မြန်မာနှင့် နယ်စပ်မြို့ ကျန်ဖိုင်း (Champhai) တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု ကျန်ဖိုင်းရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ် အေဆိုင်လို (A. Sailo) က မဇ္ဈိမကို ယနေ့က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျန်ဖိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့သည် စီဇာချွန်းငါ (C. Zacchunga) ကို ဒုံးပစ်လောင်ချာ ၅ လက်နှင့်အတူ ပထမဦးဆုံး ဖမ်းမိခဲ့သည်။
အဆိုပါ လက်နက်များသည် ပြည်နယ်မြို့တော် အိုက်ဇော (Aizawl) သို့ ပို့ဆောင်ရန် ဖြစ်ပုံရကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍ စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ရာ နောက်ထပ် မြန်မာလူမျိုး ၂ ဦးဖြစ်သော အယ်လ်ဘတ် ဒီ မောင်ငါ (Albert D. Muanga) နှင့် ထန်း စွမ်း လျန်နာ (Thang Suan Liana) တို့ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရဲအရာရှိ ဆိုင်လိုက ပြောသည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းကလည်း အိုင်ဇောမြို့အနီး ဆီးဖား (Siphir) မြို့တွင် မီဇိုရမ် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝင်ရောက်စီးနင်း ရှာဖွေခဲ့ရာ အေကေ ၄၇ ရိုင်ဖယ်သေနတ်များနှင့် ခဲယမ်းမီးကျောက်များကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သေးသည်။
မီဇိုရမ်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား ဝင်ရောက်လာနိုင်သော နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်အရှည်မှာ ၄ဝ၄ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားပြီး၊ ယင်းနယ်စပ်ကို မှောင်ခိုသမားများနှင့် စီးပွားရေးသမားများက လက်နက်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ မှောင်ခိုသယ်ယူရန် မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။
ကွန်နက်ရှင်ကြောင့် ရန်ကုန် အင်တာနက်ဆိုင် အများစု ပိတ်ထားရ
အင်တာနက် မြန်နှုန်းများ သုံး၍မရနိုင်သည်အထိ အလွန်နှေးကွေးနေခြင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် အင်တာနက်ဆိုင် အများစု ပိတ်ထားကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်မှ နိုင်ငံခြားသို့ တယ်လီဖုန်းခေါ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့်ဆိုင်များ လုံးဝပိတ်ထားကြကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်တက္ကသိုလ်ဝင်းအတွင်း မြန်မာအင်ဖိုတက် အဆောက်အဦက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတခုတွင် အလုပ်လုပ်နေသူ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ကျွမ်းကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာတဦးကမူ အစိုးရက နိုင်ငံတကာ ဆက်ကြောင်း ပြုပြင်ရန်အတွက် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု (၅) ရက် ကွန်နက်ရှင် နှေးကွေးမည်ဟု ကြေညာထားသော်လည်း ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ကျွမ်းကျင်သူများက ယုံကြည်သူ မရှိသလောက် နည်းကြောင်း၊ အားလုံး ထင်မြင်ယူဆကြသည်က မကြာမီကျရောက်မည့် မတ်လ (၂၇) ရက် တပ်မတော်နေ့ မတိုင်မီ ပြည်တွင်းက သတင်းအချက်အလက်များ ပြည်ပသို့ စီးထွက်နေမှုကို ကြိုတင် တားဆီးလို၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်၍ ယခင်က ပြဿနာတစုံတခု ဖြစ်မှသာ ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်လိုင်းများ နှေးကွေးသွားရန်နှင့် ပြတ်တောက်သွားအောင် လုပ်လေ့ရှိကြောင်း၊ ဥပမာ ၂ဝဝ၇ စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးအခင်းကာလ၊ နာဂစ် လေမုန်တိုင်းဘေး ရင်ဆိုင်ရစဉ် ကာလ စသဖြင့် ပြည်တွင်း၌ တစုံတခု ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ရေအောက် ကေဘယ်လ် ပြတ်တောက်သွား၍ ပြင်ဆင်ရမည်ဆိုပြီး လိမ်လည်အကြောင်းပြခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလည်း ကြိုတင်လက်ဦးမှုယူပြီး ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
နအဖစစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ရတနာပုံ မြို့သစ် အိုင်စီတီ ပြပွဲ ပြုလုပ်ချိန်၌ မြန်မာပြည်နှင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း စသဖြင့် ကုန်းတွင်း ဖိုင်ဘာအော့ပ်တစ် ဆက်ကြောင်းသစ်များ သွယ်တန်းပြီးစီးပြီဖြစ်သည့်အတွက် မကြာမီ အင်တာနက်လိုင်းများကို မြန်နှုန်းမြင့်မြင့်ဖြင့် သုံးစွဲရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်သိန်းဇော်ကိုယ်တိုင် တရားဝင် ကြေညာခဲ့ဖူးသည်။
၅ နှစ်ခန့်အတွင်း ကလေးစစ်သား ၂ဝ လွတ်မြောက်ဟု လှုပ်ရှားတက်ကြွသူက ပြောဆို
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်ခန့် ကာလအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်မှ ပြန်လွတ်လာသည့် ကလေးစစ်သား ၂ဝ ဦး ရှိကြောင်း ကလေးစစ်သားပပျောက်ရေး ဆောင်ရွက်နေသူ အန်အယ်ဒီ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသက်ဝေက ဆိုသည်။
ကလေးစစ်သား ပပျောက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (အိုင်အယ်လ်အို)၊ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့ (အိုင်စီအာစီ) တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့် သူမှတဆင့် ၂ဝဝ၃-ဝ၄ မှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အထိ အမှုပေါင်း ၃ဝ ကျော် တိုင်ကြားလာခဲ့ရာ၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် တပ်တွင်းမှ ပြန်လွတ်လာသည့် ကလေး ၁ဝ ဦးရှိပြီး၊ ၂ဝဝ၇-ဝ၈ ခုနှစ်တွင် ၁ဝ ဦး ရှိကြောင်း သူက ပြောသည်။
ကလေးစစ်သားများမှာ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြား အရွယ်များ ဖြစ်သည်။ ဦးသက်ဝေသည် ကလေးစစ်သား ပပျောက်ရေးအတွက် ၂ဝဝ၃-ဝ၄ ခုနှစ်အတွင်းမှ စတင်၍ အိုင်အယ်လ်အို၊ အိုင်စီအာစီ တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သူတို့ လက်လှမ်းမီသရွေ့ ကူညီခဲ့သည့် စစ်သားအဖြစ် အဓမ္မစုဆောင်းခံခဲ့ရသော ကလေးများမှာ ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာ၊ လှိုင်သာယာ၊ တွံတေး၊ ဒလနှင့် မအူပင်မြို့နယ်တို့မှ ဖြစ်ကြပြီး ကျောင်းတက်နေဆဲ ကလေးများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများကမူ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးစစ်သားနှင့် အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု မရှိကြောင်း အစဉ် ငြင်းဆိုလေ့ရှိသည်။ နအဖအား လက်နက်ကိုင်၍ ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများကလည်း ၎င်းတို့ထံတွင် ကလေးစစ်သားမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုလေ့ရှိသည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကလေးစစ်သား ၇ သောင်းခန့်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Human Rights Watch) က ခန့်မှန်းထားသကဲ့သို့ မြန်မာစစ်တပ်မှ ကလေးစစ်သား တပ်ပြေးများ နယ်စပ်ဒေသများသို့ ထွက်ပြေးလာသည့် သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးစာချုပ် CRC - Convention on the Rights of the Child ကို လက်မှတ်ထိုးထားသည်။
ကာတာမှ လူငယ်တယောက် ဗိုလ်သန်းရွှေအမျိုးဟု သံသယဖြစ်ခံရ
ကာတာနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကလေးကစားကွင်း Operator အဖြစ်အမှုထမ်းနေသည့် တောင်တွင်းကြီးသား ၀င်းကိုကို ဆိုသူသည် ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်း (၃) နှစ်တိုးရန် အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ မြန်မာသံရုံးသို့ ကာတာဘဏ်မှ ငွေလွှဲစဉ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်နေသည်ဟု ဘဏ်မှသံသယရှိသဖြင့် သက်တမ်းတိုးခွင့် ကြန့်ကြာခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
၀င်းကိုကိုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မည်သို့မျှ အမျိုးတော်စပ်ခြင်း မရှိကြောင်း ကာတာဘဏ်သို့ ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ တင်ပြပြီးမှသာ ကာတာဘဏ်မှ ခွင့်ပြုသဖြင့် အီဂျစ်နိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးသို့ သက်တမ်းတိုး ငွေလွှဲလိုက်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ကာတာနိုင်ငံတွင် အမှုထမ်းနေသော မြန်မာအလုပ်သမားများသည် ဆက်လက်နေထိုင်လိုက သက်တမ်းတိုး (၃) နှစ်အတွက် အီဂျစ်သံရုံးသို့ ရီရဲ (၁၇၀၀) ပေးဆောင်ရကြောင်း၊ ကာတာတွင် မြန်မာသံရုံးမရှိသည့်အတွက် ကာတာဘဏ်သို့ ငွေသွင်းကာ အီဂျစ်ရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ငွေလွှဲရကြောင်း၊ ငွေလွှဲပြေစာနှင့် အတူ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကို သံရုံးသို့ ပူးတွဲပို့ပေးရကြောင်း၊ ၀င်းကိုကိုသည် အထက်ပါအခက်အခဲများ ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းပြီးနောက် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာဘ်ထိုးမှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ထောင်ဝင်စာ တွေ့ခွင့်ရ
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်ထောင်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား နှစ်ဦးထံ ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ရာ ထောင်မှူးကို ငွေပေးမှသာ အချိန်ကြာကြာနှင့် လွတ်လပ်စွာ တွေ့ခွင့်ရကြောင်း သက်ဆိုင်သူ ဆွေမျိုးများက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံနေရသော ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ မနီနီနွယ်မြင့်နှင့် ကိုချစ်မောင်မောင် ကို မိခင်များက ပြီးခဲ့သည့်လအတွင်း ထောင်ဝင်စာ သွားတွေ့ရာ ဘူးသီးတောင်ထောင်မှူး ဦးတင်ထွန်းကို ငွေကျပ် ၅ သောင်း လာဘ်ထိုးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ မနီနီမေမြင့်၏ မိခင် ဒေါ်မြဦးနှင့် ကိုချစ်မောင်မောင်၏ မိခင် ဒေါ်မခင်မြင့်သည် ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၁ ရက်နေ့က တောင်ကုတ်မှ ဘူးသီးတောင်သို့ ထွက်သွားသော်လည်း ၂၈ ရက်နေ့မှသာ တွေ့ခွင့်ရပြီး၊ ယခုလ ၂ ရက်နေ့ကျမှ နေအိမ်များသို့ ပြန်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဘူးသီးတောင်သို့ မလိခ သင်္ဘောဖြင့် သွားရာ တဦးလျှင် အသွားအပြန်စရိတ် ကျပ် ၆ သောင်း၊ စားစရိတ်နှင့် တည်းခိုခန်းခ ၂ သောင်းကျော်၊ သမီးများအတွက် ငွေကြေး၊ ဆေးဝါး၊ အစားအသောက်နှင့် ထောင်မှူးအတွက် လာဘ်ငွေနှင့်ဆိုပါက တခေါက်လျှင် ကျပ် ၄ သိန်းခန့် လိုအပ်ကြောင်း ကိုချစ်မောင်မောင်၏ ဆွေမျိုးတဦးက ဆိုသည်။
ထောင်ဝင်စာတွေ့စဉ် အကျဉ်းဦးစီး အရာထမ်းက စောင့်ကြည့်နေသဖြင့် ထောင်အတွင်းမှ အခြားအနေများကို သိခွင့် မရသော်လည်း၊ အကျဉ်းသူ သမီးများသို့ ငွေနှင့် ဆေးဝါးများ ပေးသွင်းခွင့်ရကြောင်းနှင့် နှစ်ဦးစလုံး၏ ကျမ္မာရေး ကောင်းမွန်ကြောင်း သိရသည်။ သူတို့နှစ်ဦးကို သီးသန့်ဆောင်များတွင် ထားရှိသည်။ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ နှစ်ဦးသည် ရွှေဝါရောင်လှုပ်ရှားမှု နှစ်ပတ်လည် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက တောင်ကုတ်-ရန်ကုန်ကားလမ်း၊ တောင်ကုတ်-သံတွဲကားလမ်းနှင့် မြို့ပေါ်တွင် ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေးနှင့် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာရွက်များ ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။
လှုပ်ရှားမှုအပြီး အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမှု - ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) ဖြင့် တောင်ကုတ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်စီ ချမှတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့ကို ဘူးသီးတောင်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပစ်ခဲ့သည်။
CNG 82 Model နှင့် အောက်အက္ခရာကားများ ကို တရားဝင်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဖျက်သိမ်းမည်
သင်္ကြန်အလွန် ဧပြီလကုန်ခန့်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ပြေးဆွဲနေသော CNG 82 Model နှင့် အောက်အက္ခရာကားများ ကို တရားဝင် လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဖျက်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီး မကြာမီက ၎င်းတို့ဆင်ထားသော CNG ပစ္စည်းများပြန်သွင်းပါက ထူးထရေဒင်းကုမ္ပဏီမှ တလုံး (၇) သိန်းဖြင့် ဈေးဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂) သိန်းဦးစွာပေးပြီး ကျန် (၅) သိန်းကို တလ (၁) သိန်းနှုန်း ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကားဝယ်ရောင်းလောကအတွင်း ပြောဆိုနေကြသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်မှာ ထူးထရေးဒင်းအပါအ၀င် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် နအဖ ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အကွက်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဘောလုံးအသင်းဖွဲ့ထားသော ထူးထရေးဒင်းအပါအ၀င် လုပ်ငန်းရှင်ကြီး (၈) ဦးကို ကားပါမစ်ချပေးမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ အသုံးပြုလက်စ CNG သုံးပစ္စည်းများကို အောက်ဈေးဖြင့် ၀ယ်ယူရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ တင်သွင်းမည့် ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ကားများကို ယခုဝယ်ယူမည့် CNG သုံးပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကားပွဲစားတဦးက ပြောသည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် အဆိုပါသတင်းသာ မှန်ကန်ပါက လမ်းကြောပေါ်၌ ပြေးဆွဲနေသော CNG Taxi အားလုံး၏ တ၀က်ခန့်မှာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖျက်သိမ်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သတင်း မှန် မမှန် ကုန်လမ်းညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (မြင်သာလိုင်စင်ရုံး) သို့ မေးမြန်းသော်လည်း အထက်မှ ညွှန်ကြားချက် မလာသေးကြောင်းဟုသာ ဦးစီးဌာန အရာရှိတဦးက ဖြေသည်။
ပုဂ္ဂလိကသတင်းဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းများအပေါ် ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည်အားထားမှု မြင့်တက်လာ
ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ပုံနှိပ်သတင်းမီဒီယာတို့၏ အခန်းကဏ္ဍ လျော့ကျလာသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ပုဂ္ဂလိက သတင်းဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများအပေါ် သတင်းအတွက် မှီခိုအားထားရမှုမှာ အံ့သြလောက်ဖွယ် မြင့်မားလျက်ရှိကြောင်း Weekly Eleven News Journal မှ ကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်းအရ သိရှိရပါသည်။ Weekly Eleven News Journal မှ လွတ်လပ်စွာကောက်ယူခဲ့သော စစ်တမ်းများအရ နေ့စဉ်သတင်းရရှိရန် အားထားရမှုတွင် ပုဂ္ဂလိကဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း (အထူးသဖြင့်သတင်းဂျာနယ်များ) သည် အခြား TV (ပြည်တွင်းမှ MRTV၊MWD၊MRTV 4၊ ပြည်ပမှ CNN ၊ BBC ၊ CNA ၊ DVB တို့အပါအ၀င်)၊ အင်တာနက်၊ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို(မြန်မာ့ အသံ၊ RFA၊ BBC ၊ VOA) တို့ထက် လေး၊ ငါးဆသာလွန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။ လူပေါင်း ၁၆၀၀ ကျော်ကို ကောက်ယူခဲ့ သောစစ်တမ်းအရ လူ ၁၆၀၀ တွင် ၁၃၈၅ ဦး၊ ၈၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းက ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းများကိုသတင်းအတွက် ဖတ်ရှုကြောင်းဖြေပေးခဲ့ကြပြီး ရုပ်သံမီဒီ ယာက ဒုတိယ၊ အင်တာနက်သတင်းက တတိယနေရာ၌ ရှိနေခဲ့သည်။ သတင်းစာ နှင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရေဒီယိုတို့မှာ အဆင့်လေး၊ ငါး၌အတူတကွရှိနေခဲ့သည်။
( ၀ိကလီအဲလဲဗင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် )
မတ်လ ၂၅ ရက်
မြန်မာဆန်ကို မြ၀တီ-မဲဆောက်နယ်စပ်ဂိတ်မှာ ထိုင်းသို့ တရားဝင် သွင်းခွင့်ပြု
ယခုလမှစပြီး ထိုင်းကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မြ၀တီမှ မဲဆောက်ဘက်သို့ မြန်မာဆန်တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့် ယခင်ကဲ့သို့ ညဘက် ဆန်များခိုးသွင်းရန် မလိုတော့ဟု မြန်မာဆန်ကုန်သည် များက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်အတွင်း မြန်မာဆန်တန်ချိန် (၂၃,၀၀၀) ကို တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့် မြန်မာဆန် များ မဲဆောက်သို့ တရက်ခြား တင်သွင်းလျက်ရှိသည်။
မြန်မာဆန် ဇီယာရှယ် အမျိုးအစားကို ထိုင်းကုန်သည်များနှင့် မြန်မာကုန်သည်များသည် ယခင်က ညဘက်တွင် တရားမ၀င်ခိုးသွင်းနေရသော်လည်း ထိုင်းဘက်မှ သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် တရားဝင် တင်သွင်းခွင့်ပြုလိုက်သည့်အတွက် နှစ်ဘက်ကုန်သည်များ ပိုမိုအကျိုးရရှိကြသည်ဟု ကုန်သည်များက ပြောသည်။
ထိုင်းဆန်ကုန်သည်များသည် ဇီယာဆန်ကို တင်သွင်းရာတွင် မြန်မာတံဆိပ်ပါ အိတ်ခွံများနေရာတွင် ထိုင်းအိတ်ခွံ များဖြင့် အစားထိုးပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းနှင့် ဆန်လုံလောက်မှုမရှိသည့် နိုင်ငံငယ်များသို့ တဆင့်ပြန်လည် ရောင်းချကြသည်ဟု ၎င်းလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာမန်နေဂျာတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာဆန်သည် နိုင်ငံတကာရှိ ဆန်တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများနှင့်ယှဉ်လျှင် အရည်အသွေးပိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပိုင်းတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ ဈေးနူန်းဖြင့်သာ ယှဉ်ပြိုင်နေရသည်။
City FM လိုင်း ၄ လိုင်း မကြာမီ တိုးချဲ့ ထုတ်လွှင့်မည်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းများတွင် City FM လိုင်း ၄ လိုင်းကို မကြာမီ တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိ ထုတ်လွှင့်နေသော ရန်ကုန် City FM နှင့် မန္တလေး City FM အပြင် အခြား ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသများ၌ ဖမ်းယူရရှိနိုင်မည့် လိုင်း ၄ လိုင်းကို တိုးချဲ့ကာ မကြာမီ လပိုင်းအတွင်း ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီဟု ဂီတအစည်းအရုံးမှ ထိပ်တန်း ဦးဆောင်သူတဦးက ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေစိုက်မည့် အုပ်စု ၄ စုမှာ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းတွင် အုပ်စုတစု၊ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့တွင် တစု၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတွင် တစု၊ တနသာင်္ရီတိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့တွင် တစု ခွဲခြားကာ ထုတ်လွှင့်မည်ဟု ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်တခုကလည်း ဖော်ပြသည်။
ထုတ်လွှင့်ခွင့်အတွက် ကုမ္ပဏီများကို တာဝန်ယူ စေမည်ဖြစ်ကာ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီမှ ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသများ၊ ငွေတောင်ကုမ္ပဏီမှ စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာနှင့် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတွင် တာဝန်ယူကြောင်း သိရသည်။
အခြားဒေသများအတွက်မူ မည်သည့်ကုမ္ပဏီများက တာဝန်ယူမည်ကို မသိရသေးပါ။
လက်ရှိ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး City FM နှစ်ခုသည် တေးသီချင်းများ၊ ရုပ်ရှင်-ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင်များနှင့် အဆိုတော်များ၏ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းများ၊ ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဗဟုသုတ အစီအစဉ်နှင့် နာမည်ကြီး နိုင်ငံခြား ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ၏ အကြောင်းအရာများကို အဓိကအားဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည်။
လူစိတ်ဝင်စားမှု များပြားသဖြင့် ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများကြောင့် ၀င်ငွေကောင်းသော မီဒီယာလုပ်ငန်းတခုလည်း ဖြစ်နေသည်။
၂ဝဝဝ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ City FM ကို စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ရာ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် City FM နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် မန္တလေး City FM လိုင်းများကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နှစ်မြို့၏ မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများမှ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
မန္တလေး City FM ကို Forever Group ကုမ္မဏီမှ တာဝန်ယူ ထုတ်လွှင့်ပေးသည်။
တပ်မတော်ခန်းမ အရောင်းပြပွဲ အစိုးရ သတင်းစာတွေ မဖေါ်ပြ
မတ်လ (၂ဝ) ရက်မှစပြီး ရန်ကုန် ဦးဝိစာရလမ်း တပ်မတော်ခန်းမတွင် Yangon Expo-၂ဝဝ၉ ဆိုသည့် ဈေးရောင်းပွဲ တခု ကျင်းပနေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါဈေးရောင်းပွဲတွင် ပြည်တွင်းထုတ် ကုန်ပစ္စည်း အနည်းငယ်၊ နယ်စပ်သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး ပစ္စည်းများ စသဖြင့် အမျိုးအစားစုံ၊ ပစ္စည်းစုံ ပါဝင်ပြသရောင်းချလျက်ရှိသည်။
ပြည်တွင်းထွက် သနပ်ခါးအချောင်းများ၊ ပြည်တွင်းထုတ် အားဖြည့်အချိုရည်များ၊ ကော်ဖီမစ် အထုတ်များ၊ တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ၊ ရှူဆေးများ၊ လက်ကိုင်အိတ်များ၊ ရှပ်အင်္ကျီများ၊ မိတ်ကပ် အပါအဝင် အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ အမျိုးသမီးဝတ် ဘော်လီများ၊ နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းလာသည့် တီဗွီ၊ ဒီဗွီဒီ စက်များ၊ တရုတ်လုပ် အီးဗွီဒီ စက်များ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ ပရိဘောဂများ၊ ဆေးဝါးများ၊ ကြွေပြားများ စသည်တို့အပြင် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း တခန်းဝယ်ပါက လက်ဖ်တော့ ကွန်ပျူတာတလုံး လက်ဆောင်ပေးမည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌လည်း စီးပွားရေး ကျဆင်းခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချရမှုများ လည်း နှေးကွေးလာသည့်အတွက် ကုမ္ပဏီများ စုပေါင်းပြုလုပ်သည့် ဈေးရောင်းပွဲများ ကုန်တိုက်များတွင် မကြာခဏ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကလည်း ကုမ္ပဏီကြီးအချို့ စုပေါင်းပြီး မျှော်စင်ကျွန်းတွင် ဈေးရောင်းပွဲတခု ကျင်းပခဲ့သည်။ ယခု အဆိုပါ ဈေးရောင်းပွဲမျိုး တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခင်က တပ်မတော်ခန်းမတွင် ပြပွဲပြုလုပ်ပါက အစိုးရပိုင် သတင်းစာများအပါအ၀င် ပုဂ္ဂလိက ဂျာနယ်များတွင် တခမ်းတနား သတင်းဖော်ပြခဲ့ကြ သော်လည်း ယခုပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဖော်ပြသလောက်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ခြစားမှုကို ဖော်ထုတ်သူ ဧည့်စာရင်းဖြင့် ထောင် ၇ ရက် ကျခံရ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း တွံတွေးမြို့မှ ဒေသအာဏာပိုင်များ၏ ခြစားမှုကို ဖော်ထုတ်သူနှင့် အန်အယ်ဒီ လူငယ် ၃ ဦးကို ဧည့်စာရင်း မတိုင်ဟုဆိုကာ မြို့နယ်တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၇ ရက် ယမန်နေ့က ချလိုက်သည်။
တွံတေးမြို့ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်မှ မိဘမေတ္တာ ငါးဒိုင်ပိုင်ရှင် ဦးခင်ဇော်နှင့် သူ့အိမ်တွင် အလုပ်လုပ်သူ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုဇော်မျိုးလတ်၊ ကိုကျော်သူလင်းနှင့် မောင်သန်းမြင့်တို့ကို ၁၉ဝ၇ ခုနှစ် မြို့ပြဥပဒေဖြင့် တရားသူကြီး ဦးအေးကိုကိုက ပြစ်ဒဏ်ချခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉ဝ၇ ခုနှစ် မြို့ပြဥပဒေမှာ အခြားဒေသမှ ဧည့်သည်များ လာရောက်လျှင် ဧည့်စာရင်း တိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မြို့တွင်း နေထိုင်သူဖြစ်ပါက တရပ်ကွက်နှင့် တရပ်ကွက် ပြောင်းရွှေ့တည်းခိုလျှင် တိုင်စရာ မလိုသည့် ဥပဒေဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် လနှောင်းတွင် အလုပ်သမားများအတွက် ရပ်ကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အေးချမ်းယာယာရေး ကောင်စီ - ရယက ထံ ဧည့်စာရင်း သွားတိုင်သော်လည်း အကြောင်းပြချက် မရှိ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဧည့်စာရင်း တိုင်သည်ကို ရပ်ကွက်က လက်မခံကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ ထိုလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သွားပြောရာ တာဝန်ကျ ဒုရဲအုပ် အောင်နိုင်ဦးက ဧည့်စာရင်းတိုင်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းစာရွက် မိတ္တူများကို မယက နှင့် အခြား အာဏာပိုင်အဖွဲ့များထံ ပေးပို့ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ယခုလ ၃ ရက်နေ့ ညတွင် ရယကများ၊ ရာအိမ်မှူး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ မီးသတ်နှင့် နယ်ထိန်းများက ဦးခင်ဇော်၏ နေအိမ်သို့ လာရောက်ကာ ဧည့်စာရင်းမတိုင်ဟုဆိုပြီး ဖမ်းဆီး၍ မြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ ပို့ခဲ့သည်။ မတရား ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်းတရားရုံးသို့ လျှောက်လွှာတင်မည်ဟုလည်း သူက ဆိုသည်။
ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူ ၄ ဦးစလုံးကို တွံတေးမြို့ ရဲစခန်း၌ပင် ချုပ်နှောင်ထားပြီး ယနေ့တွင် အင်းစိန်ထောင်သို့ ပို့မည်ဟု သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွတ်ပေးလျှင် ဒဏ်ခပ်မှု ရုပ်သိမ်းရန် အီးယူ စဉ်းစားမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဒီမိုကရေစီရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများရှိလာမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန် အီးယူက စဉ်းစားနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူအကြီးတန်းအရာရှိတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အတိုက်အခံများအပေါ် တင်းကျပ်ထားမှုများ လျှော့ပေးလျှင် လာမည့်လ အစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်ထားမှုကို ရုပ်သိမ်းရန် ဥရောပကောင်စီက မဲပေးနိုင်သည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူအရာရှိ ပီယာရိုဖတ်ဆီနိုက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် အကျဉ်းကျနေမယ်ဆိုရင် လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမျိုး ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုမှသာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလို့ အီးယူက သတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်” ဟု ပီယာရိုဖတ်ဆီနိုက ပြောသည်။
( ခေတ်ပြိုင်မှ ကောက်နှုတ်ချက် )
ဖိအားပေးသည်ကို အလျှော့ပေးမည် မဟုတ်ဟု KNU ပြော
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း စစ်အစိုးရက လမ်းပြမြေပုံတွင် အပြောင်းအလဲများ မပြုလုပ်ပါက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖိအားပေးသည်ဖြစ်စေ လိုက်လျောမည် မဟုတ်ဟု ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်အဖွဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ယနေ့ ပြောကြားသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး - KNU က ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအတွက် တံခါးဖွင့်ထားသော်လည်း၊ စစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် မိမိတို့၏ တောင်းဆိုချက်အပေါ် အခိုင်အမာ ဆက်၍ ရပ်တည်မည်ဟု KNU ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဒေးဗစ်တာကပေါ က ပြောဆ်ုခြင်း ဖြစ်သည်။
KNU က အားလုံး ပါဝင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲကို အခြေခံသော အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တောင်းဆိုထားပြီး စစ်အစိုးရ၏ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံကို သပိတ်မှောက်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စစ်အစိုးရက ဖြစ်ပွားဆဲ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု ဆိုပါက KNU က မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောသည်။ သို့သော် သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲကို အရင်ဆုံး ခေါ်ယူရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် KNU က စစ်အစိုးရကို ဆက်လက် တောင်းဆိုကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
KNU နှင့် ယင်း၏ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KNLA) တို့သည် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးအတွက် ၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် လက်နက်ကိုင် လူမျိုးစု တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ယခင်က KNU သည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ် ခင်ညွန့်ကို ရုတ်တရက် ဖယ်ရှား ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက် ဤကြိုးပမ်းမှုများ အားလုံး မအောင်မမြင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဤအချိန်ကတည်းကစ၍ နှစ်ဘက်အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သည်။
သင်္ကြန်နားနီး လောင်စာဆီဈေး ပြန်တက်
ပည်တွင်းလောင်စာဆီဈေးနှုန်းများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာနေကြောင်း ပြင်ပလောင်စာဆီပွဲစားတဦးက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလလယ်ပိုင်းတွင် ဒီဇယ်၊ ဓာတ်ဆီ တပေပါ ကျပ် (၉) သောင်းအောက်ရှိနေရာမှ မတ်လဆန်းတွင် ကျပ် (၉) သောင်းကျော်လာကာ ယနေ့ပေါက်ဈေး ကျပ် (၁) သိန်းကျော်သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ပေါက်ဈေး ဓာတ်ဆီတပေပါ ကျပ် (၁၀၈,၀၀၀)နှင့် ဒီဇယ်တပေပါ ကျပ် (၁၀၄,၀၀၀) အထိ ရောက်ရှိလာ သည်။ ပြင်ပလောင်စာဆီဈေးနှုန်း မြင့်လာသော်လည်း အစိုးရထုတ်ဈေးထက် သက်သာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အဝေးပြေး ကားဂိတ်ပိုင်ရှင်တဦးက ပြောသည်။ ပုံမှန်ကုန် တန်ဆာခများ ဈေးမတက်သော်လည်း လောင်စာဆီပေပါတင်ခနှုန်းများ တက်သွားကာ ယခင် ဆီတပေပါ ရန်ကုန်-မန္တလေးတင်ခ (၆,၀၀၀) ကျပ်သာရှိရာမှ ယခု ကျပ် (၈,၀၀၀) သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ပြင်ပလောင်စာဆီဈေး အတက်အကျရှိသော်လည်း အစိုးရလောင်စာဆီဈေးမှာ ကမ္ဘာ့လောင်စာဆီဈေးတက်စဉ်က လိုက်တက်ခဲ့သော်လည်း ပြန်ကျချိန်တွင် ပြန်ချမပေးကြောင်း ပြင်ပလောင်စာဆီပွဲစားက ပြောသည်။
မတ်လ ၂၆ ရက်
ပေါ်လစီ မပြောင်းမခြင်း စစ်အစိုးရနဲ့ အတိုက်ခံ ဆွေးနွေးရေး အမေရိကန် အားပေးမည်
အမေရိကန်အရာရှိနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ ရုတ်တရက်တွေ့ဆုံခြင်းသည် မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန် သဘောထား ပြောင်းလဲသွားသည့် သဘောမဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောဆိုသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး စတီဖင်ဘလိပ်နှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်းတို့ အင်္ဂါနေ့က နေပြည်တော်မှာတွေသည့်သတင်းကို စစ်အစိုးရ ဘက်က ထုတ်ပြန်ပြီး မကြာခင် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ယခုကဲ့သို့ ငြင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မစ္စတာဘလိပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်ပေါ်လစီပြောင်းလဲရေးနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမရှိ ရန်ကုန်-အမေရိကန်သံရုံးသို့ ခေတ်ပြိုင်က မေးမြန်းရာ “မစ္စတာဘလိပ် မြန်မာနိုင်ငံလာခြင်းဟာ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင်းနဲ့ ဗီယက်နမ် (၅) နိုင်ငံ ချစ်ကြည်ရေး ခရီးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ လာတာဖြစ်ပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး သဘောအထား အမြင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေနဲ့ မစ္စတာဘလိပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်” ဟု လက်ထောက် လူထုဆက်ဆံရေးအရာရှိ ဒရိတ်ဝိုက်ဆတ်က ဖြေကြားသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူး စတီဖင်ဘလိပ်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (၇) ဦး၊ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ (၃) ဦးတို့နှင့် ယမန်နေ့က အန်အယ်လ်ဒီပါတီရုံးချုပ်တွင် (၁) နာရီခန့်အကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကလည်း ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် အမေရိကန် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှု မအောင်မြင်ကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောလိုက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်ပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ရန်များသည်ဟု နိုင်ငံတကာ သတင်းများက သုံးသပ်သည်။
သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ထားသည့်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းမည် သို့မဟုတ် မည်သည့်ပေါ်လစီနှင့် အစားထိုးမည်ဆိုသည်ကိုမူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စကလင်တန်က တိတိကျကျ ပြောမသွားပေ။
မြန်မာအရေး မည်သို့ဖြေရှင်းရမလဲဆိုသည့်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနှင့်လည်း တိုင်ပင်ဆွေနွေး နေကြောင်း မစ္စကလင်တန်က အင်ဒိုနီးရှား သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုတွင် ပြောကြားသည်။ သို့သော် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်မှုကို လျော့ပါးစေမည့်အချက်သည် အိုဘားမား အစိုးရ စဉ်းစားနေသည့်အထဲမှ တချက်ဖြစ်သည် ဆိုသည် ကိုမူ မစ္စကလင်တန်က ငြင်းဆိုခြင်း မရှိပေ။ သို့သော် အိုဘားမားအစိုးရဘက်က မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ထားမှုကို လျော့ပါးအောင် ကြိုးစားမှု မှန်သမျှ အမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာ အတိုက်အခံနှင့် ကြုံရနိုင်သည်ဟု ၀ါရှင်တန်ပိုစ်သတင်းစာကြီးက ထောက်ပြထားသည်။ လက်ရှိ အိုဘားမားအစိုးရ၏ ဒု-သမ္မတ ဘိုင်ဒန်သည်ပင် မြန်မာကျောက်မျက်ဥပဒေ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် တချိန်ကတွန်းအားပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
သင့်မြတ်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ရန် ၈၈ ကျောင်းသားများ ပြောကြား
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကို စုပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဖမ်းဆီးထားသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ရန် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့က မြန်မာစစ်အစိုးရကို ယနေ့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် နိုင်ငံတကာ မိသားစုတို့၏ အလေးအနက် တောင်းဆိုချက်ဖြစ်သော အားလုံး လက်ခံပါဝင်နိုင်မည့် နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတရပ် ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန် လိုအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထုတ် ထုတ်ပြန်ချက် စာအမှတ် ၁/၂ဝဝ၉ (၈၈) တွင် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးဆောင်သည့် တပ်မတော်နှင့်အတူ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံးက ညီညွတ်စွာ လက်တွဲခဲ့ပြီး နယ်ချဲ့နှင့် ဖက်ဆစ်တို့ကို တော်လှန်၍ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်မည်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို အသိမှတ်ပြုရန်မှာ အရေးကြီးကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
ထို့အပြင် နအဖ စစ်အစိုးရက တဖက်သတ် ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုထားသော ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသည် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများကို အာမခံထားခြင်း မရှိကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစောထွန်းက ပြောသည်။ ယခုတောင်းဆိုချက်များသည် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံး၏ တောင်းဆိုချက်ပင်ဖြစ်၍ နအဖ က လက်ခံဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိပါက တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုများ ပြိုကွဲကာ တိုင်းပြည်၏ အနာဂတ် ပျက်သုန်းရန်သာရှိပြီး ငြိမ်းချမ်း၍ ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်သည့် နိုင်ငံတော်သို့ ချီတက်ရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားအဖွဲ့က အလေးအနက်ထား၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
ရန်ကုန် ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန်အရာရှိ စီအာပီပီနှင့် တွေ့ဆုံ
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး စတီဖင်ဘလိပ်သည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့နှင့် မတွေ့ဆုံမီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားပြုကော်မတီ (စီအာပီပီ) နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ် (၃) ဦးနှင့်လည်း ရန်ကုန်မြို့တနေရာတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ၊ စီအာပီပီ၏ အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အမေရိကန်သဘောထားနှင့် စီးပွားရေးပ်ိတ်ဆို့မှု အပြောင်းအလဲ ရှိလာပါက တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့များ၏ သဘောထားစသည်တို့ကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သူ စီအာပီပီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရှေ့တောင်အာရှ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာစတီဖင်ဘလိပ်ဘက်မှ ဆွေးနွေးခဲ့မှုများ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ “သူတို့က sanction နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပေါ်လစီနည်းနည်းပြောင်းချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ အဓိကက အစိုးရကိုသာ ထိခိုက်စေမယ်။ နောက် အစိုးရနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုသာ ထိခိုက်စေမယ်။ သာမန် ဆင်းရဲသား ပြည်သူတွေကို အကျိုးရှိမယ့် Sanction မျိုးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒါကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲလို့ မေးတယ်။ ဆိုတော့ အန်ကယ်တို့က ဒီလိုဆိုရင်တော့ လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်” ဟု ဦးအေးသာအောင် က ပြောသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ စီအာပီပီမှ ဦးအေးသာအောင်နှင့် အတူ ဦးနိုင်ငွေသိမ်း၊ ဦးနိုင်ထွန်းသိမ်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြ သော်လည်း ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်မှာ ခရီးလွန်နေသဖြင့် မတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မဂ္ဂဇင်းထုတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးတဦးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အငြိမ်းစား) တဦး ဦးဆောင်သည့် မဂ္ဂဇင်းတအုပ်ကို ပြီးခဲ့သည့်တပတ်မှ စတင်ကာ ထုတ်ဝေလိုက်သည်။
အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အငြိမ်းစား) ဦးကျော်ဆန်းက ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မြင်းခြံမြို့နယ်အမည်ရှိ မဂ္ဂဇင်းကို ထုတ်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။
စာအုပ်ထဲတွင် သူတို့၏ ဓာတ်ပုံများ၊ မြင်းခြံမြို့အကြောင်း၊ ဦးအောင်သောင်းမှ မြင်းခြံမြို့တွင် ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသည်တို့ကို အသားပေး ဖော်ပြထားသည်။
မြင်းခြံမြို့သားဖြစ်သည့် ဦးကျော်ဆန်းသည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ရန်အတွက် ယခုကတည်းက ကြိုပြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။ ရန်ကုန်-မြင်းခြံမြို့နယ်အသင်း ရန်ကုန် နာယကနှင့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး (ဗဟို) အတွင်းရေးမှူး အမှတ် (၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းနှင့် မြင်းခြံမြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဆန်းဟု စာအုပ်ထဲတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
မဂ္ဂဇင်းမှာ စာမျက်နှာပေါင်း ၂ဝ၉ မျက်နှာရှိပြီး စာရေးဆရာများသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာတွင် ရေးသားလေ့ရှိသည့် မြင်းခြံ မျိုးထွန်း၏ “မိဘနှစ်ပါးသို့ ပန်ကြားလွှာ” ၊ တက္ကသိုလ် မြတ်သူ၏ “တသက်မမေ့ရ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေသို့” အမည်ရ ဆောင်းပါးများလည်း ပါရှိသည်။
စာရေးဆရာ မြင်းခြံ မျိုးထွန်းသည် ယခင်က သစ်တောဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုဝန်ကြီးဟောင်းဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူး သိုက်ထွန်း ဖြစ်သည်။
ဦးကျော်ဆန်းသည် ပြီးခဲ့သည့်လက ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အရပ်သား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ရာထူးမှ အငြိမ်းစားယူခဲ့ကာ၊ သမီး ၅ ဦးအနက် သမီးကြီးမှာ စစ်ဗိုလ်တဦးနှင့် အိမ်ထောက်ကျပြီး၊ သမီး ၂ ဦးမှာလည်း အင်္ဂလန်တွင် ကျောင်းတက်နေသည်ဟု ဒုတိယ ဒေသခံက ဆိုသည်။
( မဆလ ) ၀န်ကြီးဟောင်းအိမ် ဖောက်ထွင်းခံရ
ရန်ကုန် ရွှေတောင်ကြားလမ်းတွင် နေထိုင်သည့် မဆလခေတ်ဝန်ကြီးဟောင်း အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီးစိန်ရ၏အိမ် ဖောက်ထွင်းခံရပြီး ကျပ်ငွေ သိန်းရာပေါင်းများစွာ တန်ကြေးရှိ စိန်ထည်ပစ္စည်းများ ဆုံးရှုံးသွားကြောင်း ဗဟန်း ရဲစခန်းမှ အမည်မဖော်လိုသူ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။ စစ်ဆေးချက်အရ အဲယားကွန်း တပ်ဆင်ထားသည့်နေရာမှ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်ရှင်များ၏ တရားဝင် စာရင်းပေးချက်အရ (၄) ရတီ ရှိသည့် စိန်နားကပ်တရံအပါအဝင် အခြား စိန်ထည် (၁၇) မျိုး ခိုးယူခံရ ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစာရင်းသည် ရဲစခန်းကို ပေးသည့် စာရင်းသာဖြစ်ပြီး အခြား စာရင်းမပေးသည့် ငွေသား နှင့် ရတနာပစ္စည်းများလည်း ပါဝင်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ရဲဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
ယခု စာရင်းအရ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသည့် ပစ္စည်းများ မည်မျှတန်ကြေးရှိနိုင်သလဲ ဆိုပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးအတွင်းမှ စိန်အရောင်းဆိုင်တဆိုင်ကို စုံစမ်းရာ ၎င်းတို့ဆိုင်သို့ ယခု နေ့ခင်းပိုင်းကပဲ ရဲမှုခင်းသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်စုံစမ်းသွားသည့်အတွက် ခိုးယူခံရသည့် ပစ္စည်း (၁၇) မျိုးစာရင်းကို ၎င်းတို့လည်း ဖတ်ရကြောင်း၊ စိန်နားကပ်တရံတည်းကို ပျမ်းမျှ ကျပ် သိန်း (၂ဝဝ) ဝန်းကျင်ခန့် တန်ကြေးရှိပြီး အခြား ရတနာပစ္စည်းများမှာမူ တန်ဖိုးမှန်းဆရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ ရဲများက အကယ်၍ စာရင်းပါ စိန်ထည်များကို လာရောက်ရောင်းချသူ ရှိပါက ဆိုင်ထဲတွင် အချိန်ဆွဲထားပြီး ၎င်းတို့ထံ အမြန် တယ်လီဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားရန် မှာကြားထားကြောင်း ပြောသည်။
အမေရိကန် အရာရှိနှင့် တွေ့ဆုံမှုမှ အပြောင်းအလဲ မဖြစ်နိုင်ဟု အန်အယ်ဒီ ပြောကြား
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာ စတီဖင် ဘလိတ်နှင့် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံမှုကြောင့် အပြောင်းအလဲကြီးတခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာ မရှိဟု အန်အယ်ဒီက ပြောဆိုသည်။
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော မစ္စတာ စတီဖင် ဘလိတ် Stephen Blake နှင့် အန်အယ်ဒီ တာဝန်ရှိသူများသည် ယမန်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ပါတီရုံးချုပ်၌ တနာရီကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုအပေါ် ယခုလို ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့က ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဦးဝင်းတင်၊ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ ဦးညွန့်ဝေ၊ ဦးသန်းထွန်း၊ ဦးလှဖေ၊ သခင်စိုးမြင့် စသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ၆ ဦး အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း၊ ဗဟိုပြန်ကြားရေး ကော်မတီမှ ဦးဟံသာမြင့်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အခြား ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်သော ဦးလွန်းတင်၊ ဦးအောင်ရွှေနှင့် ဦးလွင်တို့သည် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ရောက် မြန်မာကလေးငယ်များ ခဲအဆိပ်သင့်မှု တိုင်းရင်းဆေး နှစ်မျိုးကို သံသယရှိ
မြန်မာအများစု အခြေချနေထိုင်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အင်ဒီယားနာပြည်နယ် ဖို့တ်ဝိန်းမြို့မှာ ကလေးငယ်များအကြား ခဲ အဆိပ်သင့်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက် တားမြစ်ချက်များ ထုတ်ပြန်လာသည်ဟု ဖို့တ်ဝိန်းနေသော မြန်မာများက RFA ကို ပြောသည်။
ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနမှ ဆေးတံဆိပ်နှင့်အတူ တားမြစ်လိုက်သည့် ကလေး ဆေးနှစ်မျိုးမှာ ဒေါ်တွေး၏ ဂေါမုတ္တဆေးနှင့် ဒေါ်ကျင် သူငယ်နာ ၀မ်းနှုတ်ဆေး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်တွေး၏ ဂေါမုတ္တဆေးမှာ ခဲ ဓါတ် ပါဝင်မှုသည် အမေရိကန် ဆေးဝါးဌာနမှာ ခွင်ပြုသော ပမာဏထက် အဆ ၂၀၀ ကျော် ပါဝင်နေပြီး ဒေါ်ကျင် သူငယ်နာဆေးသည်လည်း စိန်ဖြူ ပမာဏ အမြောက်အများ ပါဝင်နေသည်ဟု ဖေါ်ပြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အင်ဒီယားနား၊ အီလီနွိုက်၊ ကင်တာကီ၊ အိုဟိုင်းအိုး၊ မစ်ချီဂန်၊ အစ္စဆူရီ စသော ပြည်နယ်မှ ဒုက္ခသည်များအကြား ခဲ အဆိပ်သင့် ကလေးသူငယ် အရေအတွက် ၁၂၀၀၀ ရှိသည်ဟု သိရသည်။
( အာအက်ဖ်အေသတင်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် )
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရေး ထိုင်းထောက်ခံဟု အဖိဆစ် ပြော
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိစ္စမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ကုလအပေါ်တွင်သာ တည်မှီကြောင်းနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့်မူ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရေးနှင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ထောက်ခံကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး - KNU ကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်စေရန်နှင့် စစ်အစိုးရနှင့် ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ဖျောင်းဖျပေးပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ တိုက်တွန်းချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ်က ယမန်နေ့က ဤသို့ မှတ်ချက်ပေး ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ် သဘောမတူသော တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက သဘောတူခဲ့သည်ဟု မိမိကို အကြောင်းကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ဆက်ပြောသည်။
ထို့ပြင် သူက ဆက်ပြောရာ အာဆီယံ၏ ရပ်တည်ချက် သဘောထားမှာ အလွန်ပင် ရှင်းလင်းကြောင်းနှင့် လာမည့်နှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သည်ကို မြင်လိုကြောင်း ပြောသွားသည်။
သို့သော် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှ ထွက်လာသော အသံ အတော်များများက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဖွဲ့အားလုံးကို မျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးမည်ဆိုသည်ကိုမူ သံသယဖြစ်ကြကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သော မိမိ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားသူပုန်အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီ လမ်းပြမြေပုံတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးအတွက် KNU ကို ဖျောင်းဖျနားချပေးပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရက မိမိအား အကူအညီတောင်းခဲ့ကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာကာဆစ်က ထုတ်ဖော်ပြောကြားအပြီး ဤသို့ အဖိဆစ်၏ မှတ်ချက်ချ ပြောကြားချက် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့နေ ကိုဖိုးဖြူ သရက်ထောင်တွင် တိုက်ပိတ်ခံရ
နတ်မောက်မြို့ ယာသမားများအတွက် မြေကွက်အား စစ်တပ်က သိမ်းသည့် အမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ ကိုဖိုးဖြူကို သရက်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးထားရာ၌ ယခုအခါ တိုက်ပိတ်ထားသည်ဟု သရက်ထောင် အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် နီးစပ်သူများက ပြောဆိုသည်။
ကိုဖိုးဖြူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမှုသည် နတ်မောက်မြို့ ရွာမွန် အုပ်စု၏ လယ်သမား ၅၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်သော လယ်မြေဧက ၈၀၀၀ နီးပါးကို ပင်မ စက်လက်နက်တပ်က သိမ်းယူခဲ့ပြီး လယ်သမားများအား ပြန်လှည် ငှားရမ်းသည့် အမှု ဖြစ်သည်။ ထိုအမှုအတွင်း ဦးဆောင် တိုင်တန်းသူ ကိုဇော်ဌေးနှင့် သုံးဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ တရားရုံးတင်သည့်အခါ ကိုဇော်ဌေးအား ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
တိုင်တန်းသူ လယ်သမားများ ၅၀ဦးမှ ၃၀ဦးခန့်အား စစ်တပ်၏ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူ ILOအဖွဲ့ကို တိုင်းတန်းခြင်းမရှိကြောင်း လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ရသည်။ ၎င်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရှေ့နေကိုဖိုးဖြူအား မကွေးမြို့တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီး တရားအသင်းဖွဲ့စည်းမှုဖြင့် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် ၄ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
မတ်လ ၂၇ ရက်
ကုလပိုင် ပစ္စည်းများကို အစိုးရရုံးများနှင့် အင်ဂျီအိုများ အလွဲသုံးစားမှု ပေါ်ပေါက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ (UNHCR) ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးခွဲအပြင် အဆိုပါရုံးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ကိုင်နေသည့် အန်ဂျီအိုရုံး (၃) ခုအား ကုလစာရင်းစစ်အဖွဲ့က စစ်ဆေးရာ ပိုလျှံဝန်ထမ်းခန့်ထားမှု၊ စာချုပ်မရှိဘဲ ငွေထုတ်ပေးမှု၊ လောင်စာဆီလက်ကျန်ကွာဟမှု စသည်တို့ တွေ့ရကြောင်း ကုလစာရင်းစစ်အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
UNHCR ရုံးနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်နေသည့် Bridge Asia-Japan (BAJ) အန်ဂျီအိုရုံးတွင် ၀န်ထမ်းများပိုလျှံစွာ ခန့်ထားသည်။ BAJ ရုံးသည် တနှစ်ကို ဒေါ်လာသန်းဝက်မျှသာ သုံးစွဲသည့်ရုံးဖြစ်သော်လည်း Program မန်နေဂျာ တဦး၊ လက်ထောက်တဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိအပြင် စာရင်းစစ်နှစ်ဦး ခန့်ထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ကုလစာရင်း စစ်အဖွဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ ထောက်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် BAJ အန်ဂျီအိုသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် UNHCR ရုံးပိုင် ပစ္စည်းများ စာရင်းမှာလည်း မောင်းတောရှိ BAJ ရုံးစာရင်းနှင့်ကွာနေကြောင်း စာရင်းစစ်များက ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဌာနက သုံးစွဲနေသည်ဆိုသည့် ရန်ကုန် UNHCR ရုံးပိုင်ဆိုင်သည့် တလုံး ဒေါ်လာ (၃,၀၀၀) နီးပါးတန်သည့် ကွန်ပျူတာ (၁၀) လုံးဆိုသည်ကိုလည်း ရှာမတွေ့ ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ရေးထားသည်။
၎င်းပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်းတောအခြေစိုက် မြန်မာကြက်ခြေနီအဖွဲ့ရုံးအတွက် ပေးထားသည့် UNHCR ကားကိုလည်း ရန်ကုန် မြန်မာကြက်ခြေနီရုံးက အလုပ်အမှုဆောင်လူကြီးက သုံးနေကြောင်း တွေ့ရသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ UNHCR ရုံးအတွက် လိုအပ်သည့် ၀န်ထမ်းများ (အဓိက လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများ) ကို ရန်ကုန်မှ A&A Natural Resources Development ကုမ္ပဏီက ရှာဖွေပေးသည်။ သို့သော် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အဆိုပါ ကုမ္ပဏီနှင့် ရန်ကုန် UNHCR ရုံးတို့ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ထိုကုမ္ပဏီကို UNHCR မှ ဒေါ်လာ (၁၀၅,၀၀၀) ပေးထားပြီးသည့်တိုင် UNHCR နှင့် A&A Natural Resources Development ကုမ္ပဏီတို့ကြား စာချုပ်စာတမ်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်း မရှိသည်ကိုလည်း ကုလစာရင်းစစ်များက အပြစ်တင်ထားသည်။
ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့သာဖြစ်ဟု အန်အယ်ဒီ ပြောကြား
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားများကို စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်က တပ်မတော်နေ့အဖြစ် လွဲမှားစွာ ကျင်းပနေသည်ဟု အန်အယ်ဒီက ယနေ့ ပြောသည်။
ယနေ့ကျရောက်သည့် ၆၄ နှစ်မြောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန် အန်အယ်ဒီ ဌာနချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့အပြီး အဖွဲ့၏ ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ယင်းသို့ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
“ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုတာ လွတ်လပ်ရေး ရကတည်းက တောက်လျှောက်ကျင်းပလာတာ။ မဆလ လက်ထက်ကျမှ တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး ဒီနေ့ကို သူတို့ ရွေးချယ်တယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေ့ဟာ တပ်မတော်အတွက်နေ့ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်သားရော၊ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ရော၊ နိုင်ငံရေးသမားရော၊ ပြည်သူရော တော်လှန်ရေးမှာ အားလုံးပါဝင်တာ။ တပ်မတော်ကပဲ တော်လှန်တာ မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးပါဝင်လာတဲ့အတွက် တော်လှန်ရေးနေ့ပါ။ တပ်မတော်နေ့လို့ ပြောတာဟာ ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ နည်းနည်းလွဲတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကို သူတို့ ယူခဲ့တာတော့ကြာပြီ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် သခင်စိုးမြင့်က သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ယနေ့ အခမ်းအနားသို့ ဗြိတိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ အမေရိကန် စသည့် အနောက်နိုင်ငံများမှ သံတမန်များ တက်ရောက်ကြသည်။
သို့သော် တရုတ်၊ ရုရှ၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း အပါအဝင် အာရှနိုင်ငံများမှ သံတမန်များကို ဖိတ်ကြားခဲ့သော်လည်း တက်ရောက်လာခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
အန်အယ်ဒီမှ ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးလွင်နှင့် ဦးလွန်းတင်တို့မှလွဲ၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်အားလုံး၊ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၊ အခြားနိုင်ငံရေးလောကသားများ အပါအဝင် ဧည့်ပရိသတ် ၅ဝဝ ကျော် တက်ရောက်ကြသည်။
မြောက်ဥက္ကလာမှာ ဗုံးကွဲ တဦးသေ
မတ်လ (၂၆) ရက် ညနေ (၄) နာရီခန့်အချိန်က မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ် (၆) ကွေ့ရှိ တော်ဝင်နန်း တည်းခိုခန်းတွင် ဗုံးတလုံးပေါက်ကွဲရာ လူတဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးကာ နောက်တဦးမှာ လက်ဖျံတွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း ရန်ကုန်ဒေသခံများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်အေအက်ဖ်ပီသတင်းကမူ (၁) ဦးသေပြီး (၂) ဦးဒဏ်ရာရသည်ဟု ရေးထားသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ ဗုံးကို ဖောက်ခွဲရန်ကြံစည်နေစဉ် ပေါက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံအာဏာပိုင်တဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် စစ်အစိုးရအခေါ် တပ်မတော်နေ့မကျင်းပမီ တရက်အလို ရန်ကုန်၌ ယခုကဲ့သို့ ဗုံးပေါက်ကွဲခြင်း ဖြစ်ပြီး မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ လက်ချက်ဖြစ်သည်ကို စစ်အစိုးရဘက်က မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပေ။
စစ်ကားက ခရီးသည်တင်ကားကို တိုက်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အရှိန်မထိန်းနိုင်သော စစ်သုံးထရပ်ကား တစီးက ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားတစီးကို ကန့်လန့်ဖြတ် ဝင်တိုက်မိပြီးနောက် ဆက်လက်၍ လမ်းလည်ရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်မီးတိုင်ကို ဝင်တိုက်မှု ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်က ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စစ်ကားက ခရီးသည်တင်ကားကို တိုက်လမ်းမတော်မြို့နယ် ဘုန်းကြီးလမ်းအတိုင်း ကမ်းနားလမ်းဘက်မှ အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်လာသော စစ်သုံးမော်တော် ယာဉ်အမှတ် (* ၄၁ဝ၁ ဗ ) မှ မဟာဗန္ဓုလ လမ်းအတိုင်း ဆူးလေဘုရားဘက်သို့
မောင်းနှင်လာသော ရွှေဧည့်သည်-၂ ယာဉ်လိုင်းမှ ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကား ယာဉ်အမှတ် (၇ခ/၉၆၈ဝ) ကို ဘုန်းကြီးလမ်းမီးပွိုင့်သို့ အရောက်တွင် ကန့်လန့်ဖြတ် ဝင်ရောက် တိုက်မိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘတ်စ်ကား အတက်အဆင်းတံခါးအနီး လိုက်ပါလာသူ ယာဉ်နောက်လိုက်မှာ ဒဏ်ရာ ရရှိသွားပြီး “ရင်ဘတ်အောင့်သည်၊ ဆေးရုံပို့ပေးပါ” ဟု ပြောဆိုနေသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ပြောသည်။ ထို့အပြင် စစ်ကားတွင် လိုက်ပါလာသူတစ်ဦး လမ်းပေါ်သို့ လွင့်စင် ပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေများက ဆိုသည်။
ခရီးသည်တင်ယာဉ်၏ လူအတက်အဆင်း တံခါးပေါက် နေရာကို ဦးစွာ တိုက်မိခဲ့သဖြင့် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားမှာ ယိမ်းခါသွားခဲ့စဉ် ကားနောက်ဘက် ယာဘက်ပိုင်းကို ထပ်မံ တိုက်မိခဲ့ရာ ဘတ်စ်ကားသည် ဘီးနှစ်ဘီး မြေပြင်မှ လွတ်သည်အထိ
တိမ်းစောင်းသွားခဲ့ပြီး အဆိုပါ အနေအထားအတိုင်း ဆယ့်ငါးပေခန့် ဆက်လက် ရွှေ့လျားသွားခဲ့သည်။
စစ်ကားက ခရီးသည်တင်ကားကို တိုက်ထို့နောက် စစ်ကားသည် လမ်းမတော် ရဲစခန်းအနီး စိုးမိုးကျော်နှင့် ဝိုင်းဝိုင်းလည် ထီဆိုင်ရှေ့ရှိ လမ်းမီးတိုင်ကို ထပ်မံဝင်တိုက်ပြီးမှ ရပ်တန့်သွားသည်.။
စည်ပင်ငွေနှင့် ကြံ့ဖွံ့အတွက် စည်းရုံး
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်းသည် အများပြည်သူထံမှ ကောက်ခံထားသည့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ပိုင် ငွေများဖြင့် ကြံ့ဖွံ့အတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုများ လုပ်နေကြောင်း အင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း နေထိုင်သူ မြို့ခံများက ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု ပြီးသည့်နောက် စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ လာရောက်ပြီး ကြံ့ဖွံ့ ဆိုင်းဘုတ်များ စိုက်ထူကာ လမ်းခင်းခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် (၃-၄) ရက်မျှ ဟန်ပြ လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် မပြီးစီးပဲ ရပ်တန့်နေသည်မှာ ယနေ့တိုင်ဖြစ်ကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
အင်းစိန်မြို့ခံ ပြည်သူများကမူ ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်း၏ ယခုလုပ်ရပ်သည် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် ကြံ့ဖွံ့က ဖွဲ့စည်းယှဉ်ပြိုင်မည့် နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို မဲပေးရန် အကြိုမဲဆွယ်ပွဲ ပြုလုပ်နေခြင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူများထံမှ ကောက်ခံရငွေဖြင့် ပြည်သူများကို ပြန်စည်းရုံး ငါးကြင်းဆီနှင့် ငါးကြင်းကြော်သည့်သဘောဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူအားလုံးကလည်း သိနားလည်ကြကြောင်း ပြောသည်။
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ) ။ ။ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာ ကြည်အောင်သည် အသက် ၇၂ နှစ်အရွယ်တွင် နှလုံးရောဂါဖြင့် မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ယနေ့ ညနေပိုင်းက ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။
အမည်အရင်း ကြည်လင်နှင့် ကလောင်အမည် ကြည်အောင်သည် စာဖတ်ပရိသတ်က ချစ်ခင်လေးစား ခံရသူ ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးသည် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ “လမင်းတရာ ကဗျာများ” စာအုပ်ဖြင့် အမျိုးသား စာပေဆု ရရှိခဲ့ပြီး၊ “မိခင် မာရသွန်”၊ “သိစ္စာရှာဖို့ ငါ မြင်းရှာမယ်” ၊ “ဟေမန္တ ခြေမြန်တော်” စသည့် ကဗျာများဖြင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ သူသည် မောင်ရူပ အမည်ဖြင့် ချင်းတွင်းဂျာနယ်များတွင် ယခင်ကတည်းက ကဗျာများ ရေးသားခဲ့သည်။
ကဗျာဆရာ ကြည်အောင်၏ ဈာပနကို နိုင်ငံတော် ဈာပနအဖြစ် ပြုလုပ်ပေးသင့်ကြောင်း ကိုလေး (အင်းဝ ဂုဏ်ရည်) က ဆိုသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ပြည်သူ့ဆေးရုံ အအေးတိုက်မှ ကြာနီကန် (သုဿန်) တွင် သင်္ဂြိုဟ်မည်။
ပြောင်းရွေ့ မြေနေရာ အင်းစိန် မယက ပွဲစားလုပ်
အမှတ် (၃) သံမဏိစက်ရုံ ကုန်ကြမ်းသယ် ရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန်အတွက် နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ကြရသော အင်းစိန်ဖော့ကန်ရပ်ကွက်မှ မိသားစုအချို့အိမ်မရရှိသေးမှုကို အထက်အာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားထားသော်လည်း ဖြေရှင်းပေးခြင်းမပြုသည့်အပြင် အင်းစိန်မယကအဖွဲ့ဝင်တချို့က အိမ်ပွဲစားလုပ်နေကြကြောင်း ရွှေ့ပြောင်း ရပ်ကွက်သားတဦးက ပြောသည်။
ရွှေ့ပြောင်းခံအိမ်ခြေ (၄၀၀) ကျော်မှ အိမ်ထောင်စုအချို့ ရယကအဖွဲ့ဝင်များ၏ မသမာမှုများကြောင့် အိမ်မရရှိခဲ့ကြ ၍ အထက်တိုင်ကြားရာ မယက က ယခုကဲ့သို့ ဖြေရှင်းပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စများအတွက် မတ်လ (၈) ရက်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်မှ မယကအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စရဖများက ရပ်ကွက်သားအချို့အား လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အရေးယူခြင်း၊ ရှင်းပေးခြင်း မရှိဘဲ အင်းစိန်မယကမှသာ လာရောက်အိမ်ပွဲစားလုပ်နေသည်ဟု ရပ်ကွက်သားများက ဆိုသည်။
တွံတေး ကျူရှင်ဆရာ ဆန္ဒပြပြန်ပြီ
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့မှ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြသမား ကျူရှင်ဆရာ ဦးအောင်ဖေသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြရာ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသည်။
အသက် ၅၂ နှစ်အရွယ် ဦးအောင်ဖေသည် တွံတေးမြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့တွင် ယနေ့နံနက် ၆ နာရီခန့်မှ နေ့လယ် ၁၁ နာရီခွဲအထိ (၅ နာရီခွဲခန့်အကြာ) မတ်တပ်ရပ် ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “သူက ဘာမှ မလုပ်ဘူး။ သူ့စာ သူ ဖတ်နေတာ။ စည်းဝိုင်းတားပြီး မတ်တပ်ရပ်တယ်။ တမနက်လုံး ရဲတွေ မတွေ့ဘူး။ တွေ့တော့မှ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ခေါ်သွားတာပဲ။ ရိုးရိုးရဲတွေ၊ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ရပ်ကွက်လူကြီး (ရယက) တွေ ပါတယ်” ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
Posted by လူလ at Sunday, March 29, 2009 No comments:
Labels: တနှစ်အတွင်း သတင်းမှတ်စု
သတင်း မှတ်စု ( ၁၂ )
မတ်လ ၁၆ ရက်
ရက်သတ္တပတ် ၁၂ ၊ ၂၀၀၉
ရန်ကုန်တွင် အင်တာနက်ဖုန်းဆိုင်တွေ များလာ
ရန်ကုန်မြို့တွင် ယခုနောက်ပိုင်း အင်တာနက်မှတဆင့် နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ရန် သီးသန့်ဝန်ဆောင်မှု
ပေးသည့်ဆိုင် များလာကြောင်း အသုံးပြုနေသူများထံမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ယခု ပေါ်လာသည့် အင်တာနက်မှတဆင့် နိုင်ငံခြား ဖုန်းခေါ်သည့်ဆိုင်များတွင် စင်ကာပူကို တမိနစ် ကျပ် (၄ဝ)၊ ထိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့ကို တမိနစ် ကျပ် (၁ဝဝ)၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် တမိနစ် ကျပ် (၁၅ဝ) စသဖြင့် ဈေးနှုန်း အလွန်ချိုသာခြင်းကြောင့် သွားရောက်သုံးစွဲသူများ အလွန်အဆင်ပြေကြောင်း သိရသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေအရ မည်သည့်ပုဂ္ဂလိက တဦးတယောက်မျှ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကို အခကြေးငွေယူ လုပ်ကိုင်ခွင့်မရှိဘဲ လုပ်ကိုင်ပါက ထောင်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်သည်အထိ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ နယ်စည်းမခြား သတင်းထောက်များအဖွဲ့မှ မကြာခင်က ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အင်တာနက်သုံးနိုင်သူ (၄၀,၀၀၀) သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ (၀.၁) ရာခိုင်နှုန်းသာကြောင်း ရေးထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေ (၂,၀၀၀) တွင် အင်တာနက်သုံးနိုင်သူ (၂) ဦးထက်လျော့နည်းနေသည့်အတွက် ကမ္ဘာတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှု နိမ့်ကျသည့်နိုင်ငံများထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု ထောက်ပြထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် အင်အားစုများအကြား သဘောထားကွဲလွဲ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရေးအတွက် ပူးတွဲပြင်ဆင်နေသည့် ကိုအေးလွင်နှင့် ဦးအုန်းလွင် ဦးစီးသည့် နိုင်ငံရေးအင်အားစု နှစ်ခုအကြား သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများ အဆိုအရ သိရသည်။
နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းကာ တပ်ပေါင်းစု ဖွဲ့ရာတွင် အင်အားစုနှင့် အဖွဲ့ချုပ်ဟူသော အမည်နာမသာမက ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်ပိုင်ပါတီအင်အားစုဖြင့် ဝင်ရောက်ရေးနှင့် တပ်ပေါင်းစုသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရေး စသည်တို့အပေါ်၌လည်း သဘောထား ကွဲလွဲနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် အမျိုးသားရေး တွေ့ဆုံပွဲကို ဦးအုန်းလွင်က ဦးစီးကျင်းပရာ ဖိတ်ကြားထားသူ တသီးပုဂ္ဂလ အပါအဝင် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၈ ဖွဲ့အနက် ကိုအေးလွင်၏ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ (ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ) က တက်ရောက်ခြင်း မရှိသလို၊ ခေတ်သစ်သိပ္ပံ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ လေ့လာရေး မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းတော်သားစု အဖွဲ့ကလည်း သဝဏ်လွှာသာ ပေးပို့ခဲ့သည်။
မီးဘေး ကာကွယ်ရေးသတင်း ငွေမရှိသဖြင့် တီဗွီမှ မလွင့်နိုင်
မီးဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူများ သိမှတ်ဖွယ်၊ ပြည်သူများ သတိပြုနိုင်ရန် အသိပေးမှုများကို ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်များက ငွေမရ၍ ထုတ်လွှင့်မှု ဦးစားမပေးကြောင်း မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ အရာထမ်းတဦးက ပြောသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွင် မီးလောင်မှုကြောင့် ၂၀၀၈ ခုတွင် ဆုံးရှုံးမှု ငွေကြေးပမာဏမှာ သိန်းပေါင်း (၄) သောင်းခန့် ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၀၇ ခုတွင် သိန်းပေါင်း ကိုးထောင်ခြောက်ရာကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာ များက ဖော်ပြကြသည်။
မီးသတ်အရာထမ်းတဦးက “ကျနော်တို့ လူမှုဝန်ထမ်းဌာနဟာ ငွေကြေးရှိတဲ့ ဌာနမဟုတ်ပါဘူး၊ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့လည်း မီးဘေးကြိုတင်မှု ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကို သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား ထုတ်လွှင့်မှု စတဲ့မီဒီယာတွေမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မထည့်နိုင်ဘူး” ဟု ပြောသည်။
စစ်တွေမြို့နယ် ကားလမ်းပြင် ဒေသခံများ လုပ်အားပေးရ
ဒါကာ (မဇ္ဈိမ)။ ။ စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်း ကားလမ်းပြင်ရာသို့ နီးစပ်ရာ ရွာသားများအား ဒေသခံစစ်တပ်က ယခုလ ၁ဝ ရက်ခန့်မှ စတင် ဆင့်ခေါ်ကာ ယနေ့တိုင် လုပ်အားပေးခိုင်းနေသည်။
စစ်တွေမြို့မြောက်ဘက် ၆ မိုင်အကွာရှိ ရေချမ်းပြင်ရွာသို့ သွယ်တန်းထားသော ကားလမ်းတွင် ပျက်စီးနေသော လမ်းအပိုင်းကို မြေဖို့ရာ မောင်နီပြင်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှ မောင်နီပြင်၊ အောင်မင်္ဂလာ၊ ဒုံးပြင်တောင်၊ ဒုံးပြင်မြောက်၊ သင်ပုန်းတန်း၊ ပျားလည်ချောင်းနှင့် ရေချမ်းပြင် ရွာသားများအား စစ်တွေအခြေစိုက် အမှတ် ၉ဝ၆ အမြောက်တပ်က ခိုင်းစေနေခြင်းဖြစ်သည်။ ပျက်စီးနေသော အလျား ပေ ၅ဝ၊ အနံ ပေ ၃ဝ၊ အမြင့် ၁ဝ ပေ အတွက် မြေဖို့ရန် မြေကောင်းရရှိနိုင်မည့် နေရာများမှ တူးဖော်သယ်ယူရပြီး၊ လုပ်အားပေး မလိုက်နိုင်သူများမှာ ဒဏ်ငွေအဖြစ် တရက်လျှင် ကျပ် ၁ဝဝဝ စီ စစ်တပ်သို့ ပေးဆောင်ရသည်။
ကျေးရွာတရွာမှ ရွာသား ဦးရေ ၁ဝဝ စီ ခေါ်ယူကာ တရက်စီ အလှည့်ကျ စေခိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
လမ်းတခုလုံးမှာ ကားသွားနိုင်သည့် ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီး၊ ရေချမ်းပြင်နှင့် စစ်တွေအကြား ကူသန်းရောင်းဝယ်ရေး အထောက်အကူပြုရာ လမ်းဖြစ်သည်။
မြွေဆိပ်ဖြေဆေး မြေမြုပ်ပြီး အအေးခံရ
မြွေဆိုးပေါများရာ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း အုတ်ဖိုမြို့နယ်နှင့် မိုးညိုမြို့နယ်တို့တွင် မြွေကိုက်ခံရပါက အသက်ကယ် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးကို မိုးညိုမြို့၏ (၄) မိုင်ခန့်အကွာ ဘုံလုံးအိုင်ကျေးရွာတွင် အချိန်မရွေး ရရှိနိုင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးမှာ ရန်ကုန်တွင် တလုံး (၅) သောင်းကျပ်ပေးရပြီး မြွေပွေးအဆိပ်ဖြေဆေး (၂) လုံး၊ မြွေဟောက် အဆိပ်ဖြေဆေး (၂) လုံး စုစုပေါင်း (၄) လုံးကို ဘုံလုံးအိုင် ကျေးရွာလူငယ်တို့မှ ငွေကြေးစိုက်ထုတ် ၀ယ်ယူထားကြကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆေးတို့ကို ရေခဲဘူး (သို့မဟုတ်) ရေခဲသေတ္တာထဲ၌ နာရီမလပ် အအေးဓာတ် ပေးထားရကြောင်း ဒေသခံလူငယ်များက ရှင်းပြသည်။ ဘုံလုံးအိုင် ကျေးရွာသည် စိမ့်စမ်းပေါများသည်ကြောင့် စိမ့်ထွက်ရာ သဲမြေကို အတန်ငယ်ယက်၍ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ပုလင်းကို သဲတွင်းထဲသို့ အမှတ်အသားပြုထည့်ထားရကြောင်း၊ ဆေးပုလင်းများကို (၂၄) နာရီ အအေးပေးစနစ် ထားရှိနိုင်သည့် ပထ၀ီအနေအထား ရှိနေခြင်းကြောင့် မြွေကိုက်လူနာများ၏ အသက်ကို အချိန်မီကယ်တင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာလူကြီးတဦးက ပြောသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားများက ကန်ဒေါ်လာ ၃၅ ဘီလီယံတန် မြန်မာရေကာတာ စီမံကိန်းများ ရပ်ရန် တောင်းဆို
ချင်းမိုင်။ ။ ဒေသခံပြည်သူများကို ထိခိုက်စေပြီး စစ်အစိုးရအတွက် ဘဏ္ဍာရေး အထောက်အပံ့ ရစေသည့် ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်းများကို ရပ်ဆိုင်းကြပါရန် ကမ္ဘာတလွှားရှိ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို စနေနေ့က တောင်းဆို လိုက်ကြပါသည်။
နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများအတွက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေးနေ့ အဖြစ် စနေနေ့က ကျင်းပသော ဆန္ဒပြပွဲများတွင် လှုပ်ရှား တက်ကြွသူများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝါဒီတို့က ထိုသို့ တောင်းဆိုလိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်း အများအပြားနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများကွန်ရက် (Burma Rivers Network) က စနေနေ့က ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်တွင် ရေကာတာများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသခံပြည်သူများ အပေါ် ကျရောက်လာမည့် သက်ရောက်မှုများကို နားလည် သဘောပေါက်ကြပါရန် အဆိုပါ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသူများ ဖြစ်သည့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ ရေကာတာ တည်ဆောက်ရေး ကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများကို တောင်းဆိုလိုက်ကြပါသည်။ မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် မကြာသေးခင် နှစ်များက ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့် အနည်းဆုံး ရေကာတာ ၅ ခုတည် ဆောက်မည့် သံလွင်မြစ် အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများပေါ်တွင် ရေကာတာများ တည်ဆောက်ရန် သဘောတူ စာချုပ်များကို လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရေကာတာများမှ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ၃၅ဝဝဝ မဂ္ဂါဝပ် ထွက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး တန်ဘိုးအားဖြင့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၅ သန်း ကုန်ကျမည် ဖြစ်သည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများက ခန့်မှန်း ပြောဆိုကြသည်။
သံလွင်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့် ဝဲကြီးဒေသတွင် ဇီဝမျိုးစုံမှု (biodiversity) ကို လေ့လာချက်အရ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အပင် ၁၉၄ မျိုးနှင့် မျိုးတုံး ပျောက်ကွယ်တော့မည့် တိရိစ္ဆာန် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၂ မျိုး အပါအဝင် ရှားပါးမျိုးစိတ်ပေါင်း ၂ဝဝ ကို အန္တရာယ် ကျရောက်စေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
အရီးတောင်း၊ ပင်ပျိုရွက်နု၊ ရွှေတုတ်၊ မွမွလေးတို့ အပါအ၀င် မြန်မာ့လက်ဖက်အသား (၄၃) မျိုးကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဈေးများအလိုက် ရှင်းလင်းသုတ်သင်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ (၁၂) ရက်နေ့ထုတ် စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် အဆိုပါ လက်ဖက် (၄၃) မျိုးကို အစားအသောက်တွင် သုံးစွဲရန် ခွင့်မပြုသော အ၀ါရောင်ဆိုးဆေး (Auramine o) ပါဝင်နေကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရ သည့်အတွက် စားသုံးရန် မသင့်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ဖက်တွင် ဓာတ်ခွဲတွေ့ရှိရသည့် Auramine o သည် ချည်၊ သိုးမွေး၊ ပိုးထည်၊ စက္ကူ၊ သားရေများကို အရောင်ဆိုးသော ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း၊ စားသုံးသူအား လတ်တလော အဆိပ်အတောက် မဖြစ်သော်လည်း ရေရှည်တွင် အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်စေခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်စေခြင်းတို့ကြောင့် စားသုံးရန် မသင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံတန်းမှ ပင်ပျိုရွက်နုသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ မည်သို့စီမံရမည်ကို လာရောက်ညွှန်ကြားခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ရောင်းချမှုရပ်ထားကြောင်း ဆိုသည်။
FDA ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက နောက်ရောင်းရမည့် လက်ဖက်များကို ဆိုးဆေးကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် ပေးပြီးမှ ရောင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
လေဖြတ်နေသူ နိုင်ငံရေးသမား အဖမ်းခံရ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရန်ကုန်တိုင်း တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေး အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဦးကြည်လွင်ကို ယမန်နေ့ညက အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးသွားသည်။
လေဖြတ်ထားဖြင့် လွန်ခဲ့သည့် တနှစ်ခွဲခန့်ကတည်းက မြို့နယ်စည်း အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ထားသူ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် ဦးကြည်လွင်အား သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့ (SB)၊ ရပ်ကွက်ကောင်စီဝင်များနှင့် စွမ်းအားရှင် စုစုပေါင်း ဦးရေ ၃ဝ ခန့်က မေးမြန်းရန်ဟုဆိုကာ နေအိမ်မှ ဖမ်းခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ “အိမ်ပေါ်လာပြီးတော့ စာရွက်စာတမ်း အကုန်ရှာတယ်။ စမ်းချောင်းက ကိုပေါက်စနဲ့ ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲ။ သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးတယ်။ စမ်းချောင်းက ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ခင်ဗျားကို မေးချင်လို့ပါဆိုပြီးပဲ ပြောသွားတယ်” ဟု ညီဖြစ်သူ ကိုသိန်းမြင့်ထွန်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဦးပေါက်စ ခေါ် ဦးသက်ဝေ (ဥက္ကဋ္ဌ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အန်အယ်ဒီ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် (အိုင်အယ်အို) သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးစစ်သား အသုံးပြုမှု တိုင်ကြားရန် ကြိုးစားသဖြင့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက အင်းစိန်ထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ကျခံခဲ့ရသူဖြစ်သည်။
သို့သော် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရက အကျဉ်းသား ၆၃ဝဝ ကျော်အား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးရာတွင် သူလည်း ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်။
ဆရာစံ အကျဉ်းစခန်းခွဲ မီးလောင်
စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးမြို့နယ်ရှိ ဆရာစံအကျဉ်းစခန်းခွဲ မတ်လ (၈) ရက် နေ့လယ် (၂) နာရီခန့်အချိန်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုးပါအကျဉ်းစခန်းခွဲမှာ တမူးမြို့မှ (၁) မိုင်ခန့်ဝေးသော ဆရာစံကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင်ရှိပြီး အကျဉ်းစခန်းခွဲ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကလေးမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၏ တရားဝင်သတင်းထုတ် ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မီးလောင်မှုကြောင့် သိန်း (၉၀) ခန့် ဆုံးရှုံးသည်ဟု ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားကြောင်း ကလေးမီးသတ်ဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် ပါရှိကြောင်း သိရသည်။ “မီးစတင်ကူးတဲ့အခါ ထောင်မှူး ဦးတင်ဝင်းဆိုတဲ့သူအိမ်ကို အရင်ကူးစက်တယ်။ အဲဒီကစတာပါပဲ” ဟု အဆိုပါ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၏ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
မီးလောင်ခြင်းကြောင့် အရာရှိလုံးချင်းအိမ်များအပါအ၀င် ရဲအိပ်ဆောင်၊ ရဲဘက်အိပ်ဆောင်၊ မိန်းဂျေး၊ ဖိုကြီး၊ ဘူးဝ၊ စပါးဂိုဒေါင်၊ ရိက္ခာဂိုဒေါင်၊ ဧည့်တွေ့ဆောင် စသည်တို့အပါအ၀င် အဆောက်အအုံ (၂၆) လုံးနှင့် ကျွဲနွားတဲ၊ ထွန်စက်၊ စပါးချွေစက်၊ စပါးကြိတ်ခွဲစက်အင်ဂျင်၊ တရုတ်နီ (၂၂) ကောင်ဆိုင်ကယ်၊ စပါးတင်း (၂,၀၀၀) ကျော်၊ ဆန်အိတ်များ စသည်တို့ မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အောင်ပွဲဆင်ဖို့ ထောင်ထဲဝင်စို့' သံချပ်ခွေ စတင်ဖြန့်ချိ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အောင်ပွဲဆင်ဖို့ ထောင်ထဲဝင်စို့ အမည်ရ ပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲခေါ် သံချပ်ခွေကို အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများက ယမန်နေ့က နယူးဒေလီမြို့တွင် စတင် ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
၁၁ ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သည့် ယခု မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန် သံချပ်ထဲတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရ သာမက ပြည်ပအခြေစိုက် အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်း အစိုးရကိုပါ ထည့်သွင်းဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်ထားသည်။
“ဒီနှစ် သံချပ်မှာက သင်ပုန်းကြီးကဏ္ဍထဲမှာ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို ဝေဖန်ထားတာလည်း ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ အစိုးရလည်း ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို လက်တွေ့ကျတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်စေချင်တယ်” ဟု သံချပ်ရေးသူ ကဗျာဆရာ မြတ်ထက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ သံချပ်နှင့် သီချင်း ၁၁ ပုဒ် ပါဝင်ရာ အဖွင့်၊ နှုတ်ခွန်းဆက်၊ ကြံ့ဖွတ်၊ လူထုဘ၀အခြေအနေ၊ နာဂစ်(၁)၊ နာဂစ်(၂)၊ ဥပဒေ၊ ဆန္ဒခံယူပွဲ၊ စပ်မိစပ်ရာ၊ သင်ပုန်းကြီး၊ တိုက်ပွဲခေါ်သံ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် တင်ဆက်ထားသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပိုက်လိုင်းဖြင့် ဓာတ်ငွေ့တင်ပို့မှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရ
ရခိုင်ကမ်းလွန်မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပိုက်လိုင်း ဖြင့် တင်ပို့မှုကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းထားကြောင်း သိ ရသည်။
ရခိုင်ကမ်းလွန်ဒေသလုပ်ကွက် A-1 နှင့် A-3 မှ ရရှိလာမည့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့များကို ပိုက်လိုင်းဖြင့်သွယ်တန်းရယူရန်အတွက်လိုအပ်သော မြေမျက်နှာသွင်ပြင်မြေ ပုံရေးဆွဲခြင်း (topographic map) နှင့် မြေနမူနာ စစ်ဆေးခြင်း (soil test) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှု ပြီး စီးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
အဆိုပါရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပိုက်လိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကျောက်ဖြူမြို့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည့် ကူ မင်းမြို့တို့ကို ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရေနံသယ်ယူရန်အတွက် အ မေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိသည့်ပိုက်လိုင်းနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သယ်ယူရန် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၀၄ ဘီလျံ တန် ဖိုးရှိသည့် ပိုက်လိုင်းတို့ကို တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင် ငံ ကျောက်ဖြူမြို့အနီးတွင် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်ကန်များ ကိုတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။အဆိုပါရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ် ငွေ့ပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကိုChina Na-tional Petroleum Corp. နှင့် မြန်မာ့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း တို့ကပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရခိုင်ကမ်းလွန်မှ ထွက်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအား တရုတ် နိုင်ငံသို့ ပိုက်လိုင်းသွယ်တန်းရောင်း ချရန် ဒေ၀ူးကုမ္ပဏီဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ သဘောတူ စာချုပ်ကို ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနားဟို တယ်တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ ကြောင်းနှင့် သဘောတူညီမှုအရ ကန်ထရိုက်စာချုပ်သက်တမ်းမှာ နှစ် ၃၀ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
( ၀ိကလီအဲလဲဗင်း ဂျာနယ်မှ ကောက်နှုတ်ချက် )
မတ်လ ၁၇ ရက်
စက်မှု ( ၁ ) စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း အရှုံးပေါ်
စက်မှု (၁) ၀န်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဌာနကြီး အရှုံးပေါ်ပြီး တွက်ခြေမကိုက်တော့သည့် အတွက် အဆိုပါဌာန ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးကို စစ်ဗိုလ်မထားတော့ဘဲ အရပ်သားကိုသာ ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ရာထူးတိုးပေးထားသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းမှ စီးကရက်စက်ရုံ၊ ဘီယာစက်ရုံနှင့် သကြားစက်ရုံ များကို ပုဂ္ဂလိကမှ လွှဲယူတော့မည်ဖြစ်သည်။ လက်ကျန် အခြားစက်ရုံသေးများမှာ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေမကိုက် သည့် စက်ရုံများသာဖြစ်သဖြင့် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဌာနကြီး ပြိုလဲလုနီးပါးဖြစ်နေသည်ဟု စက်ရုံမှူးတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်စီးကရက် စက်ရုံအမှတ် (၂) လှိုင်မြို့နယ်အား လက်ရှိဝန်ထမ်း (၆ဝဝ) ကျော်နှင့်အတူ ပုဂ္ဂလိကလက် လွှဲပြောင်းရာ ပုဂ္ဂလိကမှ ဝန်ထမ်း (၂ဝဝ) ကျော်သာ လက်ခံသည်ဟု ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်း၏ လက်ထောက် တဦးက ပြောသည်။ ကျန်ဝန်ထမ်း (၂ဝဝ) ကျော်ကို မြန်မာ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလက်အောက်ရှိ စက်ရုံအချို့သို့ အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ပြီး ကျန် (၁၇ဝ) ခန့်မှာ အသက်ကြီးဝန်ထမ်းများဖြစ်သည့်အတွက် စက်မှု (၁) ရှိ အခြားစက်မှု လုပ်ငန်းများက လက်မခံလိုသဖြင့် အဆိုပါဝန်ထမ်းများ အလုပ်ပြုတ်လုနီးပါး ဖြစ်နေသည်ဟုလည်း ပြောသည်။
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဌာနကြီး ယခုကဲ့သို့ ယိမ်းယိုင်နေချိန်တွင် လစ်လပ်သည့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးအား စစ်ဗိုလ်များကို မပေးတော့ဘဲ အရပ်သား ဓာတုအင်ဂျင်နီယာ ဒေါက်တာ ချိုဝင်းမော်အား ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ သဘောမှာ နောင်တက်မည့် အရပ်သားအစိုးရသို့ လွှဲချိန်တွင် အရပ်သား ဒေါက်တာ ချိုဝင်းမော်လက်ထက်ကျမှ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဌာနကြီး ပြိုလဲသွားရသည်ဆိုသည့် အဖြစ်မျိုးရောက်ရန် ဦးအောင်သောင်းက ကြံစည်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော် ၀န်ကြီးဌာနတခုလုံးရှိ အရာထမ်းများ ပြောဆိုနေသည်။
၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်း ဆေးကုသမှုခံယူရန်အတွက် လောလောဆယ် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်နေသည်ဟု ဦးအောင်သောင်း၏ လက်ထောက်တဦးက ပြောသည်။
စာမေးပွဲ စစ်ဆေးမှု ပုံမှန်ဟု မြင်းခြံဆရာမပြော
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စာမေးပွဲအခန်းထဲသို့ စာရွက်စာတမ်းများ ခိုးဝှက် သယ်ယူလာခြင်း မရှိစေရန် ၁ဝ တန်း ကျောင်းသူ/သားများအား ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အကြမ်းပတမ်း စစ်ဆေးနေသည်ဟု ပြောဆိုချက်များမှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံမြို့ အထက ၃ မှ ဆရာမတဦးက ငြင်းဆိုသည်။
ကျောင်းဝင်းဂိတ်၊ စစ်ဆေးဆောင်နှင့် စာဖြေခန်း ဟူ၍ သုံးနေရာ ခွဲကာ နေ့စဉ် စစ်ဆေးရာ အထက ၁ နှင့် ၃ တွင် ရှာဖွေပုံမှာ ကြမ်းတမ်းလှသည်ဟု ကျောင်းသားများနှင့် မိဘများက မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသည့်အပေါ် ဆရာမက ငြင်းချက် ထုတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဂိတ်ဝင်အဝ၌ သာမက သီးသန့်အခန်း၌လည်း ထပ်ရှာသေးသည်ဟု သူက အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။ သီးသန့်ဆောင် ရှာဖွေမှု ပြီးသော်လည်း စာဖြေခန်းထဲ မဝင်ရသေးဘဲ ကျောင်းကစားကွင်းလယ် မြေကြီးပေါ်၌ ၈ နာရီခွဲ သံခေါင်းခေါက်သည်အထိ ထိုင်စောင့်ကြရသည်။ ထို့နောက် စာဖြေခန်းထဲတွင်လည်း ဘောပင်၊ ပေတံ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များအား ထပ်မံစစ်ဆေးပြန်သည်။
မီးဘေး ကာကွယ်ရေးသတင်း ငွေမရှိ၊ တီဗွီက မလွင့်နိုင်
ရန်ကုန်တိုင်း မီးသတ်ဦးစီး၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်မှု မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီအတွင်းက မြန်မာတနိုင်ငံလုံး မီးလောင်မှုအကြိမ်ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်က မြန်မာကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သင်တန်းပေး
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သော မြန်မာက ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန် ဂျပန်အစိုးရက မြန်မာအရာရှိများကို ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ပေးနေသည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ ဒီမိုကရေစီသို့ ပြောင်းလဲရေး လမ်းပြမြေပုံကို ထောက်ခံသည့် အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မြန်မာအရာရှိ ၅ ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပုံနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင်တန်းကို ဂျပန်က ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲများကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ ကျင်းပရတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတရပ်ကို မြန်မာစစ်အစိုးရက စေလွှတ်တဲ့ အရာရှိ ၅ ဦးကို ပေးနေတယ်ဆိုတာ ကျမ သိပါတယ်” ဟု မြန်မာ့သတင်းကွန်ယက် (ဂျပန်) (Burma Information Network – Japan) ၏ ဂျပန်လူမျိုး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ယူကီ အာကီမိုတို (Yuki Akimoto) က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရွေးကောက်ပွဲကို ဂျပန်က အင်တိုက်အားတိုက် ထောက်ခံနေခြင်းကို တွေးမိသည့်အခါ အလွန်ဝမ်းနည်းရကြောင်း သူမက ဆက်ပြောသည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံတွင် အဆင့် ၅ ဖြစ်သည်။
လမ်းပြမြေပုံကို ထောက်ခံသည့်မူဝါဒအား ဂျပန်က တလျှောက်လုံး ကိုင်စွဲလာခဲ့သဖြင့် ယခုလို လျှို့ဝှက်သင်တန်း ပေးနေသည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်လာသည့်အပေါ် မြန်မာ့အရေး အကဲခတ်များကမူ မအံ့သြကြပါ။
လွပ်လပ်မျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပပေးရန် ဂျပန်က တိုက်တွန်းနေပြီး ထိုသို့ ကျင်းပပေးခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ယုံကြည်လျက်ရှိသည်ဟု အာကီမိုတိုက ပြောသည်။
သို့သော် အာရှတိုက်၏ ခိုင်မာတောင့်တင်းဆုံး ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးအနေဖြင့် စစ်အစိုးရ၏ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံကို သေချာစွာ အနီးကပ် လေ့လာသင့်ကြောင်းနှင့် အားလုံး ပါဝင်နိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်တရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် တိုက်တွန်းသင့်ကြောင်း သူမက ပြောဆိုသည်။
ရှမ်းတဲကြီးရွာအနီး ရေနံထွက်ရှိခြင်း မမှန်ကန်
ရန်ကုန်တိုင်း လှည်းကူးမြို့နယ် လေးထောင့်ကန်အနီး ရှမ်းတဲကြီးကျေးရွာအပိုင် ဦးသန်းထွန်းပိုင် လယ်ကွက်တွင်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များထွက်ရှိနေ၍ သက်ဆိုင်ရာမှ သွားရောက်တိုင်းတာစစ်ဆေးကာ ထိုလယ်မြေများကို သိမ်းယူလိုက်ခြင်းကြောင့် လယ်ပိုင်ရှင်မှာ ရူးနေကြောင်း၊ နစ်နာကြေး တဧက (၂) သောင်းနှုန်းသာပေးမည် ဖြစ်သည့်အတွက် လယ်သမားတဦးအပေါ် အခွင့်အာဏာနှင့် အဓမ္မအနိုင်ကျင့်နေကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြပါရှိပြီးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထွက်ရှိနေသည့် လယ်ကွက်သည် လေးထောင့်ကန်ကားလမ်းမကြီးမှ တမိုင်သာသာခန့်သာ ကွာဝေးကြောင်း၊ အောင်ကေဒါ ကြက်မွေးမြူရေးခြံနှင့် အင်ကြင်းမြိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တို့ အနီးတွင် ရှိကြောင်း၊ တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းခွင်သို့ ၀င်ခွင့်မရဘဲ အပြင်မှ လေ့လာ၍တော့ရကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေတူးဖော်ရေးဝန်ထမ်း အယောက် (၂၀) ခန့်ဖြင့် နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်း နေကြောင်း၊ တူးဖော်ရေးစက်ပစ္စည်းအတင်အချနှင့် ၀န်ထမ်းအသွားအလာများခြင်းကြောင့် လယ်ယာမြေတချို့ မြေသားလမ်းဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။ “တူးနေတုန်းပဲ။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထွက်မယ် မထွက်ဘူး။ စီမံကိန်းအဆင့်ရရှိမယ်လည်း မပြောနိုင်သေးဘူး။ ထွက်နိုင်တယ်လို့ စမ်းသပ်တွေ့ရှိရတာကိုး။ ဘယ်လိုစမ်းသပ်လဲဆိုတော့ (၂) မိုက်အနက်မြေကို တောက်လျှောက် တူးလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ရှာဖွေရေးစက်ကလေး လွှတ်လိုက်တယ်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှိနိုင်တဲ့နေရာကျတော့ အဲဒီ စက်က ရပ်သွားရော။ ဒီတော့ အဲဒီနေရာကို ကွင်းပြီး တူးနေတယ်။ စီးပွားဖြစ်ရနိုင်တယ် မရနိုင်ဘူး ခုအနေအထားမှာ ပြောမရသေးဘူး။ မရနိုင်ရင် ပြန်ဆုတ်သွားမှာပါ” ဟု ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေရေး ၀န်ထမ်းတဦးကပြောကြားသည်။
ရမည်းသင်း မှောင်ခို ရွှေမှော် ပိတ်ပြီ
ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ရမည်းသင်းမြို့ မိုးထိမိုးမိတောင် ရွှေမှော်တွင် ရွှေရှာခြင်းကို အာဏာပိုင်များက ပိတ်ပင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြန်လာသူ ရွှေမှော်သမားများက ပြောသည်။
“မိုးထိမိုးမိတောင် စီမံကိန်း” သည် ရမည်းသင်းမှ မိုင် ၃ဝ ခန့်ကွာဝေးပြီး ရွှေမှော်အတွင်းမှ တားမြစ်နယ်မြေအတွင်း တူးနေကြသူများကို ယခင်က ဒေသခံရဲနှင့် သတ္တုတွင်း ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများက လာဘ်ငွေယူ၍ ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ယခုအခါ တူးခွင့်မပေးတော့ခြင်းဖြစ်သည်။
“အရင်ကတော့ နားလည်မှုကို လုပ်လို့ရတယ်။ အခုဟာက အဲဒီလိုမျိုး မရတော့ဘဲနဲ့ အဲဒီအထဲမှာ နေထိုင် လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူအကုန်လုံး လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့ မောင်းထုတ်တာ။ လူတွေရဲ့ တဲတွေဆိုလည်း မီးရှို့တယ်။ စက်ပစ္စည်းတွေဆိုလည်း သိမ်းတယ်ပေါ့။ တချို့လည်းဖမ်းတယ်။ တချို့လည်း ထောင်ချတယ်ဗျ” ဟု သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကျင်းပိုင်ရှင်အချို့သည် ရွှေငါးမူးသားခန့်ပါ ဗြုန်းအိတ်ဖြင့် တနေ့လျှင် အိတ် ၅ဝ အထိပင် ရရှိကြပြီး ဗြုန်းတအိတ်ကို ငွေကျပ် ၉ သောင်းအထိ တန်သည်ဟု သိရသည်။
လာဘ်ငွေကို ရွှေထွက်နှုန်းပေါ် မူတည်၍ ရွှေကျင်းပိုင်ရှင် တဦးချင်းက တနေ့လျှင် (၅-၁ဝ) သိန်းအကြား ပေးကြရသည်။
သို့သော် ယခင်လဆန်းမှစ၍ မောင်းထုတ်ခံကြရသဖြင့် တရားဝင် တူးခွင့်ရသည့်နေရာသို့ ပြန်သွားသူ တချို့ရှိသော်လည်း အများစုမှာ မှော်အတွင်းမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြသည်။
တားမြစ်နယ်မြေအတွင်း လာဘ်ငွေပေး၍ ခိုးတူးနေကြသည်မှာ တနိုင်တပိုးသမားများသာမက သူရိန်နိုင်၊ တိုးပွားမန်း၊ တစ်သုံးလုံး၊ မြန်မာစိုးမိုး၊ ချမ်းငြိမ်းရွှေစင်၊ အေးငြိမ်းမွန် စသည့် ကုမ္ပဏီများလည်း ပါဝင်သည်။
ပဲဈေး အေးစက်၊ ကုမ္ပဏီများ ဆက်လက်ဖွဲ့ခိုင်းနေ
ပြည်ပ၀ယ်လက်မရှိခြင်းကြောင့် ပြည်တွင်းပဲဈေးကွက် အေးနေပြီး နအဖအစိုးရက နယ်ကုန်စည်ဒိုင်များတွင် ပဲဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများ ဆက်လက်ဖွဲ့ခိုင်းနေကြောင်း အညာဒေသခံပွဲစားများက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်တွင် ပဲကုန်သည်အချို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှု ရှိခဲ့ပြီးနောက် ပဲဝယ်ယူတင်ပို့ရာတွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့လုပ်ကိုင်ရန် UMFCCI မှတဆင့် အစိုးရက ဖိအားပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် တလပိုင်းက အိန္ဒိယမှ ပဲတန်ချိန်ရှစ်သောင်းဝယ်ယူမည့် သတင်းများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိ်န်ထိ အိတ်စ်ပို့ဆွဲလက်မရှိသေးဘဲ ပြည်တွင်းခွဲစက်သမားအနည်းအကျဉ်းသာ ၀ယ်ယူနေသေးကြောင်း အညာဒေသခံပွဲစားများက ပြောသည်။
ပြည်မြို့မှာ ကြက်သားကြက်ဥ ပြန်ရောင်းပြီ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ကြက်လည်လိမ် သေဆုံးမှုကြောင့် ကြက်သား၊ ကြက်ဥ ရောင်းဝယ်ခွင့်ကို ပဲခူးတိုင်း ပြည်မြို့တွင် တလခွဲခန့် ပိတ်ပင်ခဲ့ရာမှ ယခုလဆန်းတွင် ပြန်လည် ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ အရောင်းအဝယ်များ တားမြစ်ခဲ့ရာမှ ယခုလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
''မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှာက ဥတွေ ပြန်ရောင်းခွင့် ပေးလိုက်တယ်။ ၄ ရက်နေ့က အသားတွေ ပြန်ရောင်းခွင့် ပြုလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ ဇန်နဝါရီလကနေဆိုတော့ တလကျော်ကျော်ပေါ့နော်။ ဇန်နဝါရီ ၂၇ မှာက ရောင်းခွင့် ပိတ်လိုက်တယ်။ နယ်ကူးမှု၊ စားသုံးမှု နည်းနည်းလေး control လုပ်ကြည့်လိုက်တာ။ အခုတော့ ရောဂါကင်းသွားလို့ ရောင်းခွင့်ပြုလိုက်တာ'' ဟု မြို့နယ် တိရစ္ဆာန် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ဒေါက်တာ အောင်သန်းဝင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ မြို့တွင်းရပ်ကွက်များနှင့် နီးစပ်ရာ ဒေသများရှိ ခြံ ၂၄ ခြံမှ ကြက်ကောင်ရေ ၉ဝဝဝ ကျော်နှင့် ငုံးကောင်ရေ တသောင်းကျော် သုတ်သင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မူယာပင်ရပ်ကွက်မှ ဒေသခံတဦးကလည်း “သူတို့ ပြောတာတော့ ပြင်းထန်တဲ့ ကြက်လည်လိမ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာ ကြားတာက ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးပေါ့။ အဲလိုဖြစ်လို့ ကြက်ခြံတွေမှာရော ကြက်တွေ သေလို့ အရောင်းအဝယ် ပိတ်ခဲ့တာ၊ အခု ပြန်ဖွင့်တာ မကြာသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
ကြက်သားဈေးမှာ မွေးမြူရေး၊ အသားစားကြက် (စီပီ) တပိဿာသည် ကျပ် ၃၅ဝဝ မှ ၅ဝဝဝ အထိရှိပြီး၊ တိုင်းရင်းကြက်ခေါ် အိမ်မွေးကြက် ဈေးနှုန်းမှာ ကျပ် ၇ဝဝဝ မှ ၈ဝဝဝ ဈေး ရှိသည်။ ကြက်ဥဖောက်သည်ဈေးမှာမူ တလုံးလျှင် ၈၅ ကျပ်နှင့် ရောင်းဈေးမှာ ကျပ် ၁ဝဝ ရှိသည်။
ပျက်လုံးတွေအပေါ် အငြိမ်ကခွင့် မပေးသည်အထိ အငြိုးထား
မွန်ပြည်နယ် သဘင်ကောင်စီသည် ပြည်နယ်အာဏာပိုင် သဘင်ကောင်စီဗဟိုနှင့် ပေါင်းကာ ယခုနှစ်သဘင်ရာသီမှ စတင်၍ မော်လမြိုင်အခြေစိုက် ဇာတ်အဖွဲ့များ၊ ပဒေသာကပွဲများကို အငြိမ့်ကခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည်ဟု ၀ါရင့်သဘင် ပညာရှင်တဦးက ပြောသည်။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့တွင် ပြည်နယ်သဘင် ကောင်စီတာဝန်ရှိသူများနှင့်ငွေရှင်များက လူရွှင်တော်အသားပေး အငြိမ့်အဖွဲ့များသည် နိုင်ငံရေးပျက်လုံးများ၊ အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခွထွက်သော ပြက်လုံးများကြောင့် မလိုလားအပ်သော ပြသာနာများဖြစ်လာနိုင်သဖြင့် အငြိမ့်ကခွင့် ပိတ်ပင်ပေးပါရန် ဗဟိုသို့တောင်းဆိုခြင်းကြောင့် အငြိမ့်ကခွင့် ပိတ်ပင်ခံ ရခြင်းဖြစ်သည်။
မော်လမြိုင်မှ ဇာတ်မင်းသားကြီးတဦးက “ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးဖြစ်တော့ မော်လမြိုင်မှာ ဘုန်းကြီးတွေ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက်ကြတော့ မော်လမြိုင်က နာမည်ကြီးလူရွှင်တော် (ပွင့်ကောင်း) ဟာ ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ လိုက်ပြီး ၀တ်ကြီးဝတ်ငယ်ဖြည့်တယ်။ အဲ့ဒါကို ထောက်လှမ်းရေးတွေ ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းမှာ သူ့ပုံပါလာတော့ တိုင်းမှူးသက်နိုင်ဝင်းက မွန်ပြည်နယ်သဘင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတိုင်းကျော်ကိုခေါ်ပြီး ပွင့်ကောင်းကို ခင်ဗျားတို့သဘင် ကောင်စီကနေ ရာသက်ပန်ထုတ်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဇာတ်အဖွဲ့တွေပွဲ ကခွင့်အပိတ်ခံမှာ လားဆိုပြီးပြောတော့ ပွင့်ကောင်းတယောက် လမ်းဘေးရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ မော်လမြိုင်က နာမည်ကြီးမင်းသား တလက် သူများသမီးပျိုတဦးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာကို မော်လမြိုင်သဘင်ကောင်စီက ငွေနဲ့ညှိပြီး အဲ့ဒီ မင်းသားကို ပွဲကခွင့်ရာသီဝက်ပဲ ပိတ်လိုက်တယ်။ အခုသူပြန်ကနေပြီး ပွင့်ကောင်းကတော့ လမ်းဘေးမှာပဲ။ ဒါတွေဟာ လုံးဝမတရားမှုတွေပါ” ဟုပြောသည်။
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်သည် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ယနေ့တွင် အလည်အပတ် ရောက်ရှိနေကြောင်း စင်္ကာပူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အဆိုအရ သိရသည်။
စင်္ကာပူ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အရာထမ်းတဦးက ပြောကြားရာတွင် နအဖဝန်ကြီးချုပ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျကာတာမြို့မှ စင်္ကာပူသို့ အင်္ဂါနေ့က ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အသေးစိတ်ကို ပြောကြားရန် အရာရှိက ငြင်းဆန် လိုက်သော်လည်း ဌာနက ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်သည် စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လွန်းနှင့် ယာယီ သမတ ဂျေ ဝိုင် ပီလေးကိုလည်း တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် စင်္ကာပူ၏ သြဇာရှိ ဝါရင့်ဝန်ကြီး ဂိုချုပ်တောင်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံမှာ ဖြစ်သည်။
မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်သည် ဝန်ကြီး ၅ ဦး၊ ဒုဝန်ကြီး ၂ ဦးနှင့် အခြားသော ဌာနဆိုင်ရာ အရာထမ်းများနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်ပါလျှက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ခရီးထွက်ခဲ့ရာ အင်ဒိုနီးရှားသို့ ဦးစွာ သွားရောက် လည်ပတ်ခဲ့ပြီး သမတ ဆူဆီလို ဘန်ဘမ်း ယူဒ်ရိုယိုနိုနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သတင်းများအဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နှင့် ယူဒ်ရိုယိုနိုတို့သည် နှစ်နိုင်ငံ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ခိုလှုံခွင့် တောင်းခံသော ရိုဟင်ဂျာများ အကြောင်းလည်း ထဲ့သွင်း ဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မတ်လ ၁၈ ရက်
ဗိုလ်သိန်းစိန်အား စင်္ကာပူ တိုက်တွန်း
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး မြှင့်တင်ရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀န်းနှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် မြန်မာစစ် အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ရဲရင့်သည့်ခြေလှမ်းများ လှမ်းရန်လိုပြီဟု စင်ကာပူအစိုးရက တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ ရောက်ရှိနေသည့် ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်အား ညစာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရာတွင် အတိုက်အခံနှင့် သင့်မြတ်အောင်လုပ်ပြီး အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရန် စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီဆန်လောင်းက ယခုကဲ့သို့ တိုက်တွန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အမေရိကန်အစိုးရသစ်က နောက်လာမယ့် (၄) နှစ်သက်တမ်းအတွက် နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီ မဟာဗျူဟာတွေ ဦးစားပေးရမယ့် ကိစ္စတွေကို ပြင်ဆင်နေပြီး ကမ္ဘာ့အခြေအနေကို ပြန်သုံးသပ်နေတာနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့အခင်းအကျင်း တွေ ပြောင်းနေပါပြီ။ ဥရောပကလည်း သူတို့နိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီကို ပြန်သုံးသပ်နေသလို စီးပွားကပ်ဒဏ်သင့်နေ တဲ့ နိုင်ငံတွေကလည်း ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားဒေသတွေက နိုင်ငံတွေနဲ့ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် ဆက်ဆံရမလဲ ရှာဖွေနေချိန်မှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံဖို့၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရှေးရှုတဲ့ ရဲရင့်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းဖို့လိုတဲ့အတွက် ဒီအခြေအနေအခွင့်ကောင်းတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” ဟု လီဆန်လောင်းက ပြောသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အမေရိကန်-ဥရောပ ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးအတွက် စင်ကာပူအနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီသွားမည်ဟုလည်း စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ် လီဆန်လောင်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်အား ပြောသည်။
အမေရိကန်က အာဆီယံအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲရန် ဖိအားပေးစေလိုသော်လည်း မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို စင်ကာပူက ဆန့်ကျင်သည်။ သို့သော် စင်ကာပူသည် မြန်မာဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ လျှို့ဝှက် ဘဏ်စာရင်းများ လက်ခံထားသည့် အိမ်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းက စွပ်စွဲသည်။
၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်အား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် စင်ကာပူ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တွင် သစ်ခွကင်ပွန်းတပ်ပွဲ ကျင်းပရာ စင်ကာပူနိုင်ငံသား (၃) ဦးက ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ပန်းစည်းတစည်း လက်ဆောင်ပေးရန် ကြိုးစားခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သစ်ခွပန်းအား အမျိုးသားပန်းမြတ်အဖြစ် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အထွတ်အမြတ်ထားသည်။ သစ်ခွကင်ပွန်းတပ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ စင်ကာပူသို့ အလည်အပတ် လာရောက်သည့် နိုင်ငံတကာမှ ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် သစ်ခွအမည်နောက်တွင် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအမည်ကို တပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ်က နာမည်ကျော် အိန္ဒိယ ရုပ်ရှင်မင်းသား အမီတာဘာချမ်း စင်ကာပူရောက်စဉ် ၎င်းအား ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် Dendrobium သစ်ခွမျိုးစပ်ပန်းကို ကင်ပွန်းတပ်ပွဲလုပ်ရာ ထိုပန်းအမည်မှာ Dendrobium အမီတာဘာချမ်း ဖြစ်သွားသည်။
သိန်းစိန် သစ်ခွ ကို စင်္ကာပူ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတို့ လက်မခံ
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စင်္ကာပူတွင် ဒင်ဒရိုဘီယမ်သစ်ခွ အမည်ရှိ သစ်ခွပန်းတမျိုးကို မြန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်၏ အမည်ပေးသည်ကို ကန့်ကွက်ရန် စင်္ကာပူ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ယနေ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
ကျွန်းနိုင်ငံ၏ သစ်ခွဥယျာဉ်တွင် ကျင်းပသည့် အဆိုပါ အမည်ပေးပွဲသို့ စင်္ကာပူမှ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ မစ္စတာ Seelan Palay ၊ မစ္စတာ Chia Tilik နှင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ မစ္စတာ Ho Choon Hiong တို့က သွားရောက်ကာ ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြသရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ပွဲချိန်နှင့် လွဲခဲ့ကြရသည်။ မစ္စတာ Chia Tilik က ''ကျနော်တို့ ပန်းခြံကို ရောက်သွားတော့ ပွဲက ပြီးသွားပါပြီ။ သူတို့က အစီအစဉ်ထဲကအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ အချိန်စောလုပ်တဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ၉ နာရီရီကျော်လောက်မှာ မြန်မာသံရုံးကို သွားပေးတော့ တယောက်မှ ထွက်မယူပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ပန်းတွေနဲ့ စာကို သံရုံးရှေ့မှာပဲ ထားခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ အမှတ်လက္ခဏာတခုဖြစ်သော သစ်ခွပန်း၏ အမည်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကဲ့သို့သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ စစ်မှန်သည့် ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုသာ ပေးသင့်ပြီး အာဏာရှင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦး၏ အမည်ကို မှည့်ခေါ်သည့်အပေါ် လက်မခံနိုင်ဟု လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ရှေ့နေဖြစ်သူ မစ္စတာ Chia Tilik က ဆိုသည်။
သူတို့ ၃ ဦးက မြန်မာဝန်ကြီးချုပ်မှတဆင့် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ သစ်ခွ ၈ ပွင့်နှင့် နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်အား ပေးပို့နိုင်ရန် သစ်ခွဥယျာဉ်သို့ ယူဆောင် သွားခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန်တွင် အကြီးဆုံး ကုန်တိုက် ဖွင့်
ပြည်တွင်းစီးပွားရေး ကျဆင်းနေချိန်ဖြစ်သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့တွင် East Point ဟု အမည်ရသည့် အကြီးဆုံး Shopping Center တခုကို မဟာဗန္ဓုလ တံတားအဆင်း ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၌ ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။ မြို့ခံတဦးက “ခုဖွင့်လိုက်တဲ့ ကုန်တိုက်က ပြည်လမ်းနဲ့ မင်းဓမ္မလမ်းဆုံမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ North Point ကုန်တိုက်နဲ့ ကုမ္ပဏီတခုတည်းပဲ။ အထပ် (၃) ထပ်ပါတယ်။ တွန်းလှည်းနဲ့ တက်ဆင်းလို့ရတဲ့ စက်လှေကား (၂) စင်း၊ လူစီး စက်လှေကား (၄) စင်း ပါတယ်။ အဆောက်အဦအောက်မှာ ကားပါကင် လုပ်ထားတယ်။ အောက် နှစ်ထပ်ကတော့ နာမည်ကြီး စီးတီးမတ်အုပ်စုရဲ့ Ocean ကုန်ပဒေသာဆိုင်ကြီး၊ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်နဲ့ အခြား ကုမ္ပဏီတွေကို ဆိုင်ခန်းတွေ ဖွင့်ခွင့်ပေးထားတယ်။ နောက် ပွဲတွေ လုပ်လို့ရတဲ့ ဟောခန်းကြီးလည်း ပါတယ်။ ရောင်းတာကတော့ ပုဇွန်ခြောက် ငါးခြောက်ကအစ၊ လက်ဖ်တော့ ကွန်ပျူတာ အလယ်၊ စိန်ထည်အဆုံး ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအမည် စုံတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဈေးထဲရောက် တားမြစ်လက်ဖက်များ ကုမ္ပဏီတွေ ပြန်သိမ်းယူရမည်
ရန်ကုန်။ ။ အန္တရာယ်ရှိသည့် တားမြစ်ဆိုးဆေး အသုံးပြုသည့် လက်ဖက်ကုမ္ပဏီများကို ဈေးများတွင် ပေးသွင်းပြီးဖြစ်သည့် လက်ဖက်များကို ပြန်သိမ်းရန် အစားသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနက ယခုအခါ ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
နာမည်ကြီး လက်ဖက်များဖြစ်သည့် အရီးတောင်း၊ ပင်ပျိုရွက်နု အပြင် အခြားလက်ဖက် အမှတ်တံဆိပ် စုစုပေါင်း ၄၃ မျိုးတွင် လူကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့် အဝါရောင်ဆိုးဆေး Auramine O အသုံးပြုထားကြောင်း ယခုလ ၁၂ ရက်နေ့က တွေ့ရှိပြီးနောက် ယခုဌာန FDA က ယခုလို ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့ကို recall ပြန်လုပ်ခိုင်းထားတယ်။ ဒီ product တွေက မကောင်းဘူး။ recall လုပ်ပြီးတော့မှ သူတို့ brand တွေမှာ ဒါတွေ မပါရဘူးပေါ့နော်။ အဲဒါပြီးမှ ထုတ်ခွင့်ပြန်ပေးမယ်လို့ သူတို့ကို ပြောထားတယ်” ဟု FDA ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ ဒေါက်တာကျော်လင်းက ပြောသည်။
အဝါရောင် ဆိုးဆေးပါသည်ဟု သတ်မှတ် ကြေညာခံထားရသည့် အမည်မဖော်လိုသူ လက်ဖက်ကုမ္ပဏီတခုမှ ပိုင်ရှင်တဦးကလည်း လက်ဖက်များကို ပြန်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း လုပ်ပြီးမှ ပြန်လည် ရောင်းချခွင့်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုကြောင်း ယခုလို ပြောသည်။
အဝါရောင်ဆိုးဆေး Auramine O သည် ချည်၊ သိုးမွှေး၊ ပိုးထည်၊ စက္ကူနှင့် သားရေများကို အရောင်ဆိုးရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆိုးဆေးဖြစ်သည့်အတွက် တာရှည်စားသုံးသူများကို အသည်းနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်စေသည့်အပြင် ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလက်ဖက်က ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအစာဖြစ်တယ်။ လူအများကြီးက စားတယ်ဆိုတော့ Risk ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာ” ဟု ဒေါက်တာ ကျော်လင်းက ပြောသည်။
လေလံပစ် ယာဉ်များကြောင့် ကားဈေးကွက် ပျက်
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဗဟိုစက်ပစ္စည်းနှင့် စာရင်းအင်း ထိန်းသိမ်းမှု ဦးစီးဌာမှ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသော လိုင်စင်မဲ့ Without ယာဉ်များ တဖက်နိုင်ငံခိုး ကားများကို လေလံတင်ရောင်းချနေသည့်အတွက် ပြင်ပကား အရောင်းအ၀ယ်ဈေးကွက် လုံးဝပျက်နေကြောင်း သိရသည်။
“အခုလေလံပစ်နေတယ်ဆိုတာ နယ်စပ်က အလကားနီးပါးရတဲ့ကားတွေ ပြန်ရောင်းတာကို စီးပွားရေးသမားတွေ ဆွဲကြမှာပဲ။ လေလံဝင်တဲ့သူတွေကလည်း နအဖပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းတွေပဲ။ ကျသင့်ခွန် တခါတည်းပေး သွင်းရတော့ ငွေဖြူငွေမည်း ပြဿနာလည်း ကင်းသွားတယ်။ အခွန်၊ လိုင်စင်၊ ၀ှီးတက်၊ ကြိုက်တဲ့မြို့နယ် ဆီဖြည့် အားလုံးအပြီးအစီးရတယ်။ တခါတလေ သူတို့ လေလံဈေးတွေက အပြင်ပေါက်ဈေးထက်တောင် များနေသေး တယ်။ မများတောင် Level ရှိတယ်။ Toyota Mark II တို့။ Mitsubishi Pajero တို့ဆို အပြင်ဈေးထက် များနေ တယ်။ လားရှိုးလေလံပွဲတုန်းက…။ အခု စက်မှု (၂) က ပစ်တဲ့ Pajero (၄၇၀) သိန်းဆိုတာ ခု ကားဈေးတန်းမှာ လုံးဝမရှိတဲ့ဈေး။ ၂၀၀၈ Double Cap (တရုတ်ကား) ဆို လိုင်စင်ရုံး သိန်း (၇၀) ပေးလိုက် အကုန်အပြီးအစီး ရတယ်။ Hilux ပုံမျိုး တရုတ်ပြည်က ခိုးဝင်တာ” ဟု လေလံပွဲတက်ရောက်ခဲ့သူတဦးက ဆိုသည်။
လေလံပွဲများကို မန္တလေး၊ မုံရွာ၊ လားရှိုး၊ တောင်ကြီး၊ မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင် အလှည့်ကျကျင်းပနေပြီးလျှင် ယခုအခါ ၁/ဂ (ဂငယ်) ယာဉ်များ လေလံတင်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်၍ ယာဉ်စီးရေ (၄,၀၀၀) ကျော်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သက်ဆိုင် ရာဌာနကို ငွေ (၂) သောင်း ပေးလိုက်ပါက လိုချင်သည့် လိုင်စင်နံပါတ် ရနိုင်ကြောင်း၊ မပေးပါက ၎င်းတို့ချပေးသော နံပါတ်သာရကြောင်း၊ လေလံပွဲမစတင်မီ ကားများ ပြသထားသော်လည်း လေလံအောင်ပြီး ကားဆွဲယူပါက မူလပစ္စည်းအတော်များများ ပါလာသည်ကိုမတွေရကြောင်း၊ အပိုပစ္စည်း ပါမလာတော့ကြောင်းကိုလည်း မည်သူ့ကိုမှ မပြောရဲကြောင်း၊ မကြာမီရက်ပိုင်း ၂/ဂ (ဂငယ်) များ လေလံပစ်ဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း လေလံကားတချို့ကို ၀ါယာရင်းကိုင်ပေးသူ ဆရာတဦးက ဆိုသည်။
ကျောက်မျက်ပြပွဲ ကွန်ဗင်းရှင်း စင်တာတွင် ကျင်းပ
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ပြပွဲနှင့် ရောင်းချပွဲကို သီးသန့် ဖိတ်ကြားထားသည့် နိုင်ငံခြား ကျောက်မျက်ရတနာ ကုမ္ပဏီများမှ ကျောက်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပနေသည်။
မြန်မာ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာတွင် ယခုလ ၈ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ၂ဝ ရက်နေ့အထိ ၁၂ ရက်ကြာ ကျင်းပမည့် ၄၆ ကြိမ်မြောက် ပြပွဲသို့ တက်ရောက်ကြမည့် ကျောက်ကုန်သည်များကို မြန်မာသံရုံးများမှ ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြပွဲသို့ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ ဟောင်ကောင်တို့မှ ကုန်သည်များ အဓိက လာရောက်ကြသည်။
သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုကို အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ်ခဲ့သဖြင့် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန် အစိုးရက အမေရိကန်နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများထံ ကျောက်မျက် တင်ပို့မှုနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်းများကို ပိတ်ဆို့ အရေးယူသည့် ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြသည်။
ထိုပြဋ္ဌာန်းချက်ကို Block Burmese JADE (Junta’s Anti-Democratic Efforts) ခေါ် (စစ်အစိုးရက ဆန့်ကျင်သည့် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျ အားထုတ်မှု) ဆန့်ကျင် ပိတ်ဆို့ခြင်းဟု ခေါ်သည်။
ကျောက်မျက်ရောင်းချပွဲမှ ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တနှစ်ဝင်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃ဝဝ ကျော်ရှိသည်ဟု အမေရိကန်အစိုးရ စစ်တမ်းတွင် ပါရှိသည်။
ယခုအခါ ကမ္တာ့ငွေကြေးပြဿနာ ရိုက်ခတ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောက်မျက်ဈေးကွက်မှာ သိသာစွာ ရောင်းအား ကျဆင်းနေသည်ဆိုသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ယူရိုငွေ သန်းပေါင်း ၁၃ဝ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၅ဝ) ကျော်ဖိုး ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကင်တားနား အစီရင်ခံစာအပေါ် မြန်မာအစိုးရ အပြစ်တင်
မန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်ကင်တားနား၏ အစီရင်ခံစာကို မတ်လ (၁၇) ရက်မနက်ပိုင်း၌ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၌ ဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
အဆိုပါသတင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကင်တားနား တွေ့ရှိခဲ့သည့်အပိုင်း၊ မြန်မာစစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်က ပြန်လှန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ကင်တားနားအစီရင်ခံစာအပေါ် (၂၂) နိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်များက ပြန်လည်ဆွေးနွေးချက်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများ လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ တိုးတက်စေရန် စစ်အစိုးရနှင့် အပြုသဘောဆောင်သည့် ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ကင်တားနားက ပြောသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဓိကအချက်လေးချက်ကို ပြုပြင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
ကင်တားနားအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား သံအမတ်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ဖြေရှင်းရာတွင် ၎င်းအစီရင်ခံစာ၌ အစိုးရလုပ်သည့် တည်ဆောက်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်း မဖော်ပြဘဲ ဘက်လိုက်မှုရှိနေကြောင်း၊ အစီရင်ခံစာပါ စွပ်စွဲချက်များတွင်လည်း မြန်မာစစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်နေသည့် သောင်းကျန်းသူ အကြွင်းအကျန်များ၊ အန်ဂျီအိုများလေသံနှင့် တထေရာတည်း ဖြစ်နေကြောင်း၊ ယုံကြည်ချက် ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ (၂,၀၀၀) ကျော်ရှိသည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် မကြာခဏဖော်ပြနေသော်လည်း ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ တဦးမျှမရှိကြောင်း ချေပပြောဆိုသည်။
ကင်တားနား၏ အစီရင်ခံစာအပေါ် (၂၂) နိုင်ငံမှ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးရာ...
-မြန်မာနိုင်ငံတွင်း တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးမှုအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း၊
-မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီဒီယာကို စိစစ်မှု၊
-၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်ခွင့်ရရေး၊
-လူမျိုးစုများအား ခွဲခြားဆက်ဆံမှု စသည့်အချက်များကို ထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတော်များများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား (၂,၂၀၀) ကို အမြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထိုပြင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အဖွဲ့အစည်းအားလုံး ပါဝင်ခွင့်မရဘဲ စစ်အစိုးရကို တရားဝင် အောင် လုပ်ပေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်းလည်း ထောက်ပြသည်။
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပွဲစဉ်ကို မေလမှာ စတင်မည်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ပရောက်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံး ကလပ်အသင်းများ ထူထောင်ပြီး ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲ ဖြစ်လာမည့် မြန်မာ နေရှင်နယ်လိဂ်၏ ဘောလုံးပွဲစဉ်များကို လာမည့် မေလတွင် ပထမဆုံး စတင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။
၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်းက မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် MNL ကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဘောလုံးအကြောင်း တတ်သိ နားလည်သူများ စုပေါင်းကာ ဘောလုံးအသင်းများကို နိုင်ငံအဆင့် အသင်းများ ဖြစ်လာစေရန် စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့ကလည်း မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်အသင်း ကစားသမားများကို ယခင်က သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများတွင် ကစားနေရာမှ ပုဂ္ဂလိက ဘောလုံးကလပ် အသင်းများသို့ ကူးပြောင်းသည့် တရားဝင် အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်ရေး အပြီးသတ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။
ပြောင်းရွှေ့ကြေးအဖြစ် အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၅ဝ သိန်းနှင့် တလ လစာအဖြစ် အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၁ဝ သိန်းအထိ နာမည်ကြီး အားကစားသမား ၅ ဦးကို ပထမအသုတ်အဖြစ် ပေးခဲ့သည်ဟု ယနေ့ထုတ် မြန်မာစစ်အစိုးရထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကလပ်အသင်း ကစားသမားများကို သင်ပေးရန် နိုင်ငံခြားသားများ ဌားရမ်းခွင့်နှင့် ကစားသမားများ အပါအဝင် တသင်းလျှင် နိုင်ငံခြားသား အများဆုံး ၅ ဦးအထိ ခေါ်ယူနိုင်သည်။ ဘောလုံးကလပ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းသည် အနာဂတ် မြန်မာဘောလုံး အလားအလာ ကောင်းရန် လုပ်သည့်အပြင် မြန်မာတမျိုးသားလုံး ဘောလုံးကစားလာရန် လုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ဆိုသည်။
မတ်လ ၁၉ ရက်
ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစိုးရကို ဦးခင်ရွှေ ဝေဖန်
လက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး မတ်လ (၁၄) ရက်က ကျင်းပသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (၁၁) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၌ ဇေကမ္ဘာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ဦးခင်ရွှေက ၁၉၉၆-၉၇ ထိုင်းနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေပြဿနာကစသည့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ဆောက်လုပ်ထားပြီး ရောင်းမထွက်သည့် အဆောက်အဦများ၊ တိုက်ခန်းများကို အစိုးရပိုင်းက ယာယီ ဝယ်ယူပေးခြင်း၊ အမြတ်ခွန်နှင့် ဘဏ်တိုးနှုန်းများ လျှော့ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြေလည်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ ကြောင်း ဆိုသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်သဘော လုပ်ထားသည့် လှည်းတန်းလမ်းမှ လေယာဉ်ကွင်းနားအထိ စီမံကိန်းဝင် အဆောက်အဦ (၆ဝ) ကျော်ကိုလည်း ၂ဝဝ၉ နှစ်ကုန်၌ အပြီးလုပ်ပါ့မည်ဟု အတင်းအကျပ် လက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းခဲ့ကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် အားလုံးက လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့သော်လည်း မည်သူမှ ပြီးမည်မဟုတ်ကြောင်း ဦးခင်ရွှေက ပြောသည်။
ဦးခင်ရွှေ၏ ပြောကြားချက်များကို ခြုံငုံကြည့်ပါက အခြားနိုင်ငံတို့တွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များကို အစိုးရပိုင်းက နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး အကူအညီပေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ လုပ်ငန်းရှင်များကို လုံးဝညှာတာမှုမရှိဘဲ အစိုးရက သူ့ဘက်က သူရစရာရှိသည်များကို ယူနေခြင်းသာရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များက ရှင်းပြကြသည်။
အန်ဒီအေ-ကေ လက်နက်ချရန် အသင့်ရှိ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရအသစ်က လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို စွန့်လွှတ်ရန် ပြောလာပါက သူတို့အနေဖြင့် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း တရုတ်မြန်မာအခြေစိုက် ကချင်တိုင်းရင်းသား သူပုန်အဖွဲ့တခုက ကြေညာလိုက်သည်။
သူတို့၏ တောင်းဆိုချက်များ ရရှိမည်ဟု သေချာပါက လက်နက်ချရန် အသင့်ရှိနေကြောင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော်-ကချင် (NDA-K) ကို တည်ထောင်သူနှင့် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ စခုန်တိန်ယိမ်းက အင်္ဂါနေ့က ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
NDA-K သည် ထိုအချိန်က နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ (SLORC) နှင့် ပထမဆုံး အပစ်ရပ်ရေး သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့သော ကချင် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၈၉ ခုနှစ်က သဘောတူခဲ့သည်။ သူပုန်ခေါင်းဆောင်သည် သူတို့၏ တောင်းဆိုချက်များကို ရွေးကောက်ခံ အစိုးရသစ်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မည် ဟူသော လေသံဖြင့် ပြောဆိုသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် မကြာသေးခင်လများက အပစ်အခတ်ရပ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် သူပုန်အဖွဲ့အားလုံးကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ လက်နက်ချရန် ဖိအားပေးမှုများ တိုးမြှင့်လုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့တပ်ဖွဲ့များကို နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲ၍ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်ဟု သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
သို့သော် စစ်အစိုးရသည် ယခုအထိ မည်သည့်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုမျှ လက်နက်ချရန် နားမချနိုင်သေးပါ။ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ကချင်ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်နယ်မြေတွင် အခြေစိုက်သော NDA-K ကို ယခင် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) အရာရှိများဖြစ်သော စခုန်တိန်ယိမ်းနှင့် လယောက်ဇော်လွန်းက ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။
သို့သော် သတင်းရပ်ကွက်များကမူ NDA-K သည် အပစ်အခတ်ရပ် သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးနောက် နိုင်ငံရေးထက် စီးပွားရေးကိုသာ ပိုမိုအာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အချိန်ပြည့် လက်နက်ကိုင် ကေဒါများကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းမျိုး မရှိတော့ကြောင်း ပြောသည်။
NDA-K သည် စစ်ရေးနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် အင်အားချည့်နဲ့သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်းလည်း အဆိုပါ သတင်းရပ်ကွက်က ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
ကိုဇာဂနာ ခဲအဆိပ်သင့် ဝေဒနာ ခံစားနေရ
မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ မောင်သူရခေါ် လူရွှင်တော်ဇာဂနာသည် ထောင်တွင်း၌ ခဲဓာတ်ပါသည့်ရေကို သောက်သုံးနေရပြီး ခဲဆိပ်သင့်ဝေဒနာ ခံစားနေရကြောင်း မတ်လ (၁၁) ရက်က ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့သည့် ခယ်မ မငြိမ်းက ပြောဆိုသည်ဟု မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
အင်းစိန်ထောင်မှလွဲ၍ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့က စစ်အစိုးရအကျဉ်းထောင်များ သောက်ရေသန့် သောက်သုံးသည့် အလေ့အထမရှိဘဲ ထောင်တွင်းတူးဖော်ထားသည့် ရေတွင်းများမှ ရေကိုသာ သောက်သုံးလေ့ရှိသည်။ အကျဉ်း ထောင်အများစုကို မြန်မာနိုင်ငံအား ဗြိတိသျှ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ခဲ့စဉ်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အကျဉ်းသားများ သောက်သုံးသည့်ရေထဲတွင် ခဲဓာတ်ပါဝင်သည်ဟု ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီမညီ၊ သောက်သုံးရန် သင့်မသင့် စသဖြင့် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မျိုးလည်း မရှိဘူးဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာန အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပဲခူးမြို့ ဥဿာမြို့သစ် ပင်စည်ယာယီဈေးအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ ဝက်သား ဖမ်းဆီးရာ ဝက်သားဟင်းရောင်းသူ အမျိုးသမီးကို စစ်အရာရှိ၊ ဈေးစည်ပင်နှင့် ဝက်သားလိုင်စင် ယူထားသူများက ယခုလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရိုက်နှက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ပဲခူးအခြေစိုက် တပ်မ ၇၇ မှ စစ်ရေး ဦးစီးအရာရှိ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမြင့်အောင် (အရပ်ခေါ် ဂျီသရီး) ၏ ကားနံပါတ် ဇ/၉၅၃၆ (စစ်ရောင် - Double Cup) ဖြင့် ဝက်သားလိုင်စင် ယူထားသူ ဦးတင်သိန်း၏ အလုပ်သမား ၇ ဦးခန့်သည် ညနေပိုင်းတွင် ဈေးသို့လာပြီး ဈေးစည်ပင်ဝန်ထမ်းနှင့်အတူ ဟင်းဆိုင်ကို ဖျက်သလို၊ ဆိုင်ရှင် မစန်စန်းလှကိုပါ ရိုက်နှက် ထိုးကြိတ်ခဲ့သည်။ ပဲခူးမြို့မှ ရှေ့နေ ဦးအေးမြင့်က “လာဖမ်းတဲ့ ဗိုလ်ကြီး မျိုးမြင့်အောင်နဲ့ စည်ပင်သာယာက စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး ကိုသန်းဝင်း မူးနေတယ်။ ဘာမှ တာဝန်မရှိသူတွေက နင် လိုက်ခဲ့၊ ဖမ်းတယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ရှင်တို့ မူးရူးနေတာ ကျမ မလိုက်နိုင်ဘူး ပြောတော့ မစန်းစန်းလှကို ရိုက်နှက်တာ” ဟု ပြောသည်။
ဆိုင်ကိုဖျက်ရာတွင် ဗိုလ်ကြီးလည်း ပါဝင် ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းနှင့် လိုင်စင်မဲ့ ဝက်သား ဖမ်းရာ ဝက်သားအစိမ်းသာ ဖမ်းခွင့်ရှိပြီး၊ ချက်ထားသည်ကို ဖမ်းမရကြောင်း သူက ဆိုသည်။
ဒေါ်လာဈေး ရုတ်တရက် မြှင့်တက်
မကြာခင်က တဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေ (၁,၀၁၀) ကျပ် ခန့်သာရှိရာမှ မတ်လ (၁၈) ရက် ညနေပိုင်းတွင် တဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေ (၁,၀၅၀) ကျပ်၊ (၁,၀၆၂) ကျပ်ထိ မြင့်တက်သွားသည့်အတွက် (၃) ရက်အတွင်း မြန်မာငွေ (၅) ရာခိုင်နှုန်း ကျသွားသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်ရှိ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း (ဘားလမ်း) ရှိ ဒေါ်လာအရောင်းအ၀ယ်လုပ်သူများက ရုတ်တရက် အ၀ယ်လိုက် လာကာ ဈေးခုန်တက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ပြီး မည်သည့်အကြောင်းရင်းကြောင့် ဈေးတက်သည်ကို တိတိကျကျ မသိကြောင်း ပြောကြသည်။
ဘောဂဗေဒစီးပွားရေး ပညာရှင်တဦးက သုံးသပ်ရာတွင် သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက် Trading money ၀ယ်ယူသူများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ ဒေါ်လာဈေးတက်သည့်အတွက် ရန်ကုန် ရွှေဈေးကွက်တွင် ယမန်နေ့က အကယ်ဒမီအခေါက်ရွှေ တကျပ်သားလျှင် (၅) သိန်း (၂) သောင်းထိ တက်လာကြောင်း ရွှေဈေးကွက်အတွင်းက သိရသည်။
မိုးဖျက်၍ ဆားဈေး ခုန်တက်
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မြို့နယ်များတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် အိမ်သုံးဆားဈေးများ နှစ်ဆခွဲအထိ ထိုးတက်သွားသည်။
လပ္ပတ္တာ၊ ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံမြို့တို့အပြင် အခြားဒေသများတွင် ယခုလ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်နေ့တွင် လေပြင်း ကျရောက်ခြင်းနှင့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် အိမ်သုံးဆားဈေးများမှာ ယခင် တပိဿာလျှင် ကျပ် ၈ဝ မှ ယခုအခါ ကျပ် ၂ဝဝ အထိ ဈေးတက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုလို အဆမတန် ဈေးတက်သွားရခြင်းသည် ရာသီချိန်ခါ မဟုတ်ဘဲ မိုးရွာသွန်းခဲ့သဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ဆားလုပ်ငန်းအချို့ ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းရသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် ဆားဒိုင်များကလည်း ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁ဝ ရက်ခန့်က ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဆားဒိုင်များက ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ဆားတပိဿာလျှင် ၁ဝဝ ကျပ် ပေးဝယ်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုအခါတွင် ၁၆ဝ ကျပ်အထိ မြှင့်တက်သွားပြီး၊ အိမ်သုံးစား တပိဿာလျှင် ကျပ် ၃ဝဝ ရောင်းဈေးရှိကြောင်း ဆားလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
မတ်လ ၂၀ ရက်
ထိုင်းမြန်မာ စစ်ဖြစ်လျှင် မနိလာစာချုပ်အရ ထိုင်းဖက်က အမေရိကန် ၀င်တိုက်ပေးဖို့များ
အမေရိကန်အစိုးရသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနှင့်ဖြစ်နေသည့် ပြဿနာများ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိသကဲ့သို့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် စစ်ပွဲများဖြစ်လာပြီဆိုပါက ၁၉၅၄ ခုနှစ် မနီလာ စာချုပ်အရ အမေရိကန်အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိမှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု အမေရိကန် ကွန်ဂရက်ကို တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာတစောင်တွင် ထောက်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နှင့်ထိုင်းသည် အရှေ့တောင်အာရှ စုပေါင်းကာကွယ်ရေးစာချုပ် (၁၉၅၄ ခုနှစ် မနီလာသဘော တူညီချက်) အရ စစ်ရေးမဟာမိတ်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး တနှစ်ကို ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့်မှု (၃၀) ခန့် လုပ်ကိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကာလ၌ အမေရိကန်တပ်များကို ထိုင်းစစ်ရေးအခြေစိုက်စခန်းများ သုံးခွင့် ပေးခဲ့သည့်ပြင် အခြားကိစ္စများ၌လည်း ထိုင်းက အမေရိကန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ် (၇၆) ခုအနက် ပြည်နယ် (၃၃) ခုသည် မြန်မာနယ်စပ်နှင့် နီးကပ်နေသည့်အတွက် မြန်မာနှင့်ဖြစ်သည့် ပြဿနာများသည် ထိုင်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နေသည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တွင် စစ်ပွဲများဖြစ်လာပြီဆိုပါက ၁၉၅၄ ခုနှစ် မနီလာစာချုပ်အရ အမေရိကန်အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိမှုအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု ထောက်ပြထားသော်လည်း ထိုင်း-အမေရိကန် စစ်ရေးမဟာမိတ်စာချုပ်အရ အင်အားသုံးရလောက်အောင် ပြဿနာကြီးထွားမည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ပေါ်ရန် ထိုအချိန်က အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ဟု အစီရင်ခံစာ၌ သုံးသပ်ထားသည်။
တွံတေးတွင် အိုးအိမ်ဆောက်ပေးရေး ဆန္ဒပြ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဆန္ဒပြသူများသည် တွံတေးမြို့နှင့် ၄ မိုင်ခန့် အကွာအဝေးရှိ တဘက်ကမ်း ရေတံကား၏ အနောက်ဘက် ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာမှ ကမ်းနားထိ လမ်းလျောက်ခဲ့ပြီး ကမ်းနားမှ တွံတွေးမြို့သို့ လှေနှင့် ဖြတ်ကူးကာ ကျောက်တံတားမြို့နယ် ဆိပ်ကမ်းမှ ကြက်ခြေနီရုံးသို့ မိနစ် ၃ဝ ခန့် လမ်းလျှောက် ချီတက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
နာဂစ်လေဘေးသင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် ကြက်ခြေနီအသင်းမှ နေအိမ်များ ဆောက်ပေးရာ ဒေသအာဏာပိုင်များက အလွဲသုံးစားလုပ်သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့နယ် ဇီးဖြူကုန်းရွာသား ၂ဝ ခန့်သည် တွံတေးမြို့သို့ ယနေ့ ချီတက်ဆန္ဒပြကြသည်။
ကျောက်တံတား ကားလမ်းမကြီးတလျှောက် ချီတက်လာကြကာ တွံတေးမြို့နယ် အေးချမ်းသာရေး မယက ရုံးရှေ့ရှိ လေဘေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာန တည်ရှိရာသို့ သောကြာနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီခွဲခန့်က ဦးတည်ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဇီးဖြူကုန်းကျေးရွာမှ ဆန္ဒပြသူများထဲတွင် ကိုအံသီး၊ ကိုမြင့်လွင်၊ ကိုဇော်ဝင်း၊ ဒေါ်ကြည်၊ ဦးမြင့်ဌေး၊ ဒေါ်တရုတ်မ၊ ဦးအောင်မိုးကျော်၊ ဒေါ်ဌေးဝင်း၊ ဒေါ်အေးသွယ်၊ ဦးအေးနိုင်၊ ဒေါ်ကြည်အေး၊ မောင်အေးစန်း (အညာသား)၊ ကိုအောင်ဝင်းနိုင်၊ ဒေါ်သာပင်၊ ဦးမျိုးထွန်း၊ မခင်မျိုးနွယ်၊ ဦးမောင်သန်းတို့ ပါဝင်သည်။
သူတို့ကို တွံတေးမြို့နယ် အန်အယ်ဒီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ဖေက ဦးဆောင်လာခဲ့ခြင်းပြီး အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မင်းထွန်း၊ မြို့နယ်စည်းအဖွဲ့ဝင် ကိုအောင်စိုးဝေနှင့် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်များက ဝန်းရံပေးထားသလို၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကလည်း စောင့်ကြပ်ခဲ့သည်။
တွံတေး ဆန္ဒပြသူများ လူစုခွဲ
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အိုးအိမ် ပျက်စီးသွားခဲ့ရသူများက မြို့နယ်ကြက်ခြေနီရုံးရှေ့တွင် ၅ နာရီကျော် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနောက် လူစုခွဲလိုက်ကြသည်။
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၄ နာရီတွင် မဇ္ဈိမသတင်းထောက်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်း တွံတေးမြို့မှ အိုးအိမ် ပြန်ဆောက်ပေးရေး ဆန္ဒပြနေသူများသည် မြို့နယ် ကြက်ခြေနီရုံးရှေ့တွင် ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေကြသည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒေါ်တရုတ်မ ဦးဆောင်သော ဆန္ဒပြသူ စုစုပေါင်း ၂၂ ဦးရှိလာပြီး ကြက်ခြေနီဝန်ထမ်း တဦးကတော့ ” သွားရင်သွား၊ မသွားရင် ဥပဒေအရ အရေးယူမည်” ဟု ပြောဆိုနေသည်ကို ကြားသိရသည်။ ဆန္ဒပြသူ နှစ်ဦးတိုးလာရာ ဦးကြာသိုက်နှင့် ဒေါ်အေးလူတို့ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အစာငတ်ခံနေသည်ဆိုသော ဆန္ဒပြသူများက တောင်းဆိုချက်များကို ကြက်ခြေနီ ဝန်ထမ်းတဦးကို ပေးအပ်လိုက်ပြီး မြို့နယ်ဥက္ကဌ ဦးအောင်စံသာနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခွင့်ပြုရန် တောင်းဆိုထားသည်။ မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီရုံး အဖွဲ့များ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုမရှိဘဲ ရုံးတွင်းမှ ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်နေပြီး ကြက်ခြေနီများကိုသာ ဆန္ဒပြသူများကို မောင်းထုတ်ရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
နာဂစ် သောင်တင် ဂျပန်သင်္ဘော၊ ကြယ်ငါးပွင့်က အလကားရ
နာဂစ်ကြောင့် ပုသိမ်မြို့အနီးက သမီးလှကျွန်း ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် ကိုယ်ထည်အားလုံးတင်နေခဲ့သော ဂျပန် ECM ကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောကို ကြယ်ငါးပွင့်က အလကားရခဲ့ကြောင်း ကြယ်ငါးပွင့် အရာထမ်းတဦးက ပြောသည်။
သင်္ဘော၏ တန်ချိန်မှာ (၉,၈၀၁) တန်ရှိပြီး ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းတွင် အသုံးချမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ကျောက်ဆောင်ပေါ်ကို တင်သွားပြီးတဲ့နောက် ဂျပန်ကုမ္ပဏီက လာပြီး စစ်ဆေးတယ်၊ နောက်ပြီး စွန့်လွှတ်လိုက် တယ်ပေါ့။ ဒါနဲ့ ကြယ်ငါးပွင့်ကို လွှဲခဲ့တာပါ” ဟု ၎င်းအရာထမ်းက ပြောသည်။
ယခုကာလပေါက်ဈေးဖြင့် တွက်ချက်ပါက သင်္ဘောတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၀) သန်းနှင့် (၁၂) သန်းကြား ရှိမည်ဟု ရေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
၎င်းသင်္ဘောကို ရန်ကုန်ဆင်မလိုက် သင်္ဘောကျင်းတွင် ဒေါက်တင်၍ ပြုပြင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသင်္ဘောပြင်ဆင် ပြီးလျှင် ပြည်ပလိုင်းကို ပြေးဆွဲမည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါသင်္ဘောကို ၁၉၉၁ ခုနှစ် မေလတွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများကို ပြေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အင်းစိန်ထောင်တွင် ကလေးများကို ချုပ်နှောင်ထားမှု ရာဇဝတ်မှုဟု ရှေ့နေကောင်စီ ပြောဆို
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ အင်းစိန်ထောင်ကျ ကလေးများကို သီးသန့် သင်တန်းကျောင်းသို့ မပို့ဘဲ အင်းစိန်ထောင်မှာပင် ထားခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ က ရှုတ်ချ ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ရာဇဝတ်မှု အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကျနေသည့် အသက် ၁၄ နှစ်ကလေးငယ်များကို စာသင်ကြားပေးနေသည်ဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာန တာဝန်ရှိသူတဦးက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလှသော ထောင်တွင်းကလေးများကို ချုပ်နှောင်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂ဝဝ၅ ခု ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်မှ စတင်ကာ အင်းစိန်ထောင်တွင်း အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂ဝ နှစ်ထိ အကျဉ်းသားကလေးများကို သူငယ်တန်းမှသည် စတုတ္တတန်းအထိ ပညာသင်ပေးခဲ့သည်ဟု အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်လက အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လွတ်လာသူ စမ်းချောင်းမြို့နယ် အန်အယ်ဒီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသက်ဝေကလည်း ထောင်တွင်း ကလေးများရှိနေကြောင်း ပြောသည်။ “အင်းစိန် ထောင်ထဲမှာ ကလေး အကျဉ်းထောင်ဆိုတာ ရှိတယ်။ စစ်ခွေးတိုက်နဲ့ အလုပ်ဘက်ဝင်း ကြားမှာပေါ့နော်။ မူလတန်းကျောင်းကနေ အလယ်တန်းထိလောက်။ သင်တဲ့ ဆရာတွေက အကျဉ်းကျနေတဲ့ ဘွဲ့ရ ပညာတတ်တွေ သင်ပေးနေတာ။ အသက်အရွယ်ကတော့ များသောအားဖြင့် ၁၃၊ ၁၄ နှစ်ကနေ ၁၉၊ ၂ဝ နှစ် အရွယ်ရှိတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
အကျဉ်းဦးစီးအရာရှိ အပြောအရ ကလေးအဆောင်များမှာ လူကြီးအဆောင်များနည်းတူ ဆောက်လုပ်ထားပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ခိုင်းစေခြင်း၊ စာသင်ချင်သည့် ကလေးအကျဉ်းသားများကို စာသင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ရန်ကုန် ၀န်ထမ်း သက်သာဆိုင်များအား ဖျက်ခိုင်း၊ ငှားရမ်းဝယ်ယူသူများ နစ်နာ
ပြည်ထဲရေးလက်အောက်ခံမြို့နယ်အသီးသီး၏ ရဲစခန်းပတ်လည်ရှိ ၀န်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းများအား မတ်လကုန် အပြီး ဖျက်သိမ်းပေးရမည်ဆိုသော ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ နစ်နာကြေး တစုံတရာမရရှိဘဲ ဆိုင်ခန်းသုံးပစ္စည်းများကို မတ်လ တတိယပတ်မတိုင်မီ စတင်ရွှေ့ပြောင်းနေကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက် မြို့နယ်ရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတို့က ၀န်ထမ်းသက်သာ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်များ အား ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းက အသိပေးပြောကြားခဲ့ပြီး မတ်လကုန်ရွှေ့ပြောင်းပေးရမည်ကို သိရှိကြောင်း ခေါ်ယူ လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။ အမှတ် (၁၇) တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရဲစခန်းပတ်လည်တွင် ၀န်ထမ်းသက်သာဆိုင်ခန်းပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ရှိပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်မှာ (၁၅) နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင်က မျက်နှာစာ (၉) ပေ၊ အရှည်ပေ (၃၀) ခန့် တခန်းကို သက်ဆိုင်ရာသို့ (၁) သိန်းခွဲသာ ရန်ပုံငွေသွင်းရကြောင်း၊ နားလည်းမှုဖြင့် လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချလာရင်း ယခုအခါ လူစည်ကားရာ သုမင်္ဂလာလမ်းမတန်း တခန်း သိန်း (၂၀) ၀န်းကျင်၊ သစ္စာလမ်းမပေါ် (၁၈) သိန်းခန့်၊ ဓမ္မရာဇာလမ်း တခန်း (၈) သိန်း ခန့်တို့ဖြင့် ရောင်းဝယ်ကာ ဆိုင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်ထားကြကြောင်း၊ တချို့ ငွေရှင်များက ဆိုင်ခန်းဝယ်ယူထားပြီး တလ နှစ်သောင်းခွဲမှ ငါးသောင်းအထိ လူစည်ကားရာ အချက်အချာ နေရာအလိုက် ငှားရမ်း ကြကြောင်း သိရသည်။
စစ်ဆေးမှု ကြန့်ကြာရာမှ ရေထွက်ကုန်များ ဆုံးရှုံးနေကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များ ပြော
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ ပြည်ပတင်ပို့မည့် ရေထွက်ပစ္စည်း ကွန်တိန်နာများကို ဆိပ်ကမ်းတွင် အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က စစ်ဆေးရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု ဖြစ်လွန်းသဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေသည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
အချိန်နှောင်းသဖြင့် ဝယ်လက်ကို လျော်ပေးရမှုများပင် ရှိနေသောကြောင့် စစ်ဆေးချိန်ကာလကို အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း ပြည်ပကို ရေထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်တဦးက မဇ္စျိမကို ယခုလို ပြောသည်။ သို့သော် အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေး ဌာနဘက်က ဝန်ထမ်း မလုံလောက်မှုနှင့် အာဏာရှိသူများ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ရှိနေခြင်းက မြန်ခြင်း၊ နှေးခြင်း အကြောင်းအရာ ပေါ်ပေါက်လာစေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဌာနမှ အရာထမ်းတဦးက " အထက်က ညွှန်ကြားချက် ပေးထားတယ်။ ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အာမခံချက်ရရင် X-Ray စက်ကို မဖြတ်နဲ့လို့ ပြောတာရှိတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရတော့ မပါဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ပြည်ပသို့ ထွက်နေသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများတွင် အဖိုးတန် ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်ရတနာများ ခိုးဝှက်သယ်ဆောင်မှုများ ရှိနေသည်ဟု နယ်စပ်တာဝန်ကျ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးဟောင်းတဦးက ပြောသည်။ ပြည်ပ ရေထွက်ကုန် ပင်လယ်အစားအစာ တင်ပို့ရာတွင် မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနနှင့် အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာတို့၏ စစ်ဆေးချက်များကို ယူရသည်။
ဂုဏ၀ိသိဋ္ဌ ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ ကြော်ငြာ ထည့်ခွင့်မပြု
ဥပ္ပါတသန္တိစေတေီ ထီးတင်ပွဲအပြီးတွင် ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ဆက်ကပ်ခြင်းခံခဲ့ရသော သံဃာတော်များ၏ ဂုဏ၀ိသိဋ္ဌ ဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲ အခမ်းအနား ဖိတ်ကြားလွှာ ကြော်ငြာများကို အစိုးရပိုင်သတင်းစာများက ဖော်ပြခွင့်မပြုကြောင်း ရန်ကုန်သံဃာတော်တပါးက မိန့်ကြားသည်။
“ဦးဇင်းတို့ကျောင်းက ဆရာတော်တပါးက ဘွဲ့ရတယ်လေ။ အဲဒါပူဇော်ပွဲလုပ်ဖို့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေကို ဖိတ်ကြားတဲ့ အကြောင်း သတင်းကြော်ငြာလေးသွားထည့်တာပေါ့။ လက်မခံဘူးတဲ့။ ထည့်လို့မရဘူးတဲ့။ မြန်မာ့အလင်းရော၊ ကြေးမုံမှာပါ ထည့်လို့မရဘူးတဲ့။ ၀န်ကြီးက ထည့်ခိုင်းမှ ထည့်လို့ရမယ်။ ၀န်ကြီးကိုသွားပြောလို့ ပြောတယ်။ ဦးဇင်းတို့ကတော့ အခုသူတို့ သတင်းစာတွေမှာ အပါယ်ရတနာဖြစ်နေတယ်လေ။ သူတို့ပင့်ချင်တဲ့အခါပင့် မလိုတဲ့ အခါ ပယ်ထားတဲ့ အပါယ်ရတနာ” ဟု သံဃာတော်က မိန့်သည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ သတင်းစာနှင့် စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖုန်းကိုင်ဖြေကြားခြင်းမပြုပေ။
သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ဆက်ကပ်မှုများကို ယခင်က ကမ္ဘာအေးမဟာပါသဏလှိုဏ်ဂူအတွင်း ကျင်းပခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သာသနာ့မဟာဗိမာန်တော်ကြီး၌ ပြောင်းရွေ့ကျင်းပခဲ့သည်။
ခံစည်းရိုးကာခြင်းသည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဖြစ်သည်ဟု အကဲခတ်များပြော
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အဆိုပြုထားသော မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တလျှောက် ခြံစည်းရိုး ကာရံရေးသည် ဒေသတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာ လူနည်းစုများ၏ လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် စစ်အစိုးရ၏ အစီအစဉ် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု အကဲခတ်များက ပြောသည်၊
မြန်မာ စစ်အာဏာပိုင်များသည် မြန်မာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တလျှောက် ခြံစည်းရိုး ကာရေးအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်ဟု နယ်စပ်အနီးတွင် နေထိုင်သော သတင်းရပ်ကွက်များက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းရပ်ကွက်၏ အပြောအရ မြန်မာ စစ်အစိုးရသည် ကီလိုမီတာ ၅ဝ ရှည်လျားသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် တလျှောက် သံဆူးကြိုးကာရံရန် ပြင်ဆင်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ဤခြံစည်းရိုးသည် ရိုဟင်ဂျာများ၏ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သွားလာမှုများကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် ကုလားတန် သတင်းကွန်ရက် မှ အယ်ဒီတာ ဦးတင်စိုးက ပြောသည်။ ဤရိုဟင်ဂျာများကို ထိုင်း၊ အိန္ဒိယနှင့် အင်ဒိုနီးရှား အာဏာပိုင်များက ပင်လယ်တွင်းမှ ကယ်ယူခဲ့ရပြီးနောက် မကြာသေးမီက ဒေသတွင်း စိုးရိမ်ပူပန်စရာ ကိစ္စတရပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင် လူနည်းစုသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသော မောင်းတောမြို့နယ်တွင် အမျာစု နေထိုင်ကြပြီး၊ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသို့ မကြာခဏ ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ကြသည်ဟု သူက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအခြေစိုက် နေရဉ္စရာ သတင်းဌာနမှ လက်ထောက်အယ်ဒီတာ ဦးထွန်းကျော်ကမူ ဤခြံစည်းရိုးသည် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ကန့်သတ် ထိန်းချုပ်ရုံသာမဟုတ်၊ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ထဲတွင် ပြုလုပ်မည့် အမေရိကန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲ ပင်လယ်ပြင် ကင်းလှည့်မှုနှင့်လည်း ဆက်စပ်နေနိုင်ကြောင်း ပြောသည်။ နယ်စပ်အနီး နေထိုင်သော သတင်းရပ်ကွက်များက ပြောရာတွင် အာဏာပိုင်များသည် မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဘက် နယ်စပ်မြို့ မောင်တောတွင် စစ်တပ်အင်အားများ တိုးမြှင့်ချထားသည်ဟု ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက် ခြံစည်းရိုးကာရံရာတွင် လုံခြုံရေး ယူပေးရန် ဤသို့ တိုးမြှင့်ချထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဇာဂနာ့ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး ကွယ်လွန်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်များကို ကူညီမှုပြုရင်း အဖမ်းခံရသူ နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ၏ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦးမှာ ယနေ့ညတွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်သွားသည်။
ဇာဂနာ့ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦးသည်းခြေပြွန်လမ်းကြောင်းတွင် ကင်ဆာဖြစ်ပွား၍ ဝေဒနာခံစားနေရသူ အသက် ၈၃ နှစ်အရွယ် စာရေးဆရာမကြီးသည် သောကြာနေ့ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးစိတ်ပြင်းထန်သော သားဖြစ်သူကို စစ်အစိုးရက အကြိမ်ကြိမ် ထောင်ချခဲ့သော်လည်း ဆရာမကြီးသည် တွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိဘဲ သတင်း မီဒီယာများကို မေးသည်ကို ရဲဝံ့စွာ အစဉ်အမြဲ ဖြေကြားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဆရာမကြီး၏ ဆန္ဒအရ ရုပ်အလောင်းကို မနက်ဖြန် စနေနေ့တွင် သဂြိုလ်မည်ဟု မိသားစုဝင်များက ပြောသည်။
ကွယ်လွန်ချိန်တွင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးအောင်သိန်း ခေါ် စာရေးဆရာကြီး နန်းညွန့်ဆွေ၊ သားများဖြစ်သော ကိုတေဇ နှင် ကိုဇာဂနာတို့ ကျန်ရစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းများ ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း ကျဆင်းမည်
Myanmar Teleport သည် ပြည်တွင်းရှိ အင်တာနက် လိုင်းများ မြန်နှုန်း ကျဆင်းမှု ရက်ပိုင်းမျှ ဖြစ်ပေါ်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့မှ (၂၅) ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အင်တာနက် ကြည့်ရှုမှုနှင့် Email အသုံးပြုမှုများ နှေးကွေး လေးလံနေမည်ဟု Myanmar Teleport ကဆိုသည်။
International Connection Backbone Fiber-Optic Cable ကြီးဖြစ်သည့် SEA-ME-WE3 အား ပြန်လည် မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သောကြောင့် ယခုလို မြန်နှုန်း ကျဆင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Myanmar Teleport က အကြောင်းပြဆိုသည်။
ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေချိန် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှုကို အရံ ဆက်ကြောင်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရန် စီမံ ပေးထားမည် ဖြစ်ပြီး အရေးပါသည့် E-Mail ဆက်သွယ်မှုများ မနှောင့်နှေးစေရန် ဂရုတစိုက် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု Myanmar Teleport က ထပ်လောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
( လူထုအသံမှ ကောက်နှုတ်ချက် )
ကျန်းမာရေး အထောက်အကူ ချို့တဲ့မှုကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အန္တရာယ်ရှိဟု AAPP-B ပြော
နယူးဒေလီ။ ။ သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ချို့တဲ့ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကျန်းမာရေး ချွတ်ယွင်းရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းရင်းတရပ် ဖြစ်သည်ဟု တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ အဖွဲ့တခုက သောကြာနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
မနှစ်မြို့ဖွယ် အကျဉ်းထောင်တွင်း အခြေအနေများ၊ သင့်တော်ကောင်းမွန်သည့် ဆေးဝါးကုသမှု ချို့တဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေရသူများမှာ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးရွားနေကြသည်ဟု ‘နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ - မြန်မာပြည်’ (AAPP-B) ၏ တွဲဘက် အတွင်းရေးမှူး ဦးဘိုကြည်က ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များကလည်း သွားရသည့်ခရီး ဝေးကွာလွန်းခြင်းနှင့် အချိန်နှင့်ငွေ အကုန်အကျ များလွန်းလှခြင်းကြောင့် အကျဉ်းထောင်များသို့ မကြာခဏ သွားရောက် တွေ့ဆုံရန် ခက်ခဲကြောင်း၊ မကြာခဏ ပြဿနာ ဖြစ်ရကြောင်း ပြောကြသည်။
“ဆေးဝါး ကုသဘို့ လိုနေတဲ့သူတွေကို ဆေးမကုပေးဘဲ ထားတာဟာ လူသတ်မှုဘဲ၊ သူတို့ (စစ်အစိုးရ) က နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို တဖြေးဖြေးမျှဉ်းသတ်နေတာ” ဟု ဦးဘိုကြည်ကပြောသည်။
စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းလုံးရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်းကျခံနေရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း အနည်းဆုံး ၂၁၂၈ ဦး ရှိသည်ဟု ပြောပါသည်။
အာဆီယံ ရိုးရာအစားအသောက် အရောင်းပွဲတော် ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်မြို့တွင် အာဆီယံဒေသတွင်း ဆိုင်ရာ ရိုးရာ အစားအသောက် အရောင်း ပွဲတော်တခု ကျင်းပသွားရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း Capital Hypermarket က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယခင်မြို့တော်ဟောင်းတွင် ကျင်းပမည့် သင်္ကြန်အကြို အာဆီယံ ဈေးရောင်း ပွဲတော်တွင် အာဆီယံ ဒေသတွင်း (၁၀)နိုင်ငံမှ ရိုးရာ အစားအသောက်များအပြင် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တိုင်ပေ၊ အိန္ဒိယနှင့် တောင်ကိုရီးယား အစရှိသည့် အာရှနိုင်ငံများမှ ရိုးရာ အစားအသောက် များကိုလည်း ခင်းကျင်း ရောင်းချသွားမည်ဟု သိရသည်။
အစားအသောက် ဈေးရောင်း ပွဲတော်ကို Sponsor ပေးသူများက ယခုပွဲတော်ကြောင့် အရှေ့တိုင်း၏ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများ ပိုမိုခိုင်မြဲစွာ ဆက်ယှက် နီးကပ်လာစေမည်ဟု ယုံကြည်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့မှ ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့ထိ (၁၅)ရက် ကြာအောင် ပြုလုပ် သွားမည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
Posted by လူလ at Sunday, March 22, 2009 No comments:
တလအတွင်း သတင်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက် ( သို့ ) ဖြစ်ပု...
သတင်း မှတ်စု ( ၁၁ )
သတင်း မှတ်စု ( ၁၀ )
သတင်း မှတ်စု ( ၉ )
ဟန်ထူးဈာန် နှင့်အတူ ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားသွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့တဲ့ Miss Maeyasunsun